တဒင်္ဂပျော်ရွှင်ရာ – Grab Love Story
”ဟုတ်ပါ့ဗျား။ နှင်းမြတ်မွန်ပါလား။မတွေ့တာကြာလို့ ပိန်သွားတာလား ဝိတ်ချထားတာလား ဟမ်”
”နှစ်ခုစလုံးပဲ။ကြည့်စမ်း မတွေ့တာတောင်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ခုဘယ်ရောက်နေလဲ။ဘာတွေလုပ်နေလဲ။ ဒီသင်တန်းမှာ ဟိုနေ့ကတွေ့လိုက်လို့ ကိုပိုင်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီး ကြည့်နေတာ။နှုတ်ဆက်မယ်လုပ်တော့ မတွေ့တော့ဘူး။မိန်းမရပြီလား။ကလေးကောရပြီလား”
”အမလေးဗျာ။နှင်းမြတ်မွန်ရယ် မေးလိုက်တာလဲ ရေလေးဘာလေးသောက်ပါဦး။ဘယ်ကစဖြေရမှန်းမသိတော့ဘူး။”
”ခိခိအကုန်လုံးဖြေ။တကတည်း ပျောက်သွားလိုက်တာ ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ။ညီမတို့ကိုတော့ အရင်လိုခင်လို့ရပါတယ်။အဆက်ဖြတ်ထားပြီး မခင်ချင်တော့တာလား”
”မဟုတ်ပါဘူးအေ။ဒီလိုပါပဲ။ညည်းအားတယ်မဟုတ်လား။တခုခုသောက်ရင်းပြောကြတာပေါ့” ”အင်း အားပါတယ်။သွားမယ်လေ”
အအေးဆိုင်တခုတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်းစကားပြောဖြစ်ကြသည်။စုံေိတာပင်။ပြန်ခါနီးက နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ facebook အကောင့်ကိုတောင်းကာ သူ့ကိုအပ်လိုက်ပြီး သူမဖုန်းနံပါတ်လဲပေးသည်။
သူလဲ တိုက်ခန်းကို ပြန်ရောက်ပြီး ခဏနားကာ ရေချိုးပြီးအဝတ်လဲကာ ညနေစာစားဖို့ပြင်နေတုန်း ဖုန်းလာသဖြင့် ကိုင်လိုက်ရာ ပိုးပိုး။စကားအတော်ကြာပြောပြီးနောက် သူ အတွေးတွေက အတိတ်ကို ပြန်ရောက်သွားသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရှစ်နှစ်ကျော် ကိုးနှစ်လောက်က သူ ဘူမိဗေဒနဲ့ဘွဲ့ရပြီး အစိုးရဌာနတစ်ခုတွင် အလုပ်ဝင်လုပ်နေရင်း ရန်ကုန်သို့ ဘူမိဆိုင်ရာ သင်တန်းကို ခြောက်လလောက်လာတက်ရင်းနဲ့ ဖြစ်ခဲ့သည့်ကိစ္စတွေပင်။သူက ဧရာဝတီတိုင်း ဖျာပုံနယ်ဖက်ကဇာတိပင်။မိဘတွေကတော့ လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများပင်။ လယ်သမားမျိုးရိုးဖြစ်ပြီး လယ်ဧကများစွာပိုင်ပေမယ့် သူကတော့ လယ်လုပ်ဖို့စိတ်မဝင်စား။အိမ်မှာလဲ သူကသားအငယ်ဆုံး။စာလဲတော်တာမို့ ဘာမှမခိုင်း။သူကလဲ စိတ်မဝင်စားမို့ကွက်တိပင်။အကိုနဲ့ အမကတော့ စာကိုသိပ်စိတ်မဝင်စားပေ။မိဘတွေကိုကူလုပ်ပြီး သူကတော့ ကျောင်းတက်သည်။ဆယ်တန်းအောင်တော့ ဘူမိဗေဒဘာသာကို ယူခဲ့ပေမယ့်ဘာမှန်းသူမသိ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားလာပြီး ကြိုးစားခဲ့တာမို့ မာစတာတန်းပြီးအောင်တက်ခဲ့သည်။ကျောင်းတက်စဉ်ကာလတလျှောက်မှာ မိဘကလဲ ပြေလည်သူမို့ မပူမပင်နေရပြီး ရုပ်ရည်က ကြည့်ကောင်းပြီးအရပ်အမောင်းကလဲ ကောင်းတာမို့ မိန်းကလေးတွေကြိုက်သည့် ယောက်ကျားလေးစာရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကမပါတောင်မှ အလယ်အလတ်တော့ရှိသည်။လူငယ်သဘာဝမို့ ရည်းစားထည်လဲထားပေမယ့် စာကိုတော့ကြိုးစားသည်။မာစတာပြီးတော့ သူလဲ အလုပ်လုပ်ချင်တာနဲ့ ဌာနဆိုင်ရာအလုပ်ခေါ်တော့ဝင်လျှောက်လိုက်ရာ ရပြီးနေပြည်တော်သို့ သူပြောင်းရသည်။အလုပ်ရကာစတော့ ဒုဦးစီးမှုးဘဝနဲ့ တောထဲတောင်ထဲမှာ သွားလာကာ ဆရာသမားသဘာရင့်ဝါရင့်တွေနဲ့
အလုပ်ဝင်ပြီးနှစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ သင်တန်းတက်ရန် ရန်ကုန်သို့လာရသည်။သင်တန်းတက်ရင်း ကွန်ပျူတာသင်တန်းပါ ရောတက်ရင်း
ဆုပြည့်ဆိုသည့်ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ တွေ့ကာ ကြိုက်သွားသည်။ဆုပြည့်က
သူ့ထက်ခုနှစ်နှစ်လောက်ငယ်မည်။စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တက်နေသည်။သူလဲ ဆုပြည့်နဲ့တွေ့မှ အရမ်းချစ်သွားမိသည်။ဆုပြည့်က မလှပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းသည်။သူတွဲခဲ့ ငြိခဲ့ဖူးတဲ့ကောင်မလေးတွေကို ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကလဲမလှ။ပုပုသေးသေးပင်။အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းသလို ကလေးလိုပင်။ တွေ့တာဘယ်လောက်မှမကြာပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်အရမ်းချစ်မိကြသည်။သူသင်တန်းပြီးလို့ ပြန်လာသည်အထိ နှစ်ယောက်သား ဖက်တာနမ်းတာလောက်ပဲရှိခဲ့သည်။သူကလဲ စည်းစောင့်သလို ဆုပြည့်ကလဲ မပေး။သူအရင်ကကောင်မလေးတွေနဲ့တုန်းကတော့ မရ။ဘယ်သူမှအလွတ်မပေး။ဆုပြည့်ကျတော့ အရမ်းချစ်တာကြောင့် မကြည်ဖြူရင် မယူချင်တာလဲပါသည်။သူနေပြည်တော်ပြန်ရောက်ပြီး တစ်လတစ်ခါအနည်းဆုံး ရန်ကုန်ကိုလာကာ ဆုပြည့်နဲ့တွေ့ဖြစ်သည်။ဆုပြည့် ပထမနှစ်ပြီးတော့ ဒုတိယနှစ်စတက်သည့်အခါ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တိုက်ခန်းစုငှါးပြီးနေသည်။ဆုပြည့်နဲ့
ချစ်သည့်သက်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်သည့်နေမှ ဆုပြည့်နဲ့သူ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ခန္ဓာကိုယ်ချင်း ရင်းနှီးခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းအစရှိအနှောင်နှောင် သူရန်ကုန်ရောက်တိုင်း အချစ်လွန်ဖြစ်ကြသည်။နောက်ပိုင်း သူနဲ့ဆုပြည့်သူငယ်ချင်းသုံးယောက်နဲ့ ရင်းနှီးကြသည်။နှင်းမြတ်မွန် ၊ အေးမိစံနဲ့ ပိုးပိုး။ပိုးပိုးက ခုမှပထမနှစ်တက်သည့်သူ။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်နဲ့ ဆုပြည့်က ပထမနှစ်ကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေ။ သူကလဲ ဟာသတွေပြောကာ ရွှတ်နောက်နောက်နေပြီး စကားပြောကောင်းသူမို့ အားလုံးက ခင်သည်။ အကိုတစ်ယောက်လိုစောင့်ရှောက်ကာ ရိုးသားသူမို့ နောက်ပိုင်းတွင် သူတို့လေးတွေကပါ သူ့ကို အရမ်းရင်းနှီးလာကာ ပြောမနာ ဆိုမနာဖြစ်လာရသည်။သူတို့သုံးယောက်လုံးတွင်လဲ ရည်းစားကိုယ်စီရှိကြသည်။ နှင်းမြတ်မွန်က မွန်ကရင်ဗမာစပ်။လူက အသားမဖြူမညို။ခန္ဓာကိုယ်က ငါးပေသုံးလက်မလောက်ရှိပြီး တင်တွေရင်တွေက ဖွံ့ထွားသည်။နည်းနည်းဝသည်လို့ပြောရမည်။အဝတ်အစားဝတ်ရင်တော့ ကိုယ်ကြပ်တွေ ဝတ်တက်တာမို့သိပ်မသိသာပေမယ့် အရမ်းကြပ်သည့်အခါတွင် ဗိုက်ခေါက်တွေနဲ့ခါးဘေးနားကအဆီတွေက သိသာသည်။သူ့ရည်းစာက ဆေးသမားလို့တော့ဆုပြည့်ကပြောသည်။အေးမိစံက အသားကဖြူသည်။အရပ်က ငါးပေနှစ်လက်မလောက်ရှိပြီး တင်တွေရင်တွေက နှင်းမြတ်မွန်လောက်မဖွံ့ပေမယ့်
သူ့ဟာနှင့်သူကြည့်ကောင်းသည်။သူ့ချစ်သူက သူတို့နယ်ကပင်။ကိုးတန်းကတည်းက ချစ်လာကြသည်ပြောသည်။ မိဘတွေကလဲ ရင်းနှိးပြီးသား သဘောတူထားတာမို့ အချိန်တန်ရင်ပေးစားကြမည် လို့သိရသည်။သူနဲ့ နှစ်ခါသုံးခါတော့တွေ့ဖူးကာ သူနဲ့လဲ ခင်သည်။ပိုးပိုးကတော့ အားလုံးထဲမှာအချောဆုံး။ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က မော်ဒယ်တစ်ဦးလိုပင်။တင်နဲ့ရင်က ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ ကြည့်ကောင်းသလို ရုပ်ရည်က အရမ်းလှသည်။ ကျောင်းတွင်လဲ လိုက်သည့်ပေါလှသလို သူတို့နေသည့် ရပ်ကွက်ကကောင်လေးတွေကလဲ လိုက်ကြသည်။ သူ့ကောင်လေးက သူဆယ်တန်းနှစ်က ဖြစ်ခဲ့သည်လို့ပြောသည်။သူ့ကောင်လေးက နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့လုပ်နေသည်လို့ပြောသည်။သူတို့မြို့တွင် ချမ်းသာသည့်စာရင်းဝင်တဲ့သူလို့သိရသည်။
သူရန်ကုန်ရောက်တိုင်း ဆုပြည့်အဆောင်မှာ သူတို့တွေက ချက်ပြုတ်ကာထမင်းဝိုင်းဖွဲ့စားကြရင်း စလိုက်နောက်လိုက်နဲ့ပျော်စရာ။ဘုရားသွားလိုက် ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက် ဈေးပတ်လိုက်အကုန်လိုက်ကြသည်။ တခါတလေ သူတို့အဆောင်မှာအိပ်တက်သည်။တစ်ခါသား သူရန်ကုန်ရောက်တော့ ဆုပြည့်က သူ့အိမ်ပြန်သွားသည်။နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ အိမ်ပြန်သွားတာမို့ အေးမိစံနဲ့ ပိုးပိုးက ကြောက်လို့ဟုဆိုကာ သူ့ကို လာအိပ်ခိုင်းသည်။ဖြစ်ချင်တော့ သူညနေစောင်းရောက်တော့ ပိုးပိုးတစ်ယောက်တည်း။ကြောက်နေရှာသည်။ အသံတောင်မထွက်ရဲ။သူတယောက်တည်းမှန်းသိရင်ကောင်လေးတွေက တံခါလာခေါက်တက်သည်မို့။အေးမိစံက သူ့သူငယ်ချင်းဆေးရုံတင်တာလိုက်သွားသည်တဲ့။သူလဲ ပိုးပိုးကိုမကြောက်ဖို့ပြောရင်း ဘာစားပြီးပြီလဲ မေးတော့ ဘာမှမစားရသေး။ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကြောက့် သူလဲ အပြင်ထွက်ဝယ်ပေးကာကျွေးလိုက်သည်။
သူတို့နှစ်ယောက်တည်း။ဖြစ်ချင်တော့ မီးပျက်သွားတာမို့ သူလဲ ပိုးပိုးကို
စိတ်မပူဖို့အတန်တန်နှစ်သိမ့်ရင်းမကြောက်အောင် စကားလှည့်ပတ်ပြောနေရသည်။အဲ့ချိန်ကတည်းကစပြီး ပိုးပိုးက သူ့ကိုအရမ်းကိုခင်ကာ အစစအရာရာ တိုင်ပင်ကာ အကိုရင်းတစ်ယောက်လိုပင်။ကျန်တဲ့သူတွေကလဲ သူ့ကို လေးစားခင်မင်ကာအရင်ကထက်ပို ရင်းနှီးလာကြသည်။ဆုပြည့်ကလဲ သူ့ကိုအရမ်းချီးကျူးကာ အချစ်ပိုခဲ့သည်။ သူလဲ ဘာသားနဲ့ထုထားသည်မို့လဲ။အရင်ကတည်းက ဇရှိသည့်သူ။တိုက်ခန်းတခုတည်း သွေးမတော်သားမစပ် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်ကို မီးပျက်နေကာသူ့အနားမှာ ကြောက်နေတဲ့ကောင်မလေးကို စိတ်မဖောက်ပြန်ပဲနေမတဲ့လား။သို့သော် သူ့တွင်အသက်လောက်ချစ်ရတဲ့ ဆုပြည့် ရှိတာတကြောင်း၊ မဖြစ်သင့်ဘူးလို့တွေးမိတာလဲပါတာမို့သူပါ အာရုံလွှဲရအောင် လျှောက်ပြောနေတာပင်။ သူနဲ့ဆုပြည့်တို့ ချစ်ခရီးတလျှောက်မှာ အနှောက်အယှက်တစုံတရာမရှိခဲ့သလို သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တွဲ ပြီး ကျန်တဲ့သုံးယောက်ပါ တတန်းတန်းပါလာစမြဲ။နှင်းမြတ်မွန် ဘဲနဲ့ပြတ်တော့ သူတို့ဝိုင်းနှစ်သိမ့်ရသည်။ဆုပြည့်တို့တိုက်ခန်းမှာပင် ဝိုင်ပုလင်းဝယ်ကာ သောက်ကြရင်း နှစ်သိမ့်ကာချော့ရသည်။ပိုးပိုး ချစ်သူနိုင်ငံခြားသွားတော့ သူတို့လိုက်ပို့ကြသည်။ အပြန်ပိုးပိုးကို နှစ်သိမ့်ရသည်။သူတို့သမီးရည်းစား စိတ်ကောက်ကြရင်လဲ ဝိုင်းပြီးချော့ကြသည်။ အေးမိစံတို့ရည်းစားပြသာနာတက်ရင်လဲ သူတို့ပါကြရပြန်သည်။တကယ့်ကိုပျော်စရာအတိပင်။သူကလဲ လစာကအိမ်ပို့စရာမလို လိုရင်အိမ်ကလှမ်းမှာကာသုံးနေတာမို့ အပူအပင်မရှိ။ဒီလိုနဲ့
ုဆု့ပြည့်ကျောင်းပြီးတော့သူ့နယ်ကိုပြန်သွားသည်။သူလဲ ဖားကန့်ဖက်ကိုခဏတာဝန်ကျတာမို့ ပြောင်းသွားရသည်။ ကျန်တဲ့သူတွေနဲ့လဲအဆက်အသွယ်မပြတ်။သူနေပြည်တော်ပြန်ရောက်ပြီး သုံးလကျော်တော့ ဆုပြည့် ရန်ကုန်ကိုလာတာနဲ့ သူလဲ သွားတွေ့ဖြစ်သည်။မတွေ့တာကြာပြီမို့ချစ်သူနှစ်ယောက် အတိုးချချစ်ခဲ့ကြသည်။ အဲ့တုန်းက ဆုပြည့်ကို သူနောက်ပေါက်ပါဖွင့်လိုက်သည်။ဆုပြည့်ကလဲ လိုလိုချင်ချင်ပေးသည်။နှစ်ယောက်သား အချစ်လွန်ကြသည်။အဲ့တုန်းက သူတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ကြတာကိုသိရင် သူပြန်လွှတ်မိမည်မထင်။ ဆုပြည့်ရန်ကုန်မှာငါးရက်လောက်သူနဲ့နေပြီး ပြန်သွားကာနှစ်လလောက်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသေးသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားကာခြောက်လလောက်နေတော့ ဆုပြည့်ထံမှ သူ့ဆီဖုန်းဆက်လာသည်။ သူယောက်ကျားယူတော့မည်။အိမ်ကပေးစားတဲ့သူကိုယူတော့မှာမို့ သူ့ကိုမုန်းဖို့မေ့ဖို့ပြောလာသည်။နောက်ပိုင်းတွင် ဆုပြည့်ယောက်ကျားယူသွားသည်။နှင်းမြတ်မွန်၊ အေးမိစံနဲ့ပိုးပိုးတို့က သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ကြသည်။ဆုပြည့်အမေက နှလုံးရောဂါသည်မို့ မလွန်ဆန်နိုင်လို့ယူလိုက်ရတာလို့်ပြောသည်။သူဆုပြည့်ကိုမနာကျည်း မမုန်းရက်ပါ။ အသည်းနင့်အောင်ချစ်ခဲ့သူမို့ ရင်ကွဲမတက်ခံစားရသည်။အသည်းတွေတစစီကွဲသလိုခံစားရကာ သူအနာဂတ်မဲ့ကာ လမ်းပျောက်ရသည်။သူလဲ စိတ်တေပေလေလွင့်ကာ
သူများမသွားချင်သည့်နေရာတွေကိုသူတောင်းကာပြောင်းသည်။တောထဲတောင်ထဲမှာတေပေလေလွင့်နေသည်။ အသည်းကွဲသည်ဆိုပေမယ့် သူအလုပ်ကိုတော့ စိတ်နှစ်ထားသည်။အလုပ်ချိန်မှာ
အလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ကာလုပ်သည်။သူများထက်ပိုကြိုးစားကာ ပိုလုပ်သည်။ဒါမှ သူဆုပြည့်ကိုမေ့မည်ကိုး။ အလုပ်ပြီးချိန်တွင်အရက်ကို အမူးသောက်သည်။ဒါမှဆုပြည့်ကိုမေ့မည်။
သူများမသွားချင်သောနေရာမှန်သမျှသွားကာ သူတောထဲတောင်ထဲမှာနေသည်။အလုပ်ကြိုးစားသည်။အရက်ကို သောက်သည်။သူအလုပ်ကြိုးစားမှုရဲ့ အကျိုးရလာဘ်ကတော့ လူကြီးတွေရဲ့ သဘောကျခြင်းခံရပြီးရာထူးတိုးသည်။ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိဖြစ်ပြီး ဖားကန့်ဖက်မှာသုံးနှစ်လောက် တာဝန်ကျသည်။သူဆုပြည့်ကို စိတ်မနာပေမယ့် မိန်းမတွေကိုမယုံတော့။ဖားကန့်ဖက်ရောက်တော့ သူအရက်ပြတ်သွားသည်။မပြတ်လဲခံနိုင်မလား အစာအိမ်နဲ့အသည်းကိုထိကာဆေးရုံကိုတက်လိုက်ရသည်။သူ့ဆရာသမားက သူ့ကိုဆူသလို သူအရမ်းလေးစားရတဲ့ ဆရာကတော်က ငိုကာ သူ့ကိုအရက်သိပ်မသောက်ဖို့မှာသည်။သူလဲ အရက်ကိုကြိုက်လို့သောက်တာမှမဟုတ်တာ။ သူလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အနည်ထိုင်လာတာမို့ အရက်ကိုဖြတ်လိုက်သည်။ဖားကန်းရောက်တော့ သူအရက်ကိုလုံးဝမသောက်တော့ပေ။မိန်းမတွေရဲ့အချစ်ကိုကြောက်သွားမိသည်။သူနောက်မှသိလိုက်ရသည်က
ဆုပြည့်မိဘတွေက သူ့ကိုအထင်မကြီး။ဒါကြောင့် ပိုက်ဆံချမ်းသာသည့်သူနဲ့ပေးစားလိုက်တာ။ဆုပြည့်ကလဲ မိဘစကားကိုနားယောင်ကာ သူနဲ့ယူရင် ဆင်းရဲမှာကြောက်သည်မို့ သူ့ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ကာ ယူသွားခြင်းဖြစ်သည်။ဒါကို နောက်ပိုင်းမှသူနဲ့ခင်မင်ရသည့် ဆုပြည့်ရဲ့ အဒေါ်ကပြောလို့သိရခြင်းဖြစ်သည်။ သူမိန်းမတွေကိုတော်တော်အံ့သြမိသည်။ဒါကြောင့်မိန်းမတွေရဲ့အချစ်ကိုမယုံဝံ့တော့။ရည်းစားကိုမထားတော့။ ဝယ်ပဲစားသည်။တန်ဖိုးမထားတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် အရေးတယူတော့မလုပ်။သူစိတ်ကြိုက်လုပ်ချင်လုပ်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူအဲ့ဒီဖက်မှာဆရာကျလာသည်။ဒီကြားထဲ သူနဲ့ခင်မင်ရသည့် ဦးလေးတစ်ဦးက သူ့ကို ဂေါ်လီထည့်ပေးသည်။သူထည့်တော့မထည့်ချင်။အဲ့ဒီဦးလေးက တကယ့်တော်သည်ပြောရမလားပင်။သူ့ကို စိတ်ဝင်စားလာအောင်ပြောတက်သည်။သူလဲ စိတ်ပါလာကာထည့်သည်။အရှင်ထည့်ပေးသည်။သူမယုံ။ ထည့်ပြီးမှသူအံ့သြရသည်။တကယ်ပင်။ဖြုတ်လို့ရသည်။ပြန်ထည့်လိုရသည်ပင်။ဂေါ်လီကို သူစိတ်ကြိုက်ကျောက်ကိုရွေးပေးတော့ အဲ့ဒီဦးလေးက သေချာသွေးကာစိတ်ရှည်လက်ရှည်လုပ်ပေးသည်။သူကို တော့ပြောသည်။သူ့ဘဝမှာ လက်ကုန်ကိုလုပ်ပေးတာလို့ပြောသည်။သူလဲ တော်တော်သဘောကျသည်။ အဲ့ဒီဦးလေးက အဲ့လိုင်းမှာဆရာတစ်ဦးပင်။လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင် အကုန်သိသည်။သူလဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆရာကျသည်မှတ်နေတာ အဲ့ဒီဦးလေးနဲ့တွေ့မှ ဘာမှမဟုတ်ကြောင်းသိလာရသည်။သူလဲ ဦးလှဦးကိုတော်တော်လေးသဘောကျသွားကာ သူ့ကိုဆရာတင်ရသည်။ဦးလှဦးက သူ့ကိုပညာစုံသင်ပေးသည်။ လိင်အားတိုးဆေးတွေ လိင်အဂါင်္ကြီးထွားဖို့တွေ ဘယ်လိုအနေအထားဆိုရင်ဘယ်လိုစသဖြင့် ဗဟုသုတရစရာတွေပြောပြသည်။ဦးလှဦးက တိုင်းရင်းဆေးပါကျွမ်းတာမို့ သူသင်ယူရသည်။ဦးလှဦးက တိုင်းရင်းဆေးနည်းဖြင့်ဆေးတွေတိုက် ဆေးလိမ်းလုပ်သည်။သူလဲ ယုံယုံကြည်ကြည်လိုက်လုပ်သည်။ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလာရင် ဖားကန့်မှာနေရာစုံ ဆိုဒ်စုံရှိတာမို့်အခက်အခဲမရှိ။တခါတလေ ဂေါ်လီထည့်တက်သလို တခါတလေကျ ဖြုတ်ထားသည်။ဦးလှဦးက သူ့ကို ဘေးမဖြစ်စေရန်ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်တွေပြောသည်။သူကလဲ ဦးလှဦးကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြသည်။သူမိန်းမတွေကို နောက်ပေါက်ကို လုပ်ရတာပိုကြိုက်သည့်အကြောင်း။ ဦးလှဦးက သူ့ကို နောက်ပေါက်လုပ်တာ သဘာဝတိုင်းမဟုတ်တာမို့ မကောင်းကြောင်း။ဆန္ဒရှိလို့လုပ်ရင်တောင်မှ တဖက်မိန်းကလေးကို စိတ်ပါလာသည်အထိ နူးနပ်ဖို့လိုကြောင်း ကြိမ်ဖန်များစွာနောက်ပေါက်ကို ဆက်ဆံရင် မိန်းမတွေအနေနဲ့ စအိုကြွက်သားက နောက်ပိုင်းတွင်မထိန်းနိုင်ပဲ လိပ်ခေါင်းဖြစ်တက်သည့်အပြင် တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနိုင်ကြောင်းပြောပြသည်။စအိုကိုဆက်ဆံရင်ဘ်ာလိုနူးရမည်ဆိုတာကအစ ပြောပြသည်။သူလဲ ဦးလှဦးအကြောင်းကိုမေးရာ ဦးလှဥက တချိန်က အတော်မိန်းမပွေသည့်လူပင်။လူကလဲ လူချောမို့ အပျိုအအိုမရှောင်ပေ။သူ့ဘကြီးက တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်တစ်ဦးမို့
သူလဲသူ့ဘကြီးနဲ့လိုက်ရင်းဆေးကျမ်းတွေဖတ် ဘကြီးပြောစကားတွေနားထောင်ရင်းနဲ့ ဆေးနည်းပေါင်းစုံသိလာသည်။နေရာစုံရောက်ကာ အလုပ်စုံလုပ်ရင်းအပေါင်းအသင်းစုံနဲ့တွေ့ကာ မကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင် အရမ်းကို ကျေညက်လာသည်။သူကိုယ်၌ကလဲ တဏှာကြီးသူမို့ တွေ့မရှောင်ပေ။ နောက်ဆုံးတွင် သူ့ဆရာသမားရဲ့မိန်းမကိုပင်မရှောင်။ဆရာ့မိန်းမကလဲ သူ့ကိုမြူဆွယ်တာလဲပါသည်။ အကြီးအကျယ်ကို ငြိကြသည်။ဆရာကတော်ကို အပေါက်စုံအောင်ကို လုပ်သည်။ဆရာကတော်က လုံးကြီးပေါက်လှမို့ သူ့အတွက်အဆီတထပ်အသားတထပ်ပင်။တရက်တွင်သူ ဆရာ့မိန်းမနဲ့ အပျော်ကြူးနေတုန်းလူမိကာ ထောင်ကျသွားသည်။ထောင်ထဲမှာ အစကသူ့ကို ဝိုင်းကာ နှိပ်ကွပ်ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူ့ရဲ့အလိုက်သိမှုတွေကြောင့်အနေချောင်လာရသည်။ဂေါ်လီထည့်သည့်ပညာကလဲ ထောင်ထဲမှာတက်လာတာပင်။သူလဲထောင်ထဲမှာ ဆရာတစ်ဦးနဲ့တွေ့ကာ
အဲ့ဆရာရဲ့သင်ပြဆုံးမမှုတွေကြောင့်နောင်တရကာ မိန်းမကိစ္စကို မရှုပ်တော့ဟုဆိုကာ အာမခံလိုက်သည်။ အဲ့ဆရာက သူ့ကိုဗေဒင်ပညာနဲ့ ကျောက်မျက်ပညာကို သင်ပေးသည်။ထောင်ကနေထွက်တော့ အဲ့ဆရာက သူ့ကို အလုပ်ပေးကာ ကျောက်မျက်ပညာကို သေချာသင်ပေးသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်ဖားကန့်ကိုရောက်လာသည်လို့ပြောသည်။တကိုယ်တည်းလူပျိုကြီးလဲ ဖြစ်လို့ ရသမျှပိုက်ဆံကို လှူတာများသည်။သူ့ကိုကျ ဦးလှဦးက အရမ်းခင်သည်။သူလဲဖားကန့်မှာ နေစဉ် ဝင်ငွေသောက်သောက်လဲရသည်။ လူငယ်တစ်ဦး ဝင်ငွေများများရရင် ပျက်ဆီးတက်တာမို့ ဦးလှဦးကအနီးကပ်ထိန်းသည်။သူ့အပေါ် ဦးလေးလိုပင်။ အနီးကပ်ပြုစုစောင့်ရှောက်သည်။ရသမျှငွေကို ဘဏ်ထဲထည့်ပေးကာ ဘဏ်စာအုပ်ကို သူပဲယူထားသည်။ မဟုတ်တာလုပ်မှာစိုးလို့ပင်။သူလဲ အရင်းအနှီးတော်တော်ရှိလာတာနဲ့ ဦးလှဦးနဲ့တိုင်ပင်ကာ ကျောက်အရောင်းအဝယ်လုပ်ဖို့ပင်။ဦးလှဦးက သဘောတူသည်။သူက ငွေစိုက် ဦးလှဦးက လူစိုက်ကာ အရောင်းအဝယ်လုပ်သည်။အကျိုးပေးကောင်းတာလား ဦးလှဦးကပဲ ကျွမ်းကျင်လို့လားမသိ။ အကျိုးအမြတ်များသည်။ရသမျှအမြတ်ကိုတယောက်တစ်ဝက်ခွဲသော်လည်း ဦးလှဦးကမယူ။သုံးပုံတပုံသာယူသည်။ သူအတင်းပေးသော်လဲမယူ။သူတို့နှစ်ဦးက တကယ့်သွေးရင်းသားရင်းလိုပင်။သူ့ကိုလဲ အမြဲဆုံးမသည်။ မိဘညီကိုမောင်နှမကိုတန်ဖိုးထားဖို့၊မိန်းမတိုင်းကို တန်ဖိုးမထားပဲမဆက်ဆံဖို့၊မစားကောင်းတဲ့အသီးကိုမစားဖို့၊ ငွေကို ရတိုင်းမဖြုန်းဖို့၊အခွင့်အရေးကိုရတုန်းမှာလိမ္မာစွာယူဖို့အမြဲဆုံးမတက်သည်။
သူဖားကန့်မှာသုံးနှစ်တာကာလအတွင်း ဝင်ငွေအများကြီးရှာနိုင်ခဲ့သည်။တိုက်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့ ကားတစ်စီးအပါအဝင် ဘဏ်ထဲမှာလဲ သိန်းပေါင်းများစွာထည့်ထားနိုင်သည်။ဦးလှဦးကျေးဇူးပင်။မိဘနဲ့ အကိုအမတွေကိုလဲ အလျဉ်းသင့်သလို ငွေနဲ့ကန်တော့နိုင်လာသည်။သူလဲ အသက်သုံးဆယ်ကျော်လာပြီမို့ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လာသည်။ သူနေပြည်တော်သို့ပြောင်းခါနီးနှစ်လအလိုမှာ ဦးလှဦးက ဘုန်းကြီးအပြီးဝတ်သွားသည်။ဆွေးမျိုးရင်းချာလဲမရှိတာမို့ သူပဲအမျိုးလိုဖြစ်နေကာ လိုအပ်တာအကုန်လုပ်ပေးလိုက်သည်။ဦးလှဦးလဲ
ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးနောက်ပိုင်းခရီးထွက်မည်ပြောကာ သူ့ဆီလာပြီး နှုတ်ဆက်ရင်း ဆုံးမစကားပြောသွားသည်။သူလဲ လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ သူ့ကိုဆက်သွယ်ပါလို့ပြောလိုက်သည်။သူလဲ နေပြည်တော်သို့ပြန်ပြောင်းလာပြီးနောက်ပိုင်း အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသည်။နေပြည်တော်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ
သူနိုင်ငံခြားပညာတော်သင်သွားဖို့အရွေးခံရသည်။အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲဖြေဆိုရာ အဆင့်ဆင့်အောင်လာတာမို့ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြေဆိုရန်အတွက် လိုအပ်တဲ့သင်တန်းများတက်ရန် ဌာနမှသူ့ကို
ရန်ကုန်တွင်သင်တန်းတက်ရန်စေလွှတ်တာမို့ သူလဲ ရန်ကုန်တွင်သင်တန်းလာတက်ရင်း နှင်းမြတ်မွန်နဲ့ဆုံရတာဖြစ်သည်။
နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ နေပြည်တော်မှာပင်။ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်ရင်း
ရာထူးတိုးလို့သင်တန်းတက်ရန်အတွက်ဘဏ်မှ စေလွှတ်တာမို့လာတက်တာဟုပြောသည်။အိမ်ထောင်တွေက တစ်ယောက်မှမကျသေးပေ။နှင်းမြတ်မွန်လဲ ရည်းစားရနေပြီ။သူ့ရည်းစားက မန္တလေးကလို့ပြောသည်။ သူတို့လိုဘဏ်ကပင်။အေးမြတ်သူက ရန်ကုန်မှာ။သူလဲ ပုဂ္ဂလိကဘဏ်မှာပင်။သူ့ကောင်လေးက မအူပင်မှာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်နေသည်လို့နှင်းမြတ်မွန်ကပြောသည်။ပိုးပိုးက
နိုင်ငံခြားခရီးသွားလာရေးအေဂျင်စီမှာတဲ့။သူ့ကောင်လေးက ဘန်ကောက်မှာ သွားလိုက်လာလိုက်ပင်။ မယူကြသေးဟုပြောသည်။မိဘတွေကလဲ သိနေကြတာပြီး သဘောတူထားကြသည်မို့
အချိန်မရွေးတွေ့လို့ရနေတာကြောင့် စီးပွားရေးကို ဦးစားပေးလုပ်နေကြတာပင်။
သင်တန်းပိတ်သည့်ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် သူတို့ဆုံဖြစ်ကြသည်။သူနဲ့လမ်းကြောင်းသင့်ကာ နီးသည့် ပိုးပိုးကို ဝင်ခေါ်လိုက်သည်။ပိုးပိုးက ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့တိုက်ခန်းမှာသုံးယောက်နေသည်လို့ပြောသည်။ ပိုးပိုးကအရင်ကထက်ပိုပြီးလှလာသည့်အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ကလဲ တကယ့်အမိုက်စားပင်။
ကိုယ်တိအက်ျင်္ီလက်ပြတ်အနက်ရောင်နဲ့စကပ်ပန်းရောင် ဒူးဖုံးအကြပ်လေးကြည့်ကောင်းလှသည်။ တင်သားလုံးလုံးလေးတွေက ဖြစ်ညှစ်ချင်စရာ။ ကားပေါ်ရောက်တော့ သူ့ကို အပြစ်တင်သံအရင်ကြားရသည်။ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားလို့။သူရီပဲနေလိုက်သည်။
ဆိုင်ရောက်တော့ နှင်းမြတ်မွန်နဲ့ အေးမိစံတို့က ရောက်နှင့်နေပြီ။အေးမိစံကလဲ ပိန်သွားသည်။ အရင်ကထက်ပိုပြီးကြည့်ကောင်းလာကာ ခါးတင်ရင်တွေက အပိုအလိုမရှိ။အင်းလေ နှင်းမြတ်မွန်တောင် ဝိတ်ချလိုက်တာမို့ ကြည့်ကောင်းလာတာပင်။ကျန်တဲ့သူတွေလဲ တူတူပဲပေါ့ဟုသူတွေးလိုက်သည်။
”ကိုပိုင်များနော် မပြောချင်ဘူး။ဒီကညီမတွေကို တကယ်ပစ်ထားရက်တယ်သိလား။မမဆုပြည့်နဲ့ သမီးတို့က ဘာဆိုင်လို့လဲ။တကယ်စိတ်ဆိုးတယ်”
ပိုးပိုးကပြောရင်းသူ့ကိုထုသည်။အေးမိစံနဲ့ နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ သူ့ကို အပြစ်တင်ကြသည်။သူရီကာနေလိုက်သည်။
”မရီနဲ့။တကယ်စိတ်ဆိုးတယ်။ညီမတို့က ကိုပိုင့်ကို ဖုန်းဆက်တော့လဲ ဖုန်းကခေါ်လို့မရ ဘယ်စုံစမိးလို့စုံစမ်းရမှန်းမသိ။ဘယ်လောက်စိတ်ပူခဲ့တယ်မှတ်လဲ။နှစ်တွေဒီလောက်ကြာတဲ့အထိကို စိတ်ပူရတာ။ နောင်နောင်ကိုတောင်ခဏခဏ ပြသာနာရှာမိသေးတယ်”
”ဟင် နောင်နောင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ အေးမိစံရဲ့”
”ဟားစားဟား နောင်နောင်တော့ ကျုပ်ကို ဒေါကန်နေတော့မှာပဲ”
”သူကလဲ ကိုပိုင့်ကို စိတ်ပူနေတာ။ခုတွေ့ကြတယ်ဆိုလို့လာချင်နေတာ။သူအားရင်လာလိမ့်မယ်” ”အင်းလေကိုပိုင်ကလဲ ညီမတို့ကိုတော့ အဲ့လိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ဆုပြည့်ကသပ်သပ် ညီမတို့က သပ်သပ်ဟာကို”
”ကဲအေးပါဗျာ။တောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးကို။တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ သုံးယောက်လုံးကို ဘယ်သွားချင်လဲ ဘာလုပ်ချင်လဲ။အကိုဒကာခံမယ်”
”တကယ်နော်။ပျော်စရာကြီး။ဘယ်သွားမလဲ မမစံနဲ့ မမမွန်”
”အင်းတို့ KTV သွားရင်ကောင်းမလား…
”ဟုတ်တယ် မြတ်မွန်နင်ပြောတာကောင်းတယ်သွားမယ်။ကိုပိုင်ဒါပဲနော် ကျသလောက်အကုန်ရှင်းရမယ်” ”ဟုတ်ပါပြီဗျာရှင်းပါ့မယ်ကဲစိတ်ဆိုးတာတွေပြေတော့”
သူတို့တွေရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေပြောဖြစ်ကြသည်။သူ့အကြောင်းတွေမေးလို့သူလဲအကုန်ပြောပြလိုက်ရာ သူ့ကိုသနားနေကြသည်။မိန်းမမယူသေးဘူးလားမေးရာ သူကကြောက်သွားပြီလို့ပြေယတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားကြသည်။ပိုးပိုးက သူရှာပေးမယ်လို့ပြောတော့ သူပိုးပိုးခေါင်းကိုပုတ်ကာ ညည်းတာဝန်ယူရဲလားမေးတော့ လျှာလေးထုတ်ကာ ခေါင်းပုသွားလို့ဝိုင်းရီကြသည်။
အားလုံးကအရင်အတိုင်းပင်ခင်မင်မှုကမပြောင်းလဲ။ပြောင်းလဲတာက သူပင်။သူတို့သုံးယောက်ကို တွေ့တော့ စိတ်တွေဖောက်ပြန်မိသည်။နှင်းမြတ်မွန်ကိုလဲ တက်မက်မိသလို အေးမိစံကိုလဲ ပစ်မှားမိသည်။ပိုးပိုးကိုလဲ ဆန္ဒဖြစ်မိသည်။သူ သက်ပြင်းမောသာချမိသည်။အားလုံးက သူ့ဟာနဲ့သူတွေပင်။ဦးလှဦးပြောသလို မစားကောင်းတဲ့အသီးတွေထဲမှာသူတို့သုံးဦးပါသည်။တသက်လုံးသူ့သိက္ခာရေစုန်မျောရမည်။
စားကြသောက်ကြစကားပြောကြနဲ့အချိန်ကုန်မှန်းမသိကူန်လာသည်။နောက်မှသတိရကာKTV သို့ ချီတက်ကြသည်။ ktvရောက်တော့ မိန်းကလေးတွေက ဝိုင်သောက်ချင်တယ်ပြောလို့ ဝိုင်မှာကာ သူကတော့ ဘီယာလောက်ပင်မှာပြီး ကျန်တာတော့ သူတို့စားချင်တာမှာကြသည်။ပြီးတော့ သီချင်းဆိုကြ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြ fb တင်ကြနဲ့ရှုပ်နေသည်။ ပိုးပိုးက သူ့ကိုtag တွဲကာ ချစ်ရတဲ့
တောပုန်းကြီးကိုလက်ရဖမ်းမိခြင်းအထိမ်းအမှတ်နဲ့အောင်ပွဲခံခြင်းဆိုပြီးတင်သည်။အေးမိစံက ပျောက်သောသူရှာရင်တွေ့တဲ့ဘယ်ပြေးမလဲ ကိုလူဆိုးကြီးဆိုပြီးတင်သည်။နှင်းမြတ်မွန်ကတော့ အသည်းကွဲတိုးရစ်ကြီးတစ်ဦးနဲ့တွေဆံ့်ုခြင်းဆိုပြီးတင်သည်။မနိုင်စိန်တွေ။ဝိုင်သောက်ပြီး မူးလာကြတော့ ဒစ်စကိုဖွင့်ကာ ကနေကြပြန်သည်။သူ့ကိုလဲ ကခိုင်းသည်။တယောက်တလဲတွဲကာကနေကြပြန်သည်။ တကယ်ကိုမနိုင်ပေ။လေးနာရီလောက်အချိန်ဖြုန်းပြီးမှ သူတို့ကိုအဆောင်လိုက်ပို့လိုက်သည်။ အေးမိစံကိုအရင်ပို့ကာနှင်းမြတ်မွန်ကိုပို့သည်။ပိုးပိုးက သူနဲ့လမ်းကြောတူတာမို့နောက်ဆုံးသူနဲ့အတူပြန်သည်။ ကပေါ်မှာမူးနေသည်မို့ သူလဲရီကာနေလိုက်သည်။သူရီလို့ဆိုပြီး သူ့ကိုရန်တွေ့သည်။ရန်တွေ့တာလေးက ချစ်စရာကောင်းလှသည်။ပင်ကိုကလဲချောလှသူမို့ ။ပိုးပိုးတိုက်ခန်းရောက်တော့ သူအပေါ်ထိလိုက်ပို့လိုက်သည်။ အခန်းရောက်တော့သူနဲ့ အတူနေကောင်မလေးနှစ်ယောက်ထွက်လာသည်။သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်။ သူလဲပိုးပိုးကိုပို့ပြီးသူ့တိုက်ခန်းရှိရာပြန်လာပြီးရေချိုးလိုက်သည်။ပြီးတော့ သင်တန်းက စာတွေကြည့်လိုက် ကွန်ပျူတာဖွင့်ကာ အင်တာနက်က သူသိချင်တဲ့အရာတွေကို ရှာပြီးလေ့လာခိုက်လုပ်နေသည်။သူ့အကောင့်ကို ဖွင့်ကြည့်တော့ သူ့ကို tag တွဲထားတဲ့သုံးယောက်လုံးရဲ့ပိုစ့်အောက်မှာ ကွန်မန့်တွေပလုံစီနေသည်။ သူကွန်မန့်တွေဖတ်ရင်းရီနေရသည်။ညနှစ်နာရီလောက်ကျ ဖုန်းမြည်လာတာမို့သူကိုင်လိုက်တော့ ပိုးပိုး။ တရေးနိုးလာတာတဲ့။အိပ်မရလို့သူ့ကိုနှောက်ယှက်တာတဲ့။စကားအကြာကြီးပြောဖြစ်သည်။ အရင်ကအကြောင်းတွေရော သူ့အကြောင်းတွေကိုကောပြောဖြစ်သည်။ပိုးပိုးက ကျန်တဲ့သူတွေထက်စာရင် သူ့ကိုပိုပြီးတွယ်တာသူမို့ ဂရုပိုစိုက်သည်။သနားနေသည့်ပုံ။သူကလဲ ခုဘာမှမဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်း စိတ်ချနေဖို့ပြောပေမယ့် မရ။သုံးနာရီကျော်မှအိပ်ကြသည်။မနက်သင်တန်းသွားတော့ နှင်းမြတ်မွန်နဲ့ဆုံသည်။ သင်တန်းအတူတူမို့. အတူတူထိုင်ကာ သူ့ကို မသိတာရှိတာတွေမေးသည်။
နေ့လည်ထမင်းစားချိန်မှာလဲတူတူစားကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်နဲ့သူက ပိုပြီးတွေ့ဖြစ်ကြသည်။ ညနေသင်တန်းပြီးရင်နှင်းမြတ်မွန်ကိုလိုက်ပို့ပြီးမှသူပြန်သည်။တခါတလေ ပိုးပိုးက သူ့ကို ဖုန်းဆက်ကါမုန့်လိုက်ဝယ်ကျွေးခိုင်းရင် ပိုးပိူးနဲ့ပြန်ထွက်ဖြစ်ကြသည်။
အေးမိစံနဲ့ကသူတို့နှစ်ယောက်လောက်မဆုံဖြစ်။သူ့ဘဲရောက်လာရင်တော့ တွေ့ဖြစ်သည်။ တစ်ရက်သားနှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ ရည်းစား၊ပိုးပိုးရည်းစား၊ အေးမိစံရည်းစားဆုံကြတာမို့သူနဲ့တွေ့ဖြစ်ကြသည်။ နှင်းမြတ်မွန်ရည်းစားကိုပဲမသိတာမို့ မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။အတွဲကိုယ်စီကြားထဲမှာ
သူတစ်ယောက်တည်းမို့ငေါင်တောင်တောင်။နောင်နောင်နဲ့ ပိုးပိုးရညိးစား ရဲဇော်က
သူ့ကိုရည်းစားရှာဖို့ပြောပေမယ့်သူရီသာနေလိုက်သည်။ညဖက်ကျယောက်ကျားလေးတွေချိန်းပြီးဘီယာဆိုင်ထိုင်ကာ ကလပ်ကိုသွားကြပြီးကဲ ကြသည်။ကလပ်ကဆော်တွေနဲ့ ချိတ်ကာ ဟိုတယ်ကိုမသွားကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်ရည်းစား အောင်မြတ်က အတော်ကိုသဘောကျနေသည်။သူ့ကိုလဲ ပြန်မပြောဖို့ပိတ်သည်။သူကတော့ အားလုံးအေးဆေးပါလို့ပြောရသည်။ဒီလိုနဲ့သင်တန်းကာလကလေးလလောက်ကြာလာတော့ သူနဲ့ နှင်းမြတ်မွန်ကအရင်ကထက်ပိုရင်းနှီးလာသည်။အပေးအယူမျှလာသည်။တခါတရံ သင်တန်းချိန်ဖျက်ကာ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တက်သည်။ပိုးပိုးနဲ့လဲဒီအတိုင်းပင်။ညဖက်တွေမှာ သူတို့သုံးဦးနဲ့လိုင်းပေါ်မှာချက်ဖြစ်သည်။ ညတိုင်းပင်။သူကအရိုးသားဆုံးနေဖို့ စိတ်ကူးပေမယ့် သူတို့တွေက သဒ္ဒါလွန်နေကြသည်လားမပြောတက်။ ဒါမှမဟုတ်သူကပဲရိုးသားချင်ယောင်ဆောင်ကာ နေနေရတာမို့ အထင်လွဲသည်လားမပြောတက်တော့ချေ။
သူတို့သုံးဦးကတော့ တယောက်နဲ့တယောက် သူ့ကို လှည့်ပတ်ကာစတက်သည်။ပိုးပိုးကသူ့ကို နှင်းမြတ်မွန်နဲ့စသည်။နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကိုသဘောကျနေတာဟုပြောသလို နှင်းမြတ်မွန်ကကျ အေးမိစံကသူ့ကိုကြိတ်ကြွေနေတာဟုပြောသည်။အေးမိစံကလဲ ပိုးပိုးက သူ့ကို အရင်ကတည်းက ခိုက်နေတာဟုပြောသည်။သူလှည့်ပတ်ကာငြင်းရသည်။ယူမယ့်ချစ်သူတွေရှိနေတာမို့ မစနဲ့လို့ပြောတော့ သုံးယောက်လုံးက
ကြိတ်ပြီးသဘောကျနေကြတာလို့အချင်းချင်းဖော်ကြသည်။သူမိန်းမတွေရဲ့စိတ်ကိုကြောက်မိတာမို့ မယုံချင်။ သူဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။စမ်းကြည့်မယ်ဟု။အကောင်းဆုံးကတော့ နှင်းမြတ်မွန်ပင်။
သူနဲ့နေ့တိုင်းနီးပါးတွေ့ရသည့်အပြင် ရည်းစားနဲ့သိပ်မတွေ့ရသူမို့။ဒါကြောင့်တရက် သူနှင်းမြတ်မွန်ကို ဒီနေ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရအောင်ပြောတော့ အိုကေသည်။
ဒါကြောင့်သူတို့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တော့အတွဲခုံကနေသူလတ်မှတ်ဖြတ်လိုက်ပြီးနှင်းမြတ်မွန်ကိုပြောတော့ သူမကလဲ အတွဲချောင်းချင်တာနဲ့အတော်ပဲပြောသည်။ရုပ်ရှင်ရုံထဲရောက်တော့လူသိပ်မရှိသေး။
မိန်းမကအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်လို့ယောက်ကျားကလိုက်ချောင်းရင်းလက်လွန်မိကာထောင်ကျသွားပြီးထောင်ဖော က်ပြေးသူများကြားမှာပါသွားရင်း လမ်းမှာတွေ့သမျှသတ် မိန်းကလေးတွေမုဒိမ်းကျင့်တာကိုစက်စုပ်လာပြီး အဲ့ဒီလူတွေကိုတဦးချင်းလိုက်သတ်ကာနေညက်ဆုံးနယ်စပ်မှာကောင်မလေးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ကာယူပြီးဇာတ်မြှုပ်နေတာ ကိုရိုက်ကူးထားသည့်ကာ။အချစ်အကြမ်းစွန့်စားခန်းတွေနှင့် ကြည့်ကောင်းသည်။၁၈+အခန်းတွေကိုလဲ ဆင်ဆာမဖြတ်ပေ။အနားတဝိုက်က အတွဲတွေကလဲ မီးပိတ်တာနဲ့ကဲကြသလို ဇာတ်လမ်းကအချစ်ခန်းတွေပါတော့ ကြည့်တဲ့သူတွေကိုပိုအားပေးနေသလို။လာကြည့်တဲ့သူတွေက အတွဲတွေများသည်။သူတို့နှစ်ယောက်သာ ဘာမှမဟုတ်။နှင်းမြတ်မွန်ကိုမသိမသာအကဲခတ်တော့ သူလဲ မရိုးမရွဖြစ်လာသည်ထင်သည်။ဟိုဖက်လှည့်လဲ အတွဲတွေကကဲ ဒီဖက်လှည့်လဲအတူတူ။နောက်လှည့်လဲ ဒီအတိုင်း။ရှေ့ကြည့်ပြန်တော့လဲ မထူး။သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို လှည့်ကာ
”ကဲ ဂျီးတော် ဟိုလှည့်ဒီလှည့်လုပ်မနေဲ့။ပတ်ချာလည်အတွဲတွေကြီး။တော်ကြာ ဝဋ်လည်နေမယ်” ”အံမယ် ဘာလည်စရာရှိလဲ။သူများကသနိ့သန့်လေး”
”ဟာဟ အေးပါဟယ်။အဘက ရန်ကုန်မှမရောက်ဖူးတာ။မိုးပျံတံတားကြီးကအကြီးကြီးဆိုလဲ ယုံကမှာပဲပေါ့”
”ကိုပိုင်နော် ဟင့်သူများကို”သူ့ကိုလှမ်းဆိတ်တော့သူလဲရှောင်လိုက်ရာသူ့အနားတိုးလာပြီး သူ့ကိုလိုက်ဆိတ်လေသည်။သူလဲ ရှောင်ရင်းနဲ့ သူ့ခါးကိုထိုးမိတော့ သူယားတာကိုသဘောကျပြီး သူ့ကိုကလိလိုက်ထိုးရာသူလဲ နှင်းမြတ်မွန်လက်ကိုလိုက်ဖမ်းနေရသည်။တချက်မှာတော့ သူ့ကို ကလိလှမ်းအထိုးသူကလဲလက်ကိုမိမိရရကိုင်လိုက်ရင်းနောက်ကိုယိမ်းလိုက်တာမို့
နှင်းမြတ်မွန်ကိုဆွဲလိုက်သလိုဖြစ်ကာ အရှိန်လွန်ပြီးသူ့ရင်ခွင်ထဲကိုယ်လုံးကဝင်လာတော့ သူလဲ လက်ကိုချုပ်လိုက်ပြီးသိုင်းဖက်ထားလိုက်သည်။ရုတ်တရက်နှင်းမြတ်မွန်လဲ
ကြောင်သွားကာငြိမ်နေရင်းသတိရတော့ရုန်းထွက်မယ်လုပ်တော့ သူကလဲ မလွှတ်။ဟိုကရုန်းလေ သူကဖက်ထားလေပင်။ရုန်းလို့မရတော့ ငြိမ်နေလှုက်သည်။အဲ့အချိန်မှာ ဇတ်လမ်းက မင်းသားရဲ့မိန်းမက သူ့ရည်းစားနဲ့အချစ်ဗျူဟာခင်းနေသည့်အခန်းပင်။ညည်းညူသံတွေက စိတ်ကြွချင်စရာ။နှင်းမြတ်မွန်လဲ ရုန်းလိုက်ရင်း
”ကိုပိုင် လွှတ်တော့ကွာ။အသက်ရှူကြပ်လာပြီ။သူများတွေတွေ့ရင်ရှက်စရာကြီး။အင်္ကျီတွေလဲ ကြေကုန်ပြီ။သူနဲ့လဲ ဘာမှမဆိုင်ပဲနဲ့ ဖက်ထားတယ်။လွှတ်တော့လို့”
အသံလေးက ရှက်ဝဲဝဲနဲ့ ချစ်စရာလေးပင်။သူလဲ စိတ်ပိုကြွကာနှင်းမြတ်မွန်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ထားရာမှ လွှတ်လိုက်ကာ ခေါင်းကိုမော့လိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကိုဖိကာနမ်းလိုက်သည်။
အသံဆက်မထွက်လာတော့ပေ။သူနှုတ်ခမ်းခြင်းဖိကာပါးစပ်အဟမှာလျှာကို ထည့်လိုက်ပြီး လျှာခြင်းကလိလိုက်သည်။လက်တွေက ကျောပြင်ကိုပွတ်သပ်လိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့်ကြီးက သူ့ရင်ခွင်ထဲ ပျော့ခွေကြလာသည်။သူလဲ ရဲသွားကာ နှုတ်ခမ်းခြင်းကို ကြာရှည်စွာနမ်းလိုက်သည်။လက်တွေက နှင်းမြတ်မွန်နဲ့သူ့ကြားထားလိုက်ပြီးနို့တွေကို အင်္ကျီပေါ်ကနေ ကိုင်လိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်အသက်ရှူသံတွေပြင်းလာကာ သူ့ကိုတင်းကြပ်စွာဖက်ထားလိုက်သည်။ပြီးမှ သူ့ကို”ကိုပိုင် ဘာတွေလျောက်လုပ်နေတာလဲလို့ သူများအင်္ကျီတွေကြေကုန်တော့မှာပဲအဟင့်”
သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့နောက်ကျောက ဇစ်ကိုအပေါ်သို့ဆွဲတင်လိုက်ပြီးဘော်လီချိတ်ကိုပါဖြုတ်လိုက်ရာ
”အိုဘာလုပ်တာလဲ။သူများတွေမြင်ရင်ရှက်စရာကြီးကွာ။ဟေအေးကွာ ကိုပိုင်နော် မြတ်မွန်မကြိုက်ဘူးနော် မလုပ်နဲ့လို့ဆို ကြည့်ပြောနေတာမရဘူးလား။စိတ်ဆိုးလာပြီနော်။အာ့ ကိုပိုင်နော် မလုပ်နဲ့လို့ဆို”ပြောနေပေမယ့် သုကတော့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနို့တွေကို ကိုင်လိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်းတွေကိုကလိလိုက်သည်။ ပြီးတော့နှင်းမြတ်မွန်ကိုပက်လက်သူ့အပေါ်လှန်လိုက်ပြီး နို့တွေကို ကုန်းကာစို့ပေးလိုက်တော့ နှင်းမြတ်မွန်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ငြိမ်ကျသွားကာ သူ့လက်ကိုတင်းတင်းလေးဆုပ်ကိုင်ထားပြီး မောဟိုက်နေသည်။ သူလဲအပေါ်ပိုင်းနို့တွေကို အားရအောင်စို့လိုက်ပြီး
သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးပြီးသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာမှိကာသူ့ကိုနောက်ပြန်သိုင်းဖက်ထားသည်။ သူလဲညာဖက်လက်ကနို့တွေကိုကလိနေရင်းဘယ်ဖက်လက်က ပေါင်တွေကိုပွတ်သပ်နေကာ ထမိန်ကိုအသာဖြေချကာဖင်ပေါ်ကနေ ပင်တီအတွင်းဝင်ကာတဖြည်းဖြည်းလျောဆင်းရင်း ပိပိဝကိုတို့ထိကစားလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ
နှင်းမြတ်မွန်ပိပိဝကအရည်တွေစိုနေသည်။သူလဲပိပိထဲကို လက်ခလယ်ထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်လိုက်ရာဖင်က ကြွကြွတက်လာသည်။သူလဲ လက်ကိုပြန်ထုတ်ကာအရှေ့ဖက်ကနေပင်တီထဲနှိုက်ကာ အစေ့ကို ကလိပေးလိုက်ရာ ယ”အ့ ဟ ကိုပိုင် ဘာတွေလုပ်နေတာလဲကွာ။ဟင့်ဟင့်”
ဖိကာချေပေးရင်းနို့သီးခေါင်းကိုလက်မနဲ့လက်ညှိုးညှပ်ကာချေပေးလိုက်ရာ တအိအိအသံနဲ့ဖင်က ကြွကြွတက်သွားသည်။သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို သူ့လီးကို ကိုင်ခိုင်းလိုက်ရာ နှင်းမြတ်မွန်လဲ သူ့ဘောင်းဘီထဲမှလီးကို ထုတ်ကာ ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ရင်း ထက်အောက်လုပ်ပေးလိုက်သည်။သူလဲ အစေ့ကိုကလိနေရင်းမှ လက်ကိုနောက်ဖက်ကနေ ပြန်ပတ်ကာ ပိပိထဲကိုထည့်လိုက်ရင်း နို့တွေကိုင်ထားတဲ့ လက်က အစေ့ကိုကလိလိုက်ကာ နို့တွေကိုပါးစပ်နဲ့ကုန်းစို့လိုက်သည်။ကာမခလုတ်တွေကိုအခုခြင်းဖွင့်နေတာမို့ နှင်းမြတ်မွန်လဲ ဘယ်လိုမှမကတော့ပေ။ပါးစပ်ကညည်းသံလေးနဲ့ဖင်ကိုကော့ကာယမ်းပေးနေသည်။သူလဲ
”နှင်းမြတ်မွန် ကိုယ့်ကို စုပ်ပေးမလား”မေးရာ ခေါင်းငြိမ့်သဖြင့်သူလဲ အနေအထားပြင်လိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ ပက်လက်အနေအထားမှ ထကုန်းကုန်းလေးနေလိုက်ပြီး သူ့လီးကိုစုပ်ပေးသည်။သူလဲ
လက်တဖက်ကဖင်နောက်ကနေ ပိပိထဲကိုထည့်ကာမွှေနေရင်းတဖက်က အစေ့ကိုလှမ်းနှိုက်ကာ ကလိပေးလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ ဖင်က တရမ်းရမ်းဖြစ်ပြီးသူ့လီးကို စုပ်ပေးနေသည်။သိပ်တော့ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိပေမယ့်အဆင်ပြေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နှင်းမြတ်မွန် အသက်ရှူသံတွေပြင်းလာသည်။သူလဲ ကလိတာကိုမနားတမ်းလုပ်ပေးလိုက်ရာ အသံအစ်အစ်နဲ့အတူ ပြီးသွားသည်။
သူ့လီးကိုလက်နဲ့ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကာပါးစပ်က အင့်ခနဲအင့်ခနဲ့ ညည်းနေသည်။ပြီးမှ အသာထကာ သူ့အိတ်ထဲက စနိုးတာဝါကိုယူကာ သူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုသုတ်ပေးသည်။ပြီးတော့ သူလဲပင်တီကိုသေချာပြန်ဝတ်ကာ ထမိန်ကိုဝတ်လိုက်ပြီးဘော်လီချိတ်ပြန်တပ် အင်္ကျီကိုဇစ်ပြန်ဆွဲလိုက်သည်။ပြီးတော့ သူ့ကိုမျက်စောင်းထိုးလိုက်ပြီး
”အိမ်သာသွားမလို့ လိုက်ပို့ပေး။သူလဲအိမ်သာကိုလိုက်ပို့ရင်း အိမ်သာထဲဝင်ကာလက်ဆေးလိုက်သည်။ ပြန်ဝင်ကာထိုင်တော့
”ဟင့် သူခေါ်လို့လဲ လိုက်ကြည့်ရသေး သူများကို သူ့ရည်းစားကျနေတာပဲ ပိုင်စိုးပိုင်နင်းနဲ့”သူလဲ ခပ်သဲ့သဲ့ရီလိုက်ပြီး နှင်းမြတ်မွန်ကိုဆွဲဖက်လိုက်သည်။ရုန်းချင်ယောင်ဆောင်ကာ သူ့ရင်ခွင်ထဲမှီနွဲ့ကာနေလိုက်သည်။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အထိ ဒီတိုင်းနေရင်းပြီးခါနီးတော့ အပြင်ဖက်ကိုထွက်လာကြသည်။
ညရောက်တော့ နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကို လူဆိုးကြီးလို့ပြောတော့သူကလဲ သူမပြီးသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရယ် အေးဆေးတွေ့ချင်တယ်ပြောတော့ သူ့ကိုပြောင်သည်။သူကလဲမတွေ့ချင်ဘူးလားမေးတော့ တွေ့ချင်ပါတယ်ပြောသည်။
ဆယ်တန်းအောင်လို့စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကိုရန်ကုန်မှာလာတက်ရင်းပထမနှစ်မှာချစ်ကိုဆိုတဲ့ကောင်လေးတယော က်နဲ့ငြိသည်။ပထမနှစ်တက်တက်ချင်းမှာ လှိုင်သာယာဖက်မှာနေရင်းတွေ့ကြတာ။နောက်မှသူ့ကောင်လေးက ဆေးသမားဖြစ်နေမှန်းသိသည်။သူငယ်ချင်းတွေဝိုင်းတားသည့်ကြားမှ မချစ်ဖူးတဲ့အချစ်ရူးဖြစ်ခဲ့ရသည်။ချစ်ကိုကလဲ လက်သွက်သည်။ဖြစ်ပြီးငါးလလောက်မှာသူ့ကို တည်းခိုခန်းခေါ်သွားပြီးသူ့ရဲ့အပျိုစင်ဘဝကိုရယူခဲ့သည်။ အတွေ့အကြုံကလဲမရှိ အတွေ့ကလဲထူးတာမို့ချစ်ကိုရဲ့အပြုစုတွေအောက်မှာဒူးထောက်ခဲ့ရသည်။ ချစ်ကိုကနောက်ပိုင်းမှာသူ့ဆီက ငွေခဏခဏတောင်းသည်။သူကလဲချစ်တာမို့ပေးသည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာတော့ ဆေးချတာကိုသူသိလာသည်။သူရှောင်ပေမယ့် တဏှာစိတ်ကရှောင်မရခဲ့။ မတွေ့ဖူးနေပေမယ့် စိတ်ကပါသွားချည်းပင်။ဒုတိယနှစ်ရောက်လာတော့
သူ့ကိုတန်ဖိုးမထားသလိုခံစားလာရသည်။တွေ့သည့်အခါတိုင်းချစ်ကိုက လီးကိုစုပ်ခိုင်းသည်။ အကြမ်းပတမ်းဆက်ဆံလာသည်။ဒါပေမယ့်သူအဲ့ဒါကိုကြိုက်နေတော့ရှောင်ဖို့ခက်သည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ချစ်ကို ကိုသူမချစ်တော့ပေမယ့် အဲ့ဒီရမက်ကိုတော့မရှောင်နိုင်။ဆုပြည့်နဲ့ကိုပိုင်တို့အတွဲကိုတွေ့တော့အားကျသည်။ ကိုပိုင်က လူချောတစ်ဦးပင်။ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က မိန်းကလေးတွေအားကိုးချင်စရာ။စကားပြောကောင်းသလို အနေလဲတည်သည်။တဖြည်းဖြည်းရင်းနှီးလာတော့ သူချစ်ကိုနဲ့ယှဉ်တိုင်းဘာမှမတိုင်။ဆုပြည့်ပိုအားကျမိသည်။ သူချစ်ကိုနဲ့ပြတ်သွားတော့အားလုံးက ဝိုင်းနှစ်သိမ့်ကြတော့ ကျေးဇူးတင်မိသည်။
ညဖက်တွေမှာဆိုကိုပိုင့်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ကာ ချစ်မိသည်အထိ စိတ်တွေက ယိုင်လာသည်။ဒါကို ပိုးပိုးရော အေးမိစံကပါရိပ်မိသည်။သူတို့သုံးယောက်စကားစပ်မိရင် ကိုပိုင်အကြောင်းပြောမိတိုင်း သူတို့တွေကလဲ သဘောကျသည့်ပုံ။ပိုးပိုးက ကိုပိုင့်ကိုအကိုတစ်ဦးလိုခင်ရင်းနဲ့စိတ်ပြောင်းလာသလို အေးမိစံကလဲ သူ့ရည်းစားနဲ့ ယှဉ်တိုင်းကိုပိုင့်ကိုပိုသဘောကျတက်သည်။သူ့ကိုလဲပြောတက်သည်။ရည်းစားထားရင် ကိုပိုင့်လိုလူကိုရွေးဖို့။ သူတို့ကတော့မရတော့ဘူးဆိုပြီး ညည်းတက်ကြသည်။အေးမိစံရည်းစားက ပိန်သေးသေးနဲ့ အရပ်ရှည်ရှည်။ လက်ကြောမတင်းဟုပြောသည်။ဟုတ်လောက်သည်။တွေ့ရသည့်ပုံက အလုပ်ကိုသိပ်မလုပ်ချင်သလို စိတ်နေသဘောထားကမရိုးသား။အေးမိစံရှိနေပေမယ့် ပိုးပိုးကို ငမ်းတက်သည်။ပိုးပိုးကလဲသိသည်။ ပိုးပိုးကောင်းလေးကကျတော့ မိဘက ချမ်းသာသည်မို့ ဘယ်ဟာကိုမှသိပ်အလေးမထား။သူလုပ်ချင်တာလုပ်သည်။ ပိုးပိုးကိုလဲ ချစ်ပေမယ့် သိပ်ဂရုမစိုက်။ဆုပြည့်သာကံအကောင်းဆုံး။ကိုပိုင်လာတိုင်းဆုပြည့်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်။လိုအပ်တာမှန်သမျဖြည့်ဆည်းပေးသည်။သူတို့ကိုလဲ ညီမတွေလိုစောင့်ရှောက်တက်သည်။ ဒီလိုနဲ့ဆုပြည့်ယောက်ကျားယူသွားတော့ ကိုပိုင့်ကို အားလုံးက ဆက်သွယ်ပေမယ့် ဘယ်လိုမှမရခဲ့။ပိုးပိုးက သူ့ကို ကိုပိုင်လွတ်လပ်သွားတာမို့ ကြိုးစားပါလားမြှောက်ပေးတော့သူ အားတက်သွားမိသည်။ ကိုပိုင့်ကိုတိတ်တခိုးမျှော်လင့်ရင်းလိုက်ရှာပေမယ့် ရှာလို့မတွေ့။တနေ့တွေ့နိုးနဲ့ကျောင်းပြီးကာ အလုပ်ဝင်သည်အထိရှာလို့မရ။အလုပ်ထဲရောက်တော့ သူလဲ ချစ်သူတယောက်ရသွားသည်။ သေချာစဉ်းစားရွေးချယ်ပြီးမှ ကိုပိုင့်ကိုလက်လျှော့လိုက်တာလဲပါသည်။အဖြေပေးခဲ့တာ။သူကလဲ အရမ်းချစ်တာမို့ကံကောင်းသည်ပြောရမည်။အလုပ်ကလဲ ပင်ပန်း မိန်းမသားတွေစုနေတာလဲပါတာမို့။ သူဝိတ်ကိုချပြီးပြင်လာတော့ အရင်ကနဲ့မတူပိုပြီးလှကာ ကြည့်ကောင်းလာသည်လို့ပြောကြသည်။သူလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သဘောကျကာ အမြဲတမ်းလှနေအောင်နေသည်။သူရာထူးတိုးတော့
သင်တန်းကိုရန်ကုန်မှာလာတက်ရင်း ကိုပိုင်နဲ့တူသည့်တယောက်ကိုတွေ့တော့ လိုက်ကြည့်မိသည်။ တကယ်လဲဟုတ်နေတာမို့ အရမ်းပျော်သွားမိသည်။ပြန်တွေ့တော့ကိုပိုင်က အရင်ကထက်တောင် ကြည့်ကောင်းလာကာ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လာသည်။အဆင်ပြေသည်ထင်သည်။ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်းနဲ့ကားနဲ့ပင်။သူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဒေါသဖြစ်မိပြန်သည်။ကိုပိုင်နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန် သူ့မှာရည်ရွယ်သူရှိနေလို့။ ကိုပိုင်ကတော့တကိုယ်တည်း ချစ်သူမရှိသေးလို့ပြောသည်။သူတို့တွေပြန်ဆုံတော့
အရင်တိုင်းခင်ခင်မင်မင်နဲ့ပျော်စရာ။အေးမိစံရောပိုးပိုးရော အရင်လိုပင် ကိုပိုင့်ကို သဘောကျဆဲပင်။ မိန်းမချင်းမို့ရိပ်မိကြသည်။သူနဲ့နေ့တိုင်းတွေ့တာမို့ သူလဲ ကိုပိုင့်ကို ဆွဲဆောင်မိသည်။
ရုပ်ရှင်သွားကြည့်လျှောက်လည်နဲ့ ကိုပိုင့်ကို ဆွဲဆောင်မိသည်။ဘာရယ်တော့မဟုတ်။
တဒင်္ဂလေးစိတ်ပျော်ပျော်ဆိုပြီးတော့ပင်။ကိုပိုင့်ရင်ခွင်ထဲ ခဏဖြစ်ဖြစ်မှေးလိုက်ချင်သည်။ကိုပိုင်ကတော့ အရင်လိုပင်။သူတို့ကိုသဘောထားသည်။အားမလိုအားမရဖြစ်ပြီးမိန်းမတို့တက်တဲ့မာယာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်ဖြစ်သည်။ တရက်ကိုပိုင်က ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ပြောတော့သူလဲ ဝမ်းသာသွားပြီးလိုက်သွားသည်။
အတွဲခုံမှာလက်မှတ်ဝယ်တော့သူလှိုက်ခနဲ ဝမ်းသာသွားသည်။အထဲရောက်တော့အတွဲတွေက ကဲ ရုပ်ရျထင်ကလဲ 18+ဆန်ဆန်မို့ သူလဲ စိတ်တွေက မရိုးမရွဖြစ်လာသည်။ဝေးနေတာလဲ ကြာမို့။ကိုပိုင်ကသူ့ကို စတော့သူလဲ အလိုက်သင့်ပါသွားသည်။ကိုပိုင့်ကို သူ့ဘဝကြီးခဏဖြစ်ဖြစ်ပေးလိုက်သည်။ညကျကိုပိုင်က အပြင်မဖျာအေးဆေးတွေ့ချင်တယ်ပြောတော့ သူလဲ ခေါင်းငြိမ့်မိသည်။
စနေနေ့ညနေတွင် အေးမိစံတို့အတွဲက အထိမ်းအမှတ်ရှိလို့ သူနဲ့ကိုပိုင်ကို ခေါ်ကာktv ကိုသွားကြသည်။ပိုးပိုးက ပုဂံဖက်သွားတာမို့မပါ။သူတို့လေးယောက် ဆိုကြ သောက်ကြရင်းနဲ့ ရှစ်နာရီခွဲကျော်တော့ အေးမိစံက ကိုပိုင့်ကို သူ့ကိုလိုက်ပို့ခိုင်းသည်။အေးမိစံဘဲက ကိုပိုင့်နားကို ကပ်ကာတိုးတိုးလေးပြောနေသည်။ကိုပိုင်က ရီပြီးပြန်ပြောသည်။လမ်းရောက်မှမေးကြည့်တော့ သူတို့အတွဲက ဟိုတယ်ကိုသွားမလို့တဲ့လိုပြောသည်။
ဒီလိုနဲ့ကိုပိုင်က သူ့ကို ကိုပိုင့်တိုက်ခန်းကိုခေါ်လာသည်။
တိုက်ခန်းရောက်တော့ သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို ဟိုနေ့ကအရှိန်ကလဲရှိနေပြန်တော့ စိတ်ကထိန်းမရတော့။ နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ ဝိုင်သောက်လာတဲ့အရှိန်နဲ့မို့ ရဲနေသည်။အင်္ကျီအနက်အကြပ်နဲ့ ထမိန်အပျော့သား အနီလေးက သူမရဲ့ကောက်ကြောင်းအလှကိုဖော်ပြနေတာမို့သူလဲ စိတ်ထိန်းဖို့မကြိုးစားတော့။
အခန်းထဲခေါ်လာပြီးအခန်းထဲရောက်တာနဲ့ နှင်းမြတ်မွန်ကို ဖက်ကာနမ်းလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ သူ့ကိုပြန်နမ်းလိုက်သည်။သူနမ်းနေရင်းနဲ့ တကိုယ်လုံးကိုပွတ်သပ်ရင်း တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ညှစ်ကိုင်လိုက်တော့ အသက်ရှူသံပြင်းသွားးပြီးသူ့ကိုတင်းကြပ်စွာလာဖက်လေသည်။နမ်းနေရင်းနဲ့ နှင်းမြတ်မွန်ကို ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်ပြီးသူ့အက်ျင်္ီနဲ့ဘောင်းဘီကို မြန်မြန်ချွတ်လိုက်သည်။အတွင်းခံသာကျန်တော့သည်။ နှင်းမြတ်မွန်အင်္ကျီကို ချွတ်လိုက်တော့ ဘော်လီ အသားရောင်လေးက ဖြူတဲ့အသားမှာ ပဏာရနေသည်။ ဘော်လီကိုချွတ်လိုက်တော့ နို့လေးနှစ်လုံးက လှပစွာပေါ်လာသည်။သူလဲ နို့တွေကို စို့လိုက်ရင် နို့သီးခေါင်းကို ကလိလိုက်တော့ ခါးကော့တက်လာပြီ
”အင်းဟင်းဟင်း ကိုပိုင်ရယ်”သူ့ကိုလာဖက်လိုက်သည်။သူလဲ နို့တွေစို့ရင်း ထမိန်ကိုချခ်တ်ိုက်တော့ နှင်းမြတ်မွန်က ကူပြီးချွတ်ပေးလိုက်သည်။ပင်တီအဖြူသာကျန်တော့ သူလဲ ပင်တီဂွဆုံကို လက်တင်လိုက်ပြီး အဖုတ်အမြှောင်းလိုက် ပွတ်ပေးလိုက်ရာ နှင်းမြတိမွန်တယောက်ကော့တက်သွားသည်။နို့တွေကို စို့ရင်း အဖုတ်ကို ခပ်သွက်သွက်ကစားပေးလိုက်ရာ ပင်တီဂွဆုံမှာအရည်တွေ ရွှဲလာသည်။သူလဲ
နို့တွေစို့တာရပ်လိုက်ပြီးပင်တီကိုချွတ်လိုက်တော့ အမွှေးတွေက ဆေးနဲ့ရှင်းထားသည်ထင်သည်။ စုစုလေးနဲ့ပါးပါးလေးပဲဖြစ်နေသည်။သူလဲ ပေါင်ကိုဘေးကိုချဲလိုက်ပြီးအစေ့ကို လက်နဲ့ကလိလိုက်သည်။ လက်တစ်ဖက်ကနို့တွေကိုကိုင်ပြီးအစေ့ကိုအဆက်မပြတ်ချေပေးရာ ဖင်ကကော့ကော့တက်လာပြီး ပါးစပ်က လဲ ညည်းနေသည်။လက်မနဲ့အစေ့ကို ချေပြီး ကျန်လက်တဖက်က အဖုတ်ထဲကို ထည့်လိုက်က Gsportနေရာကိုမှန်းကာ ခက်သွက်သွက်လုပ်ပေးလိုက်ရာ
”အာ အာ ကိုပိုင် အင့် ဟင့် အ အ ”ဖင်ကြီးကမြောက်တက်လာပြီးအတောကြာသည်အထိရမ်းခါနေပြီး ပြန်ပြုတ်ကျသွားသည်။အဖုတ်ကအရည်တွေက ထွက်လာသည်။တချီပြီးသွားသည်။သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို ထူလိုက်ပြီး လီးကိုကိုင်ကာ မျက်နှာနားကို တိုးလိုက်တော့ နှင်းမြတ်မွန်လဲအသာကုန်းကာ သူ့လီးကို စုပ်ပေးလိုက်သည်။မစိမ်းလှတာမို့ ကျွမ်းကျင်တဲ့အနေအထားတော့ရှိသည်။သူလဲ
လီးကိုအာခေါင်ထဲရောက်အောင်ကော့ကော့ပေးလိုက်သည်။ဖင်ကကုန်းထားတာမို့ ဖင်ကိုလှမ်းကာညှစ်လိုက် ခပ်ဆက်ဆက်လေးရိုက်လိုက်လုပ်ပေးသည်။တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားပေမယ့် လိုလားဟန်ပြတာမို့သူလဲ ဆက်လုပ်ပေးနေသည်။ကောင်းလာတာမို့ သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ပါးစပ်ထဲမှ လီးကိုထုတ်လိုက်တော့ သိပ်ကျေနပ်ဟန်မပြ။ဆက်လုပ်ပေးချင်သည့်သဘော။သူလဲ ပြုံးပြလိုက်ပြီး နှင်းမြတ်မွမ်ကို ထူလိုက်ကာ သူ့အပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ အဖုတ်ဝကို လီးနဲ့တေ့ကာ အသာထိုင်ခိလိုက်သည်။
”အ့ ဟ ကြီးလိုက်တာ ကိုပိုင်ရယ် ”ညည်းရင်း သူ့ပုခုံးကို အသာကိုင်ကာကြွလိုက် ထိုင်လိုက်အသာလုပ်နေသည်။ လီးကတော့ ကျဉ်းကြပ်စွာတိုးဝင်နေသည်။တော်တော်လေးကြာတော့
လီးတစ်ခုလုံးဝင်သွားကာဆီးခုံနှစ်ခုထိကပ်သွားသည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ ရမက်ထန်စွာ သူ့နှုတ်ခမ်းကို အငမ်းမရ နမ်းရင်း အပေါ်ကနေ အသာဆောင့်လိုက်သည်။သူလဲ နို့တွေကို ကိုက်လိုက်ချေလိုက်လုပ်နေရင်း တခါတခါဖင်ကို ညှစ်ချေပေးလိုက်သည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆောင့်ချက်တွေက သွက်လာသည်။
”ဇွပ် ဇွပ် ဖတ်ဖတ် ”
”ကောင်းတယ် အရမ်းကောင်းတယ် ဟင်း ဟင်း”
မောဟိုက်သံနဲ့ဖြေရင်း ဆက်တိုက်ဆောင့်နေသည်။သူလဲ အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးရင်း လက်တွေက ဖင်ဝကို အသာကစားနေလိုက်သည်။ဖင်ဝက ရှုံ့သွားလိုက် ကျယ်လာလိုက်နဲ့ဖြစ်နေသည်။ဆောင့်ချက်တွေက စိပ်စိပ်လာပြီး ညည်းသံက ပိုမြန်လာသည်။သူ့ကို ကိုင်ထားတဲ့လက်တွေက တင်းကြပ်လာသည်။
”အာ့ အာ့ ကောင်းတယ် ကိုပိုင်ရယ် ဟင့် အင့် အင့် အင့် ဟူးဘယ်လိုကြီးလဲကွာ အာ့ အာ့”ဆောင့်ချက်က မြန်လာပြီးအချက်နှစ်ဆယ်လောက်ဆောင့်ပြီးသောအခါနှင်းမြတ်မွန်
ကော့တက်သွားပြီးခပ်ဆက်ဆက်သုံးလေးချက်ဆောင့်ချရင်းသူ့အပေါ်ကို လဲကျလာသည်။ပြီးသွားလေပြီ။သူလဲ အသာဖက်ထားရင်း နဲ့နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ အတွင်းသားတွေညှစ်အားကို အရသာခံနေလိုက်သည်။ အတော်ကြာငြိမ်နေပြီးမှ သူ့ပါးကို လာနမ်းတော့ သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ သူ့အပေါ်ကနေ အသာဆင်းကာ သူ့ရှေ့မှာ ကုန်းပေးလိုက်သည်။လုံးဝန်းတဲ့တင်လေးကို ကောက်ကာခါးကို ကော့ပြီးရှေ့ပိုင်းက လက်ထောက်ကာ သူ့ကို ကြည့်နေတဲ့ဟန်က သူ့စိတ်ပိုသွေးဆူစေသည်။သူလဲ ထကာ နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ နောက်ကနေ နေရာယူလိုက်ပြီး ဖင်ကိုအသာဖြဲလိုက်ရာ ဖင်ပေါက် ညိုညိုလေးက အရည်တွေရွှဲနေသလို အဖုတ်ကလဲ အရည်တွေနဲ့ ရွှဲနေသည်။သူလဲ လီးကိုအဖုတ်ဝမှာ တေ့လိုက်ရင်း အသာဖိထည့်လိုက်သည်။အ ခနဲ့အသံနဲ့ဖြစ်သွားပေမယ့် ဖင်ကိုနောက်ကိုပိုပြီးကော့ပေးတာမို့ သူလဲ အဆုံးထိထည့်လိုက်သည်။အရည်တွေနဲ့မို့ ချောမွေ့စွာဝင်သွားသည်။သူလဲ အသာဆောင့်ရင်း ဖင်ကို ညှစ်လိုက် ဖျန်းခနဲရိုက်လိုက်လုပ်ပေးလိုက်သည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကိုဆောင့်ခိုင်းတာမို သူလဲ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကို ညှပ်ကိုင်ကာ နောက်ကနေ ဆက်တိုက်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
”ဗွတ် ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်”
”အ အ အင့် အင့် ကောင်းတယ် ဆောင့် ဆောင့် ဟင့် ဟင့် ဟင့်”
သူလဲ ပြီးချင်လာပြီမို့ မနားတမ်းဆောင့်လိုက်သည်။ဆောင့်ချက်တွေကြာလာတာနဲ့
သူ့လီးတစ်ခုလုံးတောင့်တင်းလာကာ သုတ်ရည်တွေက နှင်းမြတ်မွန်အဖုတ်ထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်သည်။ နှင်းမြတ်မွန်လဲ နောက်တချီပြီးသွားသည်။အဖုတ်အတွင်းသားတွေက သူ့လီးကို အတင်းကိုညှစ်ထားသည်။ လက်တွေက မွေ့ရာခင်းကိုတင်းကြပ်နေအောင် ဆုပ်ချေထားရင်း ပါးစပ်ကလဲ တအားအားနဲ့ါါါါါါါါါါါါါါအေါါ်နေသည်။
ါါသူလဲလေးငါးချက်ဆောင့်ါါါလိုက်ပြီးနှင်းမြတ်မွန်ပေါ် ကုန်းကုန်းကြီးအမောဖြေနေလိုက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင်းမြတ်မွန်လဲ အိပ်ရာပေါ်သို့ ဘေးတိုက်လဲကျသွားသည်။သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်နောက်ကနေ ဖက်ထားလိုက်သည်။အဖုတ်က တချက်တချက်ညှစ်နေတုန်းပင်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ သူ့ကို လှည့်ကာ နမ်းလိုက်ရင်း”ကိုပိုင်က သိပ်အားကြီးတာပဲဟင့် သူများကို ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူး။နှုန်းသွားတာပဲ”
သူလဲ ခပ်သဲ့သဲရီလိုက်ရင်း နှင်းမြတ်မွန်နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းလိုက်သည်။အတော်လေးကြာတော့ နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကို အသာဖယ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားရင်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေသည်။သူလဲ တစ်ရှူးယူကာသန့်ရှင်းလိုက်ပြီး ပုဆိုးတထည်ထုတ်ကာ ဝတ်လိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်က ပြန်ထွက်လာတော့ သူလဲ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ကာ အပေါ့သွားကာ ရေဆေးလိုက်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့ နှင်းမြတ်မွန်က အဝတ်တွေဝတ်ပြီးသွားသည်။သူက
အဝတ်တွေလဲမလားမေးတော့ ခေါင်းခါတာနဲ့ သူလဲ အင်္ကျီတထည်ဝတ်လိုက်ပြီးကုတက်ပေါ်တွင်းလှဲချလိုက်သည်။ နှင်းမြတ်မွန်လဲ သူ့ကို လာဖက်ရင်း အနားမှာစကားလာပြောနေသည်။
စကားအတန်ပြောပြီးနှစ်ယောက်သားမှေးကနဲအိပ်ပျော်သွားသည်။သူတရေးနိုးကြည့်လိုက်တော့ နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကိုကျောပေးကာ ဘေးစောင်းလေးအိပ်နေသည်။သူလဲ ကြည့်နေရင်းနဲ့စိတ်က ထန်လာတာမို့ အနားကိုကပ်ကာ နှင်းမြတ်မွန်ကို သိုင်းဖက်လိုက်သည်။ပြီးတော့ ချိုင်းအောက်ကနေလျှိုကာ နို့တွေကိုကိုင်လိုက်သည်။ နှင်းမြတ်မွန်ကတော့ မနိုးသေး။သူလဲ လက်တဖက်က ထမိန်ကို အသာဖြေချလိုက်ကာ အောက်ကို ဆွဲချလိုက်ရာ တင်းပါးဖွေးဖွေးလေးတွေနဲ့ပေါင်တံဖြူဖြူလေးကပေါ်လာသည်။သူလဲ ပုဆိုးကိုဖြေချလိုက်ရာ ရန်သူတွေတဲ့မြွေဟောက်အလား ခေါင်းထောက်ထလာသည်။သူလဲ
နှင်းမြတ်မွန်ခြေထောက်တဖက်ကိုအသာမလိုက်ရင်း အစေ့ကို ချေပေးလိုက်သည်။
”ကိုပိုင်ရယ် ဟင့် သူများအိပ်နေတာကို နှောက်ယှက်တယ် လူဆိုးကြီး”
”အာ ဘာမှန်းမသိဘူး သွား”
သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ အဖုတ်ဝကို အသာတေ့လိုက်ကာ ဖိထည့်လိုက်ရာ
”အားကျွတ်ကျွတ် ကိုပိုင် ဖြည်းဖြည်းကွာ အရမ်းနာတယ်ဟင့်ဟင့်”
အဖုတ်ထဲသို့ တင်းကြပ်စွာဝင်သွားသည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ ဖင်ကို နောက်သို့ ကော့ပေးထားသည်။သူလဲ လီးတဝက်လောက်ကို ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်လုပ်ရင်းလက်တဖက်က နို့တွေကိုင် တဖက်က အစေ့ကို ချေပေးရင်း အသာညှောင့်နေလိုက်သည်။အရည်တွေကထွက်လာပြန်တာမို့ အဝင်အထွက်က ချောမွေ့လာသည်။ နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ သူ့ကို ဖြည်းဖြည်းဆောင့်ပေးပါလို့ပြောတာနဲ့ သူလဲ လီးကိုအဆုံးထိထည့်လိုက်ရင်း ဖြည်းဖြည်ချင်းဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ဆောင့်ချက်တွေက ကြာလာသည်နှင့်အမျှသူလဲ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်လိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ အစေ့ကို ကလိနေတဲ့ လက်ကိုခပ်တင်းတင်းကိုင်ထားရင်း ဖင်ကိုနောက်သို့ကော့ကော့ပေးထားသည်။ပါးစပ်ကလဲ တဟင့်ဟင့်နဲ့ညည်းနေသည်။
သူလဲနှင်းမြတ်မွန်ရဲ့လက်ကိုယူကာ နို့တွေပေါ်တင်ပေးလိုက်ရင်း သူ့နို့ကို သူ့ဟာသူ ကိုင်ခိုင်းးရင်းခါးကိုကိုင်ကာ နောက်ကနေ အားရပါးရဆောင့်နေလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲအရမ်းကောင်းလာပြီထင်သည်။နို့တွေကို အရမ်းချေနေရင်းပါးစပ်ကလဲ ဆောင့်ခိုင်းနေသည်။သူလဲနောက်ကနေ နှင်းမြတ်မွန်ကို မှောက်လိုက်ပြီးအပေါ်ကနေ အားရပါးရဆောင့်လိုက်ရာသုတ်ရည်များ ပန်းထွက်သွားသည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ ကယောင်ကတမ်းနဲ့ ညည်းနေသည်။ သူလဲနှင်းမြတ်မွန်အပေါ်မှောက်လိုက်ရင်း နှင်းမြတ်မွန်ကို နမ်းလိုက်ရင်း နှစ်ယောက်သားအမောဖြေနေသည်။ အမောပြောတော့ သူလဲ အပေါ်ကနေ ဘေးကိုလိမ့်ချလိုက်ရာ နှင်းမြတ်မွန်လဲ ထမိန်ကို ယူကာရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားပြီး ရေဆေးနေသည်။တအောင့်နေရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာတော့သူလဲ
ဝင်ပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ကာအပေါ့သွားပြီးကုတင်ပေါ်တက်ကာနှင်းမြတ်မွန်ကို ဖက်ကာအိပ်လိုက်သည်။ မနက်အိပ်ရာနိုးတော့ တချီထပ်ဆွဲလိုက်ကြပြန်သည်။နှင်းမြတ်မွန်ကအပေးကောင်းသလို ပုလွေကောင်းသည်။ သူ့ရဲ့လိုးချက်တွေကိုအဆွဲကြီးဆွဲနေသည်။ရေချိုးအဝတ်တွေဝတ်ကာ သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို အဆောင်ကိုလိုက်ပို့လိုက်သည်။
ညဖက်တွင် သူနဲ့နှင်းမြတ်မွန်တို့ အရင်ကထက်ပိုကာ ပွင့်လင်းလာပြီး နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ သူမေးသမျှဖြေသည်။ သူနဲ့နှင်းမြတ်မွန်တို့ ဆန္ဒရှိရင်ရှိသလို တွေ့ဖြစ်ကြသည်။သူ့တိုက်ခန်းမှာတွင်တွေ့ကြသည်။
နောက်ပိုင်းတွေ့သည့်အခါတိုင်း သူကနှင်းမြတ်မွန်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆက်ဆံတက်သလို နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ အဲလိုဆက်ဆံရတာကိုသဘောကျသည်။ကုန်းခိုင်းကာ တင်ပါးတွေကို ရိုက်ရင်း နောက်ကနေ ဆောင့်ရတာကို သူကလဲ သဘောကျသလို နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ ကြိုက်တာမို့ အပေးအယူမျှသည်နောက်ပေါက်ကို ဖွင့်ဖို့အတွက် သူတဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်ပေးရသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နှင်းမြတ်မွန်လဲ ဖင်ကို ဇိမ်ခံတက်လာသည်။ နာနာကျင်ကျင်အရာသာကို ကြိုက်တက်သူမို့ စည်းရုံးရတာတော့ သိပ်မခက်။ဒါပေမယ့် ခုထိတော့ သူနှင်းမြတ်မွန်ကို နောက်ပေါက်ကို မလုပ်သေး။
ဒီလိုနဲ့သင်တန်းကာလ ငါးလကျော်ရောက်လာသည်။ရုံက သူ့ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့
ခဏပြန်လာရန်ခေါ်သဖြင့်အရေးတကြီးပြန်ရမည်။စကားစပ်မိလို့ပြောတော့ အေးမိစံက သူလဲ နေပြည်တော်သို့ သွားစရာရှိသည်တဲ့။သူသွားမယ့်ရက်နဲ့ ကြုံနေတာမို့ သူနဲ့လိုက်ချင်လိုက်ခဲ့လို့ပြောတော့ အေးမိစံရဲ့ ရည်းစားကလဲ လိုက်သွားဖို့်ပြောသည်။ဟိုရောက်ရင်လဲ လိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးဖို့လဲ အကူညီတောင်းသည်။သူလဲ သွားမယ်ရက်ကျတော့ အေးမိစံကိုအဆောင်ကိုသွားခေါ်လိုက်သည်။ဟိုမှာ တည်းဖို့နေရာရှိလားမေးရာ မရှိဘူးတဲ့။ သူလဲ လူပျိုဆောင်မှာနေတာမို့ မိန်းကလေးခေါ်တည်းဖို့မဖြစ်နိုင်။ဒါကြောင့် သူလဲ သူတို့ရုံးက အမကြီးတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းတော့ ရတာနဲ့အဆင်ပြေသွားသည်။သူ့ညီမလို့ပြောထားသည်။ နှစ်ယောက်သား ညနေလေးနာရီလောက်မှ ထွက်လာကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်ကတော့ စောင်မပြီးကြည့်ရှူကာ ကိုယ်ဖိရင်ဖိစောင့်ရှောက်ဖို့စသည်။သူတို့ထွက်လာတော့ လမ်းမှာ မိုးတွေတအားရွာသည်။ အချိန်အခါမဟုတ်ရွာသည်။သည်းသည်းမဲမဲရွာတာမို့ ကားကိုဖြေးဖြေးချင်းဂရုတစိုက်မောင်းနေရသည်မို့ ခရီးမတွင်။ ခြောက်နာရီလောက်က ရန်ကုန်ကထွက်တာဖြစ်ပေမယ့် ဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းနေရတာမို့ ၁၁၅မိုင်ရောက်တော့ ဆယ်နာရီထိုးနေပြီ။နှစ်ယောက်သား ဗိုက်ကလဲဆာနေတာမို့ ထမင်းမှာစားရင်း သူလဲ
ရုံးကအမကြိ်းဆီဖုန်းဆက်တော့ ဖုန်းလိုင်းကခေါ်မရ။နာရီဝက်ကျော် လောက်ကြာတော့ ပြန်ထွက်လာကြသည်။ မိုးကမတိတ်။ပိုပိုသည်းလာသည်မှတ်ရ။စိတ်ကိုလျော့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းသာသွားရသည်။ နေပြည်တော်ကိုရောက်တော့ တစ်နာရီထိုးနေပြီ။သူလဲအပျိုဆောင်ကိုမောင်းသွားတော့ မီးကပျက်နေသည့်အပြင် ဘယ်လိုမှနှိုးလို့မရ။မိုးသံကြောင့် မကြားတာဖြစ်နိုင်သလို မိုးကလဲ အေးတာမို့
မိုးအေးအေးနဲ့အိပ်မောကျနေကြတာဖြစ်မည်။ဒါကြောင့်သူလဲ အကြံအိုက်နေသည်။လူတွေကလဲ အေးပြီး မိုးရေကလဲ စိုနေကြသည်။အိပ်ကလဲ အိပ်ချင်နေကြတာမို့ နှစ်ယောက်သားတိုင်ပင်ရသည်။အေးမိစံကို တည်းခိုခန်းတခုတွင်တည်းဖို့အတွက်။သူကတော့ အဆောင်ပြန်အိပ်မယ်ပြောတော့ အေးမိစံကလဲ တယောက်တည်းမို့ကြောက်သည်တဲ့။နောက်ဆုံးတော့ နှစ်ယောက်သား
တည်းခိုခန်းတွင်တည်းဖို့သဘောတူလိုက်ကြပြီး၊ တည်းခိုခန်းသို့သွားကာအခန်းတခန်းယူလိုက်ကြသည်။ အေးမိစံ
သူမက ဒေးဒရဲသူ။သူနဲ့ သူ့ရည်းစားနဲ့က ကိုးတန်းနှစ်ကတည်းက ချစ်သူတွေဖြစ်လာတာ။ငယ်ကတည်းကလဲ သူငယ်ချင်းတွေ။မိဘချင်းကလဲ ရင်းနှီးနေကြတာမို့ သူတို့ဖြစ်သွားကြတော့ အိမ်ကို အသိပေးတော့ စာကြိုးစားကြဖို့ပဲပြောပြီးဘာမှသိပ်မပြောကြ။ဆယ်တန်းအောင်တော့ မိဘတွေက သူတို့ကို အချိန်တန်ရင်ပေးစားကြဖို့ပြောဆိုနေကြတော့ နှစ်ယောက်သား ပွင့်လင်းသွားကြသည်။သူကလဲ သူ့ရည်းစားကလွဲပြီးဘယ်ယောက်ကျားလေးကိုမှ သိပ်မခင်ခဲ့သလို မရင်းနှီးခဲ။သူ့ရည်းစားကလဲ ဘယ်သူမြှောက်ပေးလိုက်သည်မသိ။တစ်ရက် အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတုန်း သူ့အိမ်ကိုလာပြီး သူ့ကိုဖက်လိုက်နမ်းလိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ သူမညဝရဲ့အပျိုစင်ပန်းကိုဆွတ်ခူးသွားသည်။သူကလဲ ကျေကျေနပ်နပ်ပေးခဲ့တာလဲပါသည်။နှစ်ယောက်သားအတွေ့အကြုံမရှိ အရိုင်းတွေမို့ အတွေ့ထူးသည်မို့ ငတ်မပြေနိုင်။သူမလဲ စီပွားရေးတက္ကသိုလ်တက်ရသလို သူ့ရည်းစားကလဲ အဝေစသင်သာတက်ကာ
မိဘတွေလက်ငူပ်လက်ရင်း လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုဝင်ကူသည်။ဝင်ကူသည်ဆိုသည်ငြား ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင်ပင်။ရန်ကုန်ကို တက်လာပြီးသူနဲ့တွေ့သည့်အခါများတွင်းသူမ အရမ်းပျော်ရသည်။နောကိတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နှစ်ယောက်သားရိုးလာတာလား ဘာလားမသိ။သိပ်မလုပ်ဖြစ်တော့။
ခဏခဏလဲတွေု့ဖစ်ကြလို့လဲပါသည်။ဒုတိယနှစ်ရောက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီးတိုက်ခန်းငှါးတော့ ဆုပြည့်ရည်းစား ကိုပိုင်နဲ့ခင်သည်။ကိုပိုင်က သဘောကောင်းသလို ရုပ်ရည်ကလဲ
မိန်းကလေးတွေသဘောကျသည်ရုပ်ရည်မျိုး။အပြောကလဲကောင်း ပိုက်ဆံကလဲ ရွှင်သူမို့ သူ့ရည်းစားကတောင်အားကျ သဘောကျသည်။တခါတလေ သူကတောင် သူ့ရည်းစားကိူ ကိုပိုင်ကို ယောက်ကျားချင်းများကြိုက်နေသလားလို့စသည်။သူတို့တွေ့ရင် ကိုပိုင့်ကိုဘယ်လိုသဘောကျကြောင်း မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့သူမကမပြောရပဲ သူကကြီးပြောလို့။အဲ့လိုစတော့ သူ့ရည်းစားက သူသာမိန်းကလေးဆိုရင် ကိုပိုင့်ကို လိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောတော့ သူ့နှဖူးသူပြန်ရိုက်ရသည်။ပြောမယ့်သာပြောတာ သူမလဲ ကိုပိုင်နဲ့သူ့ရည်းစားကိုယှဉ်တိုင်း သူ့ရည်းစားကိုအားမရ။အလုပ်ကအစပင်။ကိုပိုင်က အရည်အချင်းရှိပြီး ဦးဆောင်နိုင်သည်။သူ့ရည်းစားက ရေသာခိုကာ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိ။ကိုပိုင်ကတော့ ငယ်သေးလို့ပါလို့ပြောသည်။ သူတို့တွေရင်းနှီးလာကြတော့ အံ့သြဖို့ကောင်းတာက နှင်းမြတ်မွန်နဲ့ ပိုးပိုးကပါ ကိုပိုင့်ကို စိတ်ကစားနေကြတာကိုပင်။ မြွေမြွေချင်းခြေမြင်ကြသည်။ဒါပေမယ့်သူငယ်ချင်းရည်းစားဖြစ်နေတာတကြောင်း ဆိုင်သူကိုယ်ဆီရှိနေကြတာမို့ ရိုးသားစွာဆက်ဆံကြပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ ကိုပိုင့်လိုချစ်သူမျိုးရချင်မိတာတော့ အမှန်ပင်။ကိုပိုင်နဲ့ရင်းနှီးလာလေ ကိုပိုင့်ရဲ့အပြော ပြုမူပုံတွေက သူတို့ကို စွဲလန်းစေသည်။တခါတလေ ကိုပိုင်ကများတောင်းဆိုရင် ကိုပိုင့်ကို နမ်းမိမည်လားမသိ။ကျန်တဲ့သူတွေတော့မသိ။သူကတော့ အဲ့လောက်ထိကို စိတ်ကစားမိသည်။ဆုပြည့်နဲ့ စကားစပ်မိလို့ ပြောကြပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရည်းစားအကြောင်းပြောဖြစ်ကြတဲ့အခါတိုင်း သူမတို့ ရင်ခုန်မိသည်။ တခါတလေသူနဲ့သူ့ချစ်သူတို့ဆက်ဆံဖြစ်ရင်
ကိုပိုင်ဆိုပြီးစိတ်ကူးယဉ်မိတိုင်းသူမကျေနပ်အားရမှုကိုတမူထူးစွာရခဲ့တာတော့အမှန်ပင်။ ဆုပြည့်ယောက်ကျားယူသွားတော့ သူတို့ ကိုပိုင့်ကိုစိတ်ပူစွာလိုက်ရှာမိကြသည်။အဆက်အသွယ်လဲမရ ဘယ်လိုမှရှာမရတော့ သူမ သူ့ရည်းစားကို ပြသာနာရှာမိသည်အထိ။နောက်ပိုင်း
ဘယ်လိုမှ ဆက်သွယ်မရတော့တာနဲ့ အားလုံးစိတ်လျှော့လိုက်ကြသည်။ကျောင်းပြီး အလုပ်ရတော့လဲ သူမတို့မယူကြသေး။အရာရာအဆင်သင့်ဖြစ်မှယူကြဖို့တိုင်ပင်ထားတာမို့ သူလဲ ငွေစု ကိုယ်လဲ ငွေစုကာ တစ်လတစ်ခါနှစ်ခါတွေ့ဖြစ်ကြသည်။တွေ့သည့်အကြိမ်ကဟိုးအရင်ကလောက် မစိပ်တော့တာမို့ တွေ့သည့်အခါတိုင်း စိတ်လှုပ်ရှားမှုပေးစွမ်းနိုင်တာတော့အမှန်။ဗဟုသုတလဲ ကြွယ်လာကြတာမို့ လိင်ကိစကို အတက်နိုင်ဆုံး သာယာအောင်နှစ်ယောက်သားလုပ်ဖြစ်ကြသည်။မိဘတွေကလဲ တချိန်ယူကြမည့်သူတွေမို့ ခုယူစေချင်ကြပေမယ့် သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကောင်းနေတာမို့အရမ်းတော့မတိုက်တွန်းကြ။ဒီလိုနဲ့နေလာရင်း မမျှော်လင့်ပဲကိုပိုင့်ကိုပြန်တွေ့ကြတော့ ကိုပိုင်က အရင်ကထက်ကို ပိုပြီးကြည့်ကောင်းလာကာ ပိုပြီးလဲ တည်ငြိမ်လာသည်။အရင်လိုနွေးထွေးစွာပြန်ဆက်ဆံခါကြတော့ သူတို့သုံးဦး ပြန်ပြီး အတိတ်ကအကြောင်းကို သတိရကာ ရင်ခုန်သံပြန်နွေးလာကြသည်။သုံးယောက်လုံးက ဆိုင်သူတွေရှိနေကြဆဲမို့ ကိုယ်ရှိန်သတ်ကာ နေရပေမယ့် တွေ့သည့်အခါတိုင်း စလိုက်နောက်လိုက်နဲ့ စိတ်ဖြေရသည်။နှင်းမြတ်မွန်နဲ့ ပိုးပိုးကတော့ သူ့ထက်ပိုကာ ကိုပိုင်နဲ့တွေ့ဖြစ်ကြသည်။ကိုပိုင်ကတော့ အရင်လိုပင်သူတို့ကိုဆက်ဆံသည်။သူတို့ရည်းစားတွေနဲ့လဲ အဆင်ပြေပြီးကိုပိုင့်ကို အားလုံးက ခင်ကြသည်။ပိုးပိုးရည်းစားဆို ကိုပိုင့်ကို သူ့အမနဲ့ချိတ်ပေးသည်။ပိုးပိုးက သဘောမတူ။ခါးခါးသီးသီးပင်။ကိုပိုင်က သူ့အကိုဆိုပြီးသဘောမတူကြောင်းပြောတော့ အားလုံးကဝိုင်းရီတော့ စိတ်ကောက်သွားလို့ ချော့ရသေးသည်။အဲ့ကတည်းက သူရောနှင်းမြတ်မွန်ပါ ပိုးပိုးရဲ့စိတ်ကိုသိလိုက်ကြသည်။ ပိုးပိုးကတော့ သူ့ရည်းစားနဲ့ ယူမှာဖြစ်သလို သူရော နှင်းမြတ်မွန်ပါ ဆိုင်သူကိုယ်စီနဲ့ ယူကြမည်ပင်။သို့သော်
သူတို့မယူခင် ကိုပိုင့်နဲ့ ပျော်ရွှင်စွာနေချင်မိသေးသည်။သူတို့တွေကလဲ ကိုပိုင်နဲ့ဆိုရင် သူတို့ရည်းစားတွေကို စိတ်ချသည်။ဒါကြောင့် သူတို့ရည်းစားတွေကလဲ ကိုပိုင့်ကို အားကိုးသလို ကိုပိုင်ကလဲ ညီတွေလိုပင်။ခုလဲ သူနေပြည်တော်ကို လာဖို့ရှိတော့ သူတယောက်တည်းသွားရမှာမို့ စိတ်ညစ်မိသည်။နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ သင်တန်းမပြီးသေး။သူ့ရည်းစားကလဲ အလုပ်ကိစ္စရှိနေတာမို့ ခေါ်မရ။တိုက်ဆိုင်စွာ ကိုပိုင်က နေပြည်တော်သွားမှာလို့ပြောတော့ အဆင်ပြေသွားသည်။သူ့ရည်းစားကိုတောင် ကိုပိုင့်ကို ပြောသေးလားမေးတော့ မပြောဘူးလို့ပြောသည်။နေဖို့အတွက် ကိုပိုင်ကပဲစီစဉ်ပေးသည်မို့ နေဖို့ရော ဟိုမှာ သွားဖို့လာဖို့ပါ ကိုပိုင်ရှိနေတာမို့ အဆင်ပြေသွားတာကြောင့်စိတ်အေးသွားရသည်။သူ့ရည်းစားကလဲ စိတ်ချသွားကာ ပြန်သွားသည်။ထွက်လာတော့ ရန်ကုန်ကျော်ကတည်းက သည်းလိုက်တဲ့မိုး။ကားကိုထိန်းမောင်းနေရသည်။နေပြည်တော်ရောက်တော့ တစ်နာရီ။ ကိုပိုင်က သူ့ရုံးကအမကြီးအဆောင်ကိုလိုက်ပို့တော့ နှိုးလို့မရ၊သူတို့လဲ ပင်ပန်းလာ၊ အေးကအေးလာတာမို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ တိုင်ပင်ရာ တည်းခိုခန်းတည်းဖို့ဖြစ်လာသည်။တယောက်တည်းကျတော့လဲ သူကြောက်သည်။ နောက်ဆုံး ကိုပိုင်ပါ လိုက်တည်းဖို့ဖြစ်လာကာ အခန်းယူပြီးတည်းကြသည်။ကုတင်နှစ်လုံးမို့ဆင်ပြေသည်။ သူတို့အခန်းထဲရောက်ပြီး အေးလာကြတာမို့ ကိုယ်ဆီ ကုတင်ပေါ်တက်ကာ စောင်ခြုံလိုက်ကြပြီး အိပ်မယ်လုပ်တော့ မီးက ပျက်သွားသည်။ညလဲ နက် အေးလဲအေးတာမို့ မီးစက်မနိုးတာလား မရှိတာလားမသိ မှောင်နေသည်။ အပြင်မှာ လေတွေကတိုက် လျှပ်တွေကလက်နေတာမို့ သူမကြောက်သည်။ဒါကြောင့်
ကိုပိုင့်ကုတင်ဖက်သို့တိုးကပ်ပြီးနေရသည်။အဲ့အချိန်မှာပဲ မိုးက ချုန်းဆို အနားကပ်ကာ ပစ်ချလိုက်သလိုမို့ သူလဲ ကြောက်အားလန့်အား အော်ပြီး ထခုန်လိုက်တော့ ကိုပိုင်က လာထိန်းပေးရသည်။သူလဲ ကိုပိုင့်ကို အားကိုးတကြီးဖက်ထားတော့ မကြောက်ဖို့ကိုပိုင်ကနှစ်သိမ့်ပေးသည်။အခြေအနေကတည်ငြိမ်သွားတော့ သွေးသားမတော်စပ်သူနှစ်ဦး သူ့ဖက်ကမရိုးသားသူမို့ ဖက်ခံထားရတော့ ရုန်းထွက်တော့ကိုပိုင်မလွှတ်ပေးတော့။ သူ့ကိုငုံ့ကာ နှုတ်ခမ်းကို နမ်းလိုက်တော့ သူမ ဘာဖြစ်သွားသည်မသိ။ဒီလိုမျိုးမျှော်လင့်ထားတာက စိတ်ကူးထဲမှာ လက်တွေ့ကြုံလာရတော့ လေဟာနယ်လိုလို အိပ်မက်လိုလိုဖြစ်သွားသည်။
အေးမိစံကိုသူ နမ်းလိုက်ရင်း လက်တွေက တင်ပါးတွေကိုပွတ်ကာ ညှစ်လိုက် ထမိန်စကပ်အကြပ်ပေါ်ကနေ ပင်တီကြိုးလေးကိုဆွဲလိုက်လုပ်လိုက်သည်။အေးမိစံသူ့ကို စိတ်ယိုင်နေမှန်းသိသည်။ဒီလိုလုပ်ဖို့အရင်က စိတ်ကူးမရှိပေမယ့် နှင်းမြတ်မွန်က ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားပြီးတာမို့ သူစမ်းချင်မိသည်။ခုတော့ တိုက်ဆိုင်စွာကြုံလာတာမို့ ငါးကြော်မကြိုက်ကြောင်မိုက်ဖြစ်သွားပေမည်။သူလဲ
အေးမိစံကိုကုတင်ပေါ်သို့ကန်းလန့်ဖြတ် လှဲချလိုက်တော့ မီးက ဖြတ်ခနဲ ပြန်လာသည်။သူ အေးမိစံ ရှပ်အင်္ကျီအဖြူကိုချွတ်လိုက်တော့ ဘရာ အနက်ရောင်လေးပေါ်လာသည်။ဘရာကိုပါချွတ်လိုက်တော့ နို့တွေက စို့ချင်စရာလေးတွေ။သူလဲ နို့တွေကိုစို့လိုက်ပြီးလက်တဖက်က ကျန်နို့ကို
ချေလိုက်ပြီးနို့သီးခေါင်းတွေကိုကစားလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ တဟင်းဟင်းနဲ့သူ့ခေါင်းကို ပွတ်နေသည်။သူနို့စို့နေရင်း အေးမိစံရဲ့ ထမိန်စကပ်အနက်ကိုချိတ်ဖြုတ်လိုက်ကာ ချွတ်လိုက်သည်။အေးမိစံကလဲ
တင်ပါးကိုကြွကာချွတ်ပေးလိုက်သည်။ပင်တီပနိးရောင်းဂွဆုံက စိုနေသည်။သူလဲ ပင်တီအတွင်းကိုနှိုက်ကာ အဖုတ်နုတ်ခမ်းသားတွေကိုကလိလိုက်တော့ ဖင်က ကြွတက်လာသည်။အစေ့ကိုကလိရာ ဖင်က ရမ်းသွားသလို သူ့ခေါင်းကိုလဲ အတင်းဖက်ထားသည်။နို့တွေစို့ရင်းအစေ့ကို ခပ်သွက်သွက်ဖိကာကလိရာ ပါးစပိမှ ရှီးခနဲ့အသံနဲ့အတူ ဖင်က မြောက်မြောက်တက်သွားသည်။သူလဲ အသာရပ်လိုက်ပြီး အင်္ကျီတွေဘောင်းဘီတွေကို ချွတ်လိုက်ပြီး အေးမိစံရဲ့ပင်တီပိုချွတ်လိုက်သည်။ပြီးတော့ ဆွဲထူလိုက်ကာ အေးမိစံမျက်နှာရှေ့ ဂွင်းတိုက်ပြလိုက်ရာ အေးမိစံက အလိုက်သိစွာ ပါးစပ်ကို အသာဟလိုက်ပြီး လီးကိုငုံကာကစားပေးလိုက်သည်။သူအရသာခံလိုက်ပြီးခဏကြာတော့ အေးမိစံကိုပက်လက်လှန်လိုက်ကာ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို မကာ မြှောက်လိုက်ပြီး လက်မောင်းမှာချိတ်လိုက်သည်။ အဖုတ်မွေးတွေက မထူမပါးလေးတွေနဲ့။သူလဲ နို့ကိုကုန်းကာစို့လိုက်ရင်း အဖုတ်ဝကိုအသာတေ့ကာ ဖိထည့်လိုက်ရာ
”အာ့ ကျွတ်ကျွတ် ကိုပိုင် ဖြည်းဖြည်း”
အေးမိစံမဖက်နှာက ရှုံ့မဲ့သွားပြီး ညည်းသည်။လကိတွေက သူ့ရင်ဘတ်ကိုထောက်ကာ တွန်းထားသည်။သူလဲ နို့ကိုစို့လိုက်ရင်း ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်လိုက်သည်။အဖုတိထဲသို့ သု့ရည်းစား ကြိမ်ဖန်များစွာ ဝင်ထွက်နေပေမယ့် ကြီးမားတဲ့ကိုပိုင့်ရဲ့ လီးကြီးကြောင့် အဖုတ်တခုလ့်ုးပြည့်ကြပ်နေသည်။သူကလဲ ကျွမ်းကျင်စွာ လုပ်နေတာမို့ သိပ်မကြာခင် အရည်တွေရွှဲလာကာ အဝင်အထွက်ချောလာသည်။ကောင်းလာသည်။သူလဲ ဖြည်းဖြည်းဆောင့်လိုက် သွက်သွက်ဆောင့်လိုက်နဲ့ အေးမိစံတယောက် ပြီးချင်လာသည်။ဖင်ကအောက်ကနေ
အလိုက်သင့်ကော့ကာပေးလိုက်သည်။သူလဲ ပြီးချင်လာတာမို့ နို့တွေကို လက်နဲ့ကိုင်ကာ အားကုန်ဆောင့်နေလိုက်သည်။ဆောင့်ချက်တွေနဲုအတူ နှစ်ယောက်သား ညည်းသံ အသားချင်းရိုက်သံတွေက မိုးသံနဲ့အပြိုင်စည်းချက်ညီစွာထွက်နေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့လီးက တောင့်တင်းလာကာ သုတ်ထွက်ချင်လာတာမို့ အားကုန်ကို မညှာတမ်းဆောင့်လိုက်ရင်း အဖုတ်ထဲသို ပန်းထည့်လိုက်သည်။အေးမိစံ အရုပ်ကြိုးပျက်သလိုဖြစ်သွားရသည်။သူမတခါမှ အဲ့လိုမပြီးဖူး။ခုပြီးသွားရတော့
လူတကိုယ်လုံးမလှုပ်ချင်တော့လောက်အောင်ပင်။နှစ်ယောက်သားအနားယူအမောဖြေပြီး ကိုပိုင့်ကိုအသာဖယ်ကာ အိမ်သာထဲဝင်ကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ကိုပိုင်လဲ ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားသည်။ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား ကိုပိုင့်ကုတင်မှာပင် ဖက်ကာ အိပ်လိုက်ကြသည်။မနက် ခြောက်နာရီကျ သူမနိုးလာတော့ ကိုပိုင်ကမနိုးသေး။သူညကအဖြစ်အပျက်ကိုတွေးရင်း ကျေနပ်မိသည်။ကိုပိုင်းမျက်နှာကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေရင်း အောက်ကို ကြည့်လိုက်တော့ ကိုပိုင့်ဟာ့ကြီးက မတ်နေသည်။
”ဟွန့် လွန်ကိုလွန်တယ်။အမလေး သူ့ဟာကြီးက အကြီးကြီပဲ။”
တယောက်တည်းပြောရင်း ကိုပိုင့်လီးကို ကိုင်ကာ အသာထုပေးလိုက်သည်။ပြီးတော့ အသာထကာ ပါးစပ်နဲ့ ငုံကာ စုပ်ပေးလိုက်ရာ ကိုပိုင်နိုးသွားသည်။ သူမခေါင်းကိုကိုင်ကာ အောက်ကနေညှောင့်ညှောင့်ပေးသည်။သူမအဖုတ်ကို လက်ညှိုးနဲ့ အသာထည့်ရင်းကလိနေသည်။သူမလဲ ကိုပိုင့်ဖက် ဖင်ကုန်းပေးရင်း လီးကို စုပ်ပေးလိုက်သညိ။သူလဲ
အေးမိစံအဖုတ်ကို နှိုက်လိုက်ရင်း ဖင်ဝကိုတံတွေစွတ်က ကလိလိုက်သည်။ဖင်က ရမ်းသွားသည်။ဖင်ဝက အဖွင့်မခံရသေးတာမို့ သူစိတ်က ဖင်ချချင်သွားသည်။လောလောဆယ်တော့မလုပ်သေး။တရက်တော့ လုပ်မယ်လို့တေးထားရင်း သူလဲ ဖင်နဲ့အဖုတ်ကို ကလိနေသည်။အဖုတ်ထဲက အရည်တွေက ရွှဲလာကာ အေးမိစံစိတ်က ထန်လာသည်မို့ သူ့အပေါ်ကနေဆောင့်ခိုင်းလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ အပေါ်ကနေ အားရပါးရဆောင့်မေသည်။
”ဖတ်ဖတ် ဗျိ ဗျိ အာ့ ရှီး ကျွတ်ကျွတ်”
သုကလဲ နို့တွေကိုဆုပ်ကိုင်ကာ အောက်ကနေ အလိုက်သင့်ကော့ပေးလိုက်သည်။ဆောင့်ချက်တွေ မြန်လာသည်။ နဖြည်းဖြည်းနဲ့ အေးမိစံဆောင့်ရင်းနဲ့ ပြီးသွားကာ သူ့အပေါ်ကို လှဲချကာ အငမ်းမရ နမ်းနေသည်။အဖုတ်ကလဲ သူ့လီးကို ဆက်ခနဲ ဆကိခနဲ့ ညှစ်နေသည်။အမောပြေတော့ သူလဲ အေးမိစံကို ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။
”အေးမိစံ ဖင်မခံဘူးဘူး ထင်တယ်”
”ကိုပိုင်ရယ် ကြောက်တယ်။ကိုပိုင့်ဟာကြီးက အကြီးကြီးပဲ ။ကွဲသွားမှဖြင့်”
သူလဲဘာမှဆက်မပြောတော့ပဲ စအိုပေါ်ကိုတံတွေးထွေးချကာ လက်နဲ့ကလိရင်း လီးကို အဖုတ်ထဲသို့ ထည့်လိုက်ရင်းဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ဖြည်းဖြည်းဆောင့်လိုက် ကပ်ဆောင့်လိုက် သွက်သွက်ဆောင့်လိုက်နဲ့ ကြာလာတော့ ပေးမိစံနောက်တခါ စိတ်ထလာရပြန်သည်။ဖင်ကိုနောက်ကိုအစွမ်းကုန်ပစ်ကာ ပါးစပ်မှလဲ အားမလိုအားမရဟန်နဲ့ဆောင့်ခိုင်းနေသည်။သူလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြီးချင်လာတာမို့ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ဖျန်းခနဲဖျန်းခနဲ လေးငါးချက်ရိုက်လိုက်ရာ တင်ပါးတွေက ရဲကာသွားပေမယ့်အေးမိစံက မငြင်းပေ။သူ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို အားနဲ့ ညှစ်ကိုင်လိုက်ရင်း နောက်ကနေ ဆက်တိုက်ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ဆောင့်ချက်တွေကြာလာတော့ သူလဲ ပြီးချင်သွားသည်။မညှာတော့ပဲ ဆက်တိုက်ဆောင့်ချလိုက်ရင်း အဖုတ်ထဲသို့ သုတ်ရည်တွေက တရှိန်ထိုး ပန်းထည့်လိုက်သည်။အေးမိစံလဲ ပြီးသွားသည်။နှစ်ယောက်သား ဖိုထိုးထားသလို တရှူးရျူးတရှဲရှဲနဲ့ ဖြစ်နေပြီး ဖက်ကာ အမောဖြေနေကြသည်။အမောပြေသွားတော့ အေးမိစံကသူ့ကိုအသာနမ်းကာ ဖယ်လိုက်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတော့ သူလဲ နောက်ကနေ လိုက်ဝင်လိုက်သည်။
”ကိုပိုင် ဘာဝင်လုပ်တာလဲ သူများရေချိုးမလို့”
”ကိုယ်လဲ ချိုးမလို့ တူတူချိုးမယ်”
ပြောရင်းရေပန်းဖွင့်ကာ အေးမိစံကိုပက်လိုက်သည်စနေကြသည်။နှစ်ယောက်သားတယောက်ကိုတယောက် ပြန်ပက်ရင်းဆပ်ပြာတိုက်ပေးကြသည်။သူ့လီးက ပြန်မတ်လာပြန်ရာ အေးမိစံက တော်တော်ထကိုထတယ်ပြောပြီး လီးကို ညှစ်ကာဂွင်းတိုက်ပေးရာ သူလဲ အေးမိစံ ပုခုံးကိုကိုင်ကာဖိလိုက်ရာ အေးမိစံက သူ့ရှေ့မှာ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး ပါးစပ်နဲ့ လွေပေးသည်။သူလဲအေးမိစံ ခေါင်းကို ကိုင်ကာ ညှောင့်နေသည်။အေးမိစံက ပုလွေကျွမ်းနေတာမို့ ခံလို့ကောင်းသည်။သူပြီးချင်လာတာမို့ ပါးစပ်ထဲမှာပြီးရမလားမေးရာ အေးမိစံက ခေါင်းငြိမ့်ပြသည်။သူလဲ အားမနာတော့ပဲ ပါးစပ်ထဲမှာပြီးလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ သူ့သုတ်ရည်တွေကို မြိုချလိုက်တာတွေ့တော့ သူ့စိတ်ထဲတမျိုးလေးဖြစ်သွားရသည်။သူတို့ရေချိုးပြီး အဝတ်လဲကာ မနက်စာ စားကြသည်။ဒီတည်းခိုခန်းမှာပဲ ဆက်နေမလားမေးရာ အေးမိစံက ခေါင်းငြိမ့်ကာ နေမယ်လို့ပြောသည်။ သူတို့စားသောက်ပြီးတော့ အခန်းထဲ ပြန်လာကြသည်။အေးမိစံက သူ့ဘဲဆီကိုဖုန်းဆက်နေသည်။သူလဲ ဖုန်းကလိနေသည်။နှင်းမြတ်မွန်ဆီက ဖုန်းလာတာမို့ စကားပြောလိုက်သည်။အခြေအနေမေးရာ သူက အေးဆေးပါပဲဖြေသည်။နှင်းမြတ်မွန်ဖုန်းချသွားတော့ ပိုးပိုးဆီက ဖုန်းဝင်လာသည်။ဒီနေ့ သူမ ပုဂံဖက်ကို ခရီးသွားရမည်တဲ့။ရက်နှစ်ဆယ်လောက်ကြာမည်။ဘာမှာမလဲမေးတော့ သူလဲ
လက်ဆောင်ဝယ်ခဲ့ဖို့ပြောလိုက်သည်။အတော်ကြာဖုန်းပြောပြီးတော့ ဖုန်းချသွားသည်။ကိုးနာရ်ိထိုးတော့ နှစ်ယောက်သား ကားနဲ့ အေးမိစံအလုပ်ရှိရာကို လိုက်ပို့လိုက်သည်။ပြီးတော့ သူ့ရုံးကို သွားကာ လူကြီးကိုသတင်းပို့လိုက်သည်။သူလုပ်စရာရှိတာတွေကို လုပ်ပြီးနေ့လည်ကျ အေးမိစံကို ခေါ်ကာ နေ့ခင်းစားသွားစားပြီး တည်းခိုခန်းကို ပြန်လာကာ နှစ်ယောက်သား လုပ်ကြသည်။ညနေစောင်းတော့ ရေချိုးကာ အပြင်သို့ထမင်းစားသွားပြီး ဘုရားကိုလိုက်ပို့ ရေပန်းဥယျဉ်ကို လိုက်ပို့လိုက်သည်။ကိုးနာရီကျော်တော့ ပြန်လာကာ နှစ်ယောက်သား လုပ်ကြပြန်သည်။သူကလဲ အေးမိစံကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆက်ဆံတာကို သဘောကျလာအောင် ဖြည်းဖြည်းချင်းသိမ်းသွင်းသည်။ဖင်ကိုချဖို့အတွက်လဲ စည်းရုံးရသည်။အေးမိစံကို သူ့ရည်းစားနဲ့အကြောင်းကို နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်မေးတော့ ပြောပြသည်။ဖင်မခံဖူးတာမို့ ကြောက်နေသည်။သူလဲ ဖင်ထဲကိုလက်နဲ့ ကလိရင်းချဲ့ပေးရင်း ဆွဲဆောင်ရသည်။တညလုံးနီးပါးလုပ်ကြရင်းအိပ်တော့ သုံးနာရီကျော်ပြီ။မနက်ကျတော့ ရှစ်နာရီမှ နိုးကာ ရေအတူချိုးကြသည်။မနက်စာ စားပြီး ရုံးကိုလာသည်။သူ့ကိစ္စကတော့ ပြီးသွားပြီ။
အေးမိစံဆီဖုန်းဆက်တော့ သူလဲ ပြီးသွားပြီမို့ အေးမိစံကိုခေါ်ကာတည်းခိုခန်းကို ပြန်လာကာ လုပ်ကြပြန်သည်။ မနက်ကျမှပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာမို့ နှစ်ယောက်သားအပြင်ကိုမထွက်ကြတော့ပဲ လုပ်ကြသည်။ အဝတ်ဆိုလို့နှစ်ယောက်သားကိုယ်ပေါ်မှာမရှိ။ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင် သူမနဲ့ တွေ့ဖို့က မလွယ်။သူမဘဲက ခဏ ခဏလာတက်တာမို့ တွေ့ဖို့သိပ်မလွယ်။ဒါကြောင့် အေးမိစံကလဲ အသားကုန် ကဲသည်။
နောက်ရက်မနက်ကျ သူတို့ ရန်ကုန်ကို ပြန်လာကြသည်။အေးမိစံကို အဆောင်ကို လိုက်ပို့ပြီး သူလဲ တိုက်ခန်းကို ပြန်ကာ အနားယူလိုက်သည်။ညနေကျ နှင်းမြတ်မွန်အဆောင်ကိုသွားကာ သင်တန်းက စာကိုသွားမေးရသည်။ နှင်းမြတ်မွန်နဲ့ သူအပြင်မှာ ညနေစာစားလိုက်ကြသည်။ပြီးတော့ ပြန်ပို့ကာ သူလဲ အဆောင်ကို ပြန်လာပြီး သင်တန်းကစာတွေကို ပြန်ပြီးလေ့လာလိုက်သည်။ဆယ်နာရီကျော်တော့ အေးမိစံဆီက ဖုန်းလာသည်။ သတိရလို့တဲ့။ပြီးတော့နှင်းမြတ်မွန်ဆီက။သူအိပ်မယ်လုပ်တော့ ပိုးပိုး။ပိုးပိုးက သူ့ကိုဆိုရင် အတော်ချွဲသည်။ အရင်ကတည်းကပင်။ဆုပြည့်ရှေ့လဲ ချွဲသည်။ကလေးတစ်ယောက်လိုပင်။ခုလဲ
အိပ်မပျော်လို့ဆိုပြီးသူ့ဆီဖုန်းဆက်တော့ လိုင်းမအားသေးတဲ့။ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့ ကြူနေတာလဲမေးပြီး စိတ်ကောက်တာမို့ ချော့ရသေးသည်။ဘယ်သူမှမယူနဲ့တဲ့။မိန်းကလေးတွေကမကောင်းဖူးလို့ပြာတော့ သူက ရီပြီး ကျုပ်ကျ မယူနဲ့ ညည်းကျတော့ ယူတော့မှာကို တရားသလားမေးတော့ တရားတယ်
နောက်ရက်သင်တန်းမှာ နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကို တိုးတိုးလေးစသည်။အေးမိစံကို
သေချာကြည့်ရှူစောင်မလိုက်ရဲ့လားဟု။သူလဲ ရီပဲနေလိုက်သည်။ညနေကျနှင်းမြတ်မွန်ကို အဆောင်လိုက်ပို့ပြီး သူပြန်ကာရေချိုး နှင်းမြတ်မွန်ကို သွားခေါ်ကာ သူ့တိုက်ခန်းမှာ လုပ်ကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်နဲ့က စိတ်တူကိုယ်တူရှိလှသည်။သူမကိုယ်တိုင်က ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်ရတာကိုသဘောကျတာမို့ သူနဲ့အကိုက်ပင်။ အဖုတ်က လုပ်လို့ကောင်းနေတာမို့ ဖင်ကိုမချဖြစ်သေး။ နောက်သုံးရက်လောက်နေတော့ နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ ဘဲနဲ့ အေးမိစံရဲ့ဘဲ တို့ရောက်လာကျသည်။သူလဲ ပိုးပိုးရည်းစားကို ဖုန်းဆက်တော့ သူပါရောက်လာသည်။ နောက်သုံးရင်နေရင် စင်ကာပူကို သုံးလလောက်သွားရမယ်လို့ပြောတော့ ပိုးပိုးကိုမစောင့်တော့ဘူးလားမေးရာ ပိုးပိုးလဲ သိတယ်လို့ပြောသည်။သွားနေကြမို့ အေးဆေးပင်။သူတို့ခြောက်ယောက် KTV မှာ ကဲ ကြသည်။ ပိုးပိုးကတော့ ကောက်လို့မဆုံးတော့။သူ့မရှိတဲ့ချိန်မှ လုပ်တယ်ဆိုပြီး။နောက်တပတ်ကျ ပိုးပိုးပြန်ရောက်လာသည်။ အေးမိစံက သူ့မြို့ပြန်သွားသလို နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ ပြန်သွားသည်။ပိုးပိုးက သူ့ကို မုန့်လိုက်ဝယ်ကျွေးခိုင်းတာနဲ့ ပိုးပိုးကိုခေါ်ကာ မုန့်သွားစားကြရင်း ဈေးပတ်ကြသည်။မိုးကလဲရွာနေသည်။ညနေစာကို အပြင်မှာပဲ နှစ်ယောက်သားစားကြသည်။ထမင်းစားနေတုန်းသူ့ရည်းစားဆီက ဖုန်းလာတာနဲ့ပြောနေသည်။ အင်္ကျီပန်းရောင်လက်ပြတ်လေးနဲ့ စကပ်တို ပန်းရောင်လေးဝတ်ကာ ခြေအိတ်ပန်းရောင်းလေးဝတ်ပြီး ရှူးဖိနပ်ပန်းရောင်လေးနဲ့ သူမ ဟန်ပန်လေးက ချစ်စရာ။ဆံပင်ကိုအဖြောင့်ဆွဲထားပြီး
ပခုံးကျော်ကျော်လေးကိုဝဲကာစကားပြောနေတဲ့ ပုံလေးက အသည်းယားစရာ။သူ့ရည်းစားဘယ်လောက်တောင် အသည်းယားမည်မသိ။သူကတော့ အတော့ကို အသည်းယားမိသည်။ဖုန်းပြောတာအကြာကြီး။ဖုန်းပြောပြီးတော့ သူကစားပြီးပြီ။သူ့ကိုလျှာလေးထုတ်ကာ ပြောင်ပြပြီးထမင်းကိုဆက်စားနေသည်။သူကလဲ ထမင်းကုန်အောင်စားလိူ့ပြောလိုက်သည်။စားသောက်ပြီးတော့ဘယ်သွားဦးမလဲမေးတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တယ်ပြောတော့ မိုးချုပ်နေပြီမနက်ဖြန်မှကြည့်လို့ပြောတော့ မျက်နှာက စူပုပ်သွားသည်။သူလဲ အသာရီလိုက်ပြီး နက်ဖြန်မှကြည့် လိုက်ပြမယ်ပြောတော့မှ ကြည်သွားသည်။ပိုးပိုးကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်သည်။
အိမ်နားရောက်ခါနီးတော့ ပိုးပိုးဖုန်းကမြည်လာတာမို့ ကိုင်လိုက်ရင်းစကားပြောနေသည်။ဖုန်းချလိုက်ပြီးသူ့ကို ”ကိုကြီး မပြည့်က သူ့အမေ ဆေးရုံတက်ရလို့တဲ့ ပြန်သွားတယ်။ပိုးတယောက်တည်းဖြစ်ပြီ” ”ဥမ္မာကရော”
”မမဥမ္မက မနက်က တောင်ကြီးသွားတယ်”
”ပိုးတယောက်တည်းကြောက်တယ်။အဖော်ခေါ်ရအောင်လဲ ခုမှ ဘယ်သူမှခေါ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။မနက်ဖြန်မှ ခေါ်ရမှာ။ ဒီည ကိုကြီး ပိုးကို စောင့်ပေးလေ။”
”ကိုကြီးကို ဘောင်းဘီတထည်ဝယ်ပေးမယ်။အမလေး ဈေးကြီးလိုက်တာ။ကိုယ့်ညီမလေးကြောက်လို့ အဖော်လုပ်ပေးမယ်မရှိဘူး။ဟင့်မပြောချင်ဘူး”စိတ်ကောက်သယောင်ပြုကာ သူ့ကိုမျက်စောင်း§ိုးလိုက်သည်။သူလဲ စိတ်ထဲမှာအတော့ကို အသည်းယားသွားကာ ဖက်နမ်းလိုက်ချင်မိသွားသည်။ပိုးပိုးတိုက်ခန်းရှေ့ရောက်တော့ ကားကိုနေရာချနှဲစ်ယောက်သားထီးတချောင်းနဲ့ အပြေးလေးလာလိုက်ရသည်။တိုက်ခန်းပေါ်တက်တော့ မီးကပျက်သွားသည်။တိုက်ခန်းရှေ့ရောက်တော့ သော့ဖွင့်ကာ အတွင်းထဲဝင်လိုက်ပြီး တံခါးပြန်ပိတ်လိုက်သည်။ ပိုးပိုးပါးစပ်က ပွစိပွစိနဲ့ မီးပျက်တာကိုပြောနေသည်။
”ကဲ ဒေါ်ပိုးပိုး ပွစိပွစိနဲ့ အဖွားကြီးဖြစ်နေပြီ။မညောင်းသေးဘူးလား”
”ဟုတ်တယ်လေ ကိုကြီးကလဲ။မီးက အားတိုင်းပျက်နေတာပဲ။သူများက ကြောက်တက်ပါတယ်ဆိုမှ။မိုးရွာလဲ ပျက် နေပူလဲပျက်နဲ့။မီးစက်ဝယ်ထားရမလိုဖြစ်နေပြီ။အဲလိုပျက်ရင်တော်တော်နဲ့မလာဘူး။မီတာခကျ မှန်မှန်လာပါ့”
”ကဲ ကိုယ်လဲ တက်နိုင်တာလဲ မဟုတ်။ပြောမနေနဲ့တော့။ကိုကြီးက ဘယ်မှာအိပ်ရမှာလဲ”
ပိုးပိုးလဲ ဖိနပ်ချွတ်ကာ lighting မီးကိုရှာပြီးဖွင့်လိုက်ကာ ဧည်ခန်းကိုတံပျက်စည်းလှည်းပြီး ပိုက်ဖျာတစ်ချပ်ခင်းလိုက်သည်။ပြီးတော့ အခန်းထဲဝင်ကာ မွေ့ရာ အပါးတစ်ထည်ယူကာ ခင်းလိုက်ပြီး ခေါင်းအုံး စောင်နဲ့ ခြင်ထောင်ကို ယူကာ ခြင်ထောင်ထောင်လိုက်သည်။မိုးကလဲ ပိုပိုသည်းလာသည်။အအေးက ပိုလာသည်။ သူလဲ ခြင်ထောင်ကို ဝိုင်းထောင်ရင်း အရင်တုန်းက သူမကိုစောင့်ပေးရတဲ့အချိန်ကနဲ့တူနေပြီလို့ပြောတော့ သူမကလဲ ဟုတ်ပါ့လို့ပြောရင်း စကားပြောနေကြသည်။
သူမက ဟင်္သာတ သူ။မိဘတွေက မြို့မျက်နှာဖုံးပြောရမည်။ပိုက်ဆံချမ်းသာသည်။မောင်နှစ်မနှစ်ယောက်ရှိပြီး သူမက အကြီး မောင်တယောက်ရှိသည်။သူ့ငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ ဆယ်တန်းနှစ်မှာကြိုက်သည်။သူ့ရည်းစားမိဘတွေ သူတို့မြို့မှာချမ်းသာသည့်စာရင်း ဝင်။မိဘချင်းကလဲကလဲ ရင်းနှီးသည်။ဆယ်တန်းအောင်တော့ အိမ်ကိုပြောပြတော့ ဘာမှမပြော။သူစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တက်လျှောက်တော့ သူ့ရည်းစားက နိုင်ငံခြားမှာပညာသွားသင်မလို့ ရန်ကုန်ကိုသင်တန်းလာတက်သည်။ရန်ကုန်မှာ အတက်မျိုးစုံးတက်လာသည်လားမသိ။ပြန်လာတော့ သူမရဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို ရယူသွားသည်။သူမလဲ မချစ်ဖူးတာမို့ အတွေ့အကြုံထူးကို ရသွားပြီး စွဲလန်းသွားရသည်။ နောက်ပိုင်းမှာလဲ အခွင့်သင့်ရင်သင့်သလို လုပ်ဖြစ်ကြသည်။ကျောင်းတက်တော့ မမဆုပြည့်တို့နဲ့ တိုက်ခန်းငှါးနေကြသည်။သူ့ဘဲကလဲ ရန်ကုန်မှာသင်တန်းတက်နေတာမို့ ပိုပြီလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့ရသည်။
သူ့ရည်းစားက အင်တာနက်ကနေ ဟိုကား ဒီကားတွေ ဒေါင်းပြီး သူ့ကိုပြကာ အဲ့ထဲကတိုင်းလုပ်ကြသည်။ နောက်ပိုင်းမှာ သူလဲ သူ့ရည်းစားအလိုကျလုပ်ပေးရင်းနဲ့ အဆင်ပြေသွားသည်။မမဆုပြည့်တို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မမအေးမိစံရည်းစား မမနှင်းမြတ်မွန်ရည်းစား မမဆုပြည့်ရည်းစားတွေနဲ့ ခင်ခဲ့ရသည်။ကျောင်းမှာတုန်းက ယောက်ကျားလေးတွေနဲ့ သိပ်မရင်းနှီးခဲ့။ရုပ်ချောတဲ့သူမို့ လိုက်တဲ့ ကြိုက်တဲ့သူပေါပေမယ့် သူ့ကောင်လေးက အမြဲသူ့အနားမှာရှိနေတာမို့ ဘာမှ မဖြစ်။ကျောင်းနဲ့ အိမ် စာလောက်သာ စိတ်ဝင်စားသူမို့ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းကလွဲ ပြီး ယောက်ကျားလေးသူငယ်ချင်းတွေက မေးထူးခေါ်ပြောလောက်ပင်။ တက္ကသိုလ်တက်တော့မှ အဆောင်နေ အမတွေရဲ့ရည်းစားတွေနဲ့ ခင်ခဲ့ရသလို ကျောင်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခင်ခဲ့ရသည်။လိုက်တဲ့သူပေါတာကြောင့် စိတ်ညစ်ရသလို သူ့ကိုခင်တဲ့ သူတွေတချို့က သူ့ကို ကြိုက်နေတာတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ရသည်။သူ့ဘဝမှာ တယောက်တည်းကိုပဲ ချစ်ကာ တယောက်တည်းပဲ ယူမှာလို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီး သူ့ရည်းစားနဲ့ကလဲ အိမ်ကသဘောတူထားတာမို့ ကျန်တဲ့ ယောက်ကျားလေးတွေကို အီဖို့တောင်စိတ်မကူး။အတူနေအမတွေရဲ့ရည်းစားတွေထဲက မမနှင်းမြတ်မွန်ရည်းစားက ဆေးသမား။သူ့ကို တွေ့တော့ စားတော့မတက် ဝါးတော့မတက်ကြည့်တာတွေ့တော့ သူတော်တော်ရွံမိသည်။ မမဆုပြည့်တို့ကိုပြောပြတော့ ရှောင်ဖို့ပြောသည်။မမအေးမိစံရည်းစားကလဲ သူ့ကိုတွေ့တိုင်းငမ်းတက်သည်။ မမဆုပြည့်ရည်းစားကျတော့ တည်သည်။တည်သလောက် သဘောလဲကောင်းကာ စကားပြောလဲကောင်းသည်။ သူတို့ကို ညီမတွေလိုပင် ဆက်ဆံပြောဆိုကာ ဆုံးမတက်စည်။သူ့ရည်းစားနဲ့တွေ့ရင်လဲ ညီတယောက်လိုပင်။ သူ့ရည်းစားက ကိုပိုင့်ကို အတော်ခင်သည်။သူ့ရည်းစားတင်မဟုတ်။မမအေးမိစံရည်းစာကပါခင်သည်။ မမနှင်းမြတ်မွန်ရည်းစားကျ ကိုပိုင်က သဘောမကျ။မမနှင်းမြတ်မ်ွန်ကိုဆုံးမတက်သည်။ရည်းစားနဲ့ ပြတ်သွားတော့ အသည်းကွဲတော့ ကိုပိုင်က ဦးဆောင်ပြီး သူမကို နှစ်သိမ့်သည်။သူ့ကိုလဲ ယောက်ကျားလေးတွေကို ပစ်ပစ်ခါခါမဆက်ဆံဖို့၊အလိုက်အထိုက်ပေါင်းဖို့၊ ကိုယ်မကြိုက်သော်လည်း ဟန်ဆောင်ကာပြုံးပြဖို့ စသဖြင့်ဆုံးမတက်သည်။သူ ကိုပိုင်လာရင်ပျော်သည်။အကိုလဲ မရှိတာကြောင့် အကိုတယောက်လိုပင်။ အားလုံးကလဲ ကလေးတယောက်လို ဂရုစိုက် အလိုလိုက်ကျတာမို့ ပျော်စရာ။မမဆုပြည့်ကို ကိုပိုင့်ကို တောင်းတော့ ရီလိုက်ကျတာ။သူမက အကိုလိုမွေးစားမလို့ပြောတော့ ရီပြီးစကျသည်။သူ့ရည်းစားနိုင်ငံခြားသွားခါနီးမှာ ဟိုတယ်ကို သွားကာ သူတို့နှစ်ယောက် ကဲကျသည်။နိုင်ငံခြားသွားတော့ အားလုံးလိုက်ပို့ကျသည်။ပြန်လာတော့ သူငိုမိတော့ အားလုံးက သူ့ကို ချော့ကာ ကိုပိုင်က သူပျော်အောင် လိုက်လုပ်ပေးသည်။ရည်းစားနဲ့ခွဲရပေမယ့် အားကိုးစရာ အကိုနဲ့အမတွေရှိတာကြောင့် သူခံသာသွားသည်။တရက် ကိုပိုင်ရန်ကုန်ရောက်တော့ မမဆုပြည့်က အိမ်ကို အရေးပေါ်ပြန်သွားရသလို ကျန်တဲ့သူတွေကလဲ မရှိကျ။သူတယောက်တည်းလဲမနေရဲပေ။သူတယောက်တည်းဆို အခန်းတံခါးကိုလာလာခေါက်တက်ကြတာမို့ကြောက်သည်။ကိုပိုင့်ကိုအကူအညီတောင်းတော့ ကိုပိုင်က လာပေးသည်။မိုးကလဲ ရွာ မီးကလဲ ပျက်နေတာမို့သူမတော်တော်ကြောက်မိသည်။ပြီးတော့ သွေးမတော်သားမစပ် ယောက်ကျားသားတစ်ဦးနဲ့ ရှိနေတာမို့ စိတ်က အတော်ခြောက်ခြားမိသည်။ကိုပိုင်က စည်းစောင့်သည်။ သူမကိုမကြောက်အောင် အမျိုးမျိုးလှည့်ပတ်ပြောပြီး ရီစရာ ဟာသတွေပြောသည်။ကိုပိုင်ရဲ့ စည်းစောင့်မှုကို သူအတော့်ကိုလေးစားအထင်ကြီးမိသည်။တညလုံးသူမကို မရိုးမသားမပြ။နောက်ဆုံးမျက်လုံနဲ့တောင် မပြစ်မှား။ ကိုပိုင်သာ တစ်ခုခု လုပ်ရင်လဲ သူမ ဘာမှမတက်နိုင်ပေ။မီးကပျက်နေ မိုးတွေကချိန်းနေတာမို့ အခန်းထဲမှာလဲ မနေရဲ။အပြင်မှာနေတော့လဲ တစိမ်းယောက်ကျားလေးနဲ့တအိမ်တည်း။ဒါပေမယ့်ကိုပိုင်က အခွင့်အရေးမယူခဲ။ သူမအထင်ကြီးသွားရသလို မမနှင်းမြတ်မွန်နဲ့ မ်အေးမိစံတို့ကိုပြောပြတော့ ကိုပိုင့်ကိုချီကျူးကြသည်။ မမနှင်းမြတ်မွန်က အဲ့နေရာမှာ တခြားယောက်ကျားလေးဆို မလွယ်ဘူးလို့ပြောသည်။သူလဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်မှ ကလေးသာသာအတွေးမျိုးနဲ့ ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် နောက်ဆက်တွဲကို မတွေးမိ။မမဆုပြည့်ကိုပြောပြတော့ မမဆုပြည့်က ကိုပိုင်ပြောလို့သိပြီးပြီလို့ပြောသည်။သူတို့အားလုံးကိုပိုင့်ကို တော်တော့်ကို ခင်သွားကြသည်။ သူကအဆိုးဆုံးပင်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေပိုလာတော့ ကိုပိုင့်ကို စိတ်ယိုင်မိတာတော့အမှန်ပင်။
သူ့ရည်းစားကလဲ အဝေးရောက်နေ ကိုပိုင်နဲ့ကလဲ အနီးကပ်နေရတာမို့ စိတ်ကစားမိသည်။သူတင်ပဲလား။မဟုတ်ပေ၊ မမအေးမိစံနဲ့ မမနှင်းမြတ်မွန်တို့လဲ အတူတူ။ကိုပိုင်က ကြည့်ကောင်းသလို မိန်းကလေးတွေကျလောက်အောင်လဲ ပြောတက်သလို သူ့ရဲ့ ဟန်ပန်ကိုက ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ကျောင်းသားဘဝက အတော်ပွေခဲ့တာလို့ပြောသည်။ ညဖက်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ် မင်းသားက ကိုပိုင်ဖြစ်နေသည်။မမဆုပြည့်ယောက်ကျား ယူသွားတော့ ကိုပိုင်အသည်းတွေကွဲကာ လေလွင့်ပြီးသူတိုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားသည်။သူတို့လဲ လိုက်ရှာပေမယ့်အပုန်းကောင်းတာမို့မတွေ့။သူမမဆုပြည့်ကို အရမ်းစိတ်ဆိုးမိသည်။သူ့ရည်းစားကိုပြောပြတော့ သူ့ရည်းစားကလဲ ကိုပိုင့်ကိုစိတ်ပူကာ မမဆုပြည့်ကို စိတ်ဆိုးသည်။နောက်ပိုင်းမမဆုပြည့်နဲ့ ပြန်တွေ့တော့ သူတို့ကိုတောင်းပန်ရှာသည်။ ကိုပိုင့်ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပေမယ့် သူ့မိဘစကားနားထောင်တာလဲပါ ကိုပိုင်နဲ့ယူရင် ဘဝအာမခံချက်မရှိမှာကြောက်လို့ဆိုတာလဲ ဝန်ခံသည်။ကိုပိုင့်ဖက်ကနေ တော်တော်ခံစားလိုက်ရသည်။ နောက်ပိုင်းလုံးဝ အဆက်အသွယ်မရတော့တာမို့ လက်လျှော့လိုက်ကြသည်။သူ့ရည်းစားကလဲ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်ရင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေသလို သူလဲ ကျောင်းပြီးတော့အလုပ်ဝင်လိုက်သည်။ နှစ်ယောက်သားလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေ့နေရတာမို့ ယူဖို့အတွက် စိတ်မကူးကြသေး။ပိုက်ဆံကိုစုကာ အခြေအနေတစ်ခုထိရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးမှယူကြဖို့ဆုံဖြတ်ထားကြသည်။သူ့ရည်းစားကလဲ နိုင်ငံခြားကို သွားလိုက်လာလိုက် သူကလဲ ပြည်တွင်းမှာ ဟိုသွားလိုက် ဒီသွားလိုက်နဲ့။သူ့ရည်းစားကလဲ ပညာတွေပိုစုံလာသည်။ သူကလဲ အတွေ့အကြုံတွေရလာတာမို့ နှစ်ယောက်သားအေးဆေးဖြစ်နေသည်။အလုပ်ထဲမှာလဲ အပြိုင်အဆိုင်မို့ သူ့ကိုယ်သူလဲ အမြဲလှနေအောင်လုပ်ရသည်။နဂိုကလဲ ချောတဲ့သူမို့ ပြင်လိုက်တော့ ပိုပြီးချောလာရသည်။ အားနေရင်းသင်တန်းတွေတက်ပါလားလို့ပြောတဲ့ ကိုပိုင့်ကျေးဇူးကြောင့် သင်တန်းတွေတက်တဲ့အကျိုးကြေးဇူးက အလုပ်ထဲရောက်တော့ သူများထက်ခေါင်းတလုံးပိုသာသည်။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ရာထူးကြီးကြီးရလာသည်။ ကုမ္ပဏီက ပေးတဲ့တိုက်ခန်းမှာ သူနဲ့ အဆင့်တူအမကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ အတူနေရသည်။သူမကလဲ နဂိုက အမငတ်တဲ့သူအကိုငတ်တဲ့သူမို့ ခင်အောင်နေ ချစ်အောင်နေတက်တာမို့ သူ့ကိုချစ်ကြသည်။တရက် မမနှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကို ဖုန်းဆက်ကာ ဝရမ်းပြေးကြီးကိုမိပြီလို့ပြောတော့ သူနားမလည်။နောက်မှ ကိုပိုင့်ကိုတွေ့ပြီ တို့တွေဆုံရအောင်ပြောတော့ အရမ်းဝမ်းသာသွားမိသလို သူ့ရည်းစားကို ပြောပြတော့ သု့ရည်းစားလဲ ဝမ်းသာနေသည်။တွေ့တဲ့နေ့က ကိုပိုင်က သူ့ကိုလာခေါ်ဖို့ဖုန်းဆက်လာတော့ သူစိတ်တောင်လှုပ်ရှားသွားရသည်။ ကိုပိုင့်ကိုတွေ့တော့ ဝမ်းသာပြီးပြေးဖက်ချင်သည်အထိဖြစ်သွားရသည်။ကိုပိုင်ကအရင်ကထက်ကို ကြည့်ကောင်းလာကာ ပိုပြီးခန့်လာသည်။မိန်းကလေးတွေအားကိုးချင်စရာဖြစ်လာသည်။သူလဲ ဝမ်းသာလွန်းလို့ ထုရိုက်ကာပါးစပ်ကလဲ ပြောလိုက်သည်။သူတို့တွေတွေ့တော့ ပိုပြီးပျော်ရသည်။ကိုပိုင်က အရင်လိုပင်သူတို့အပေါ်မှာမပြောင်းလဲ။သူ့ရဲ့ ရင်ခုန်သံက ပြန်ပြီးပြောင်းလဲ လာရပြန်တော့ သူ့ကိုယ်သုအံ့သြမိသည်။ဘယ်သု့အပေါ်မှ ဒီလိုမဖြစ်ဖူးခဲ့။သူတင်ပဲလားမဟုတ်။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်လဲတူတူပင်။ သူ့ရည်းစားက ကိုပိုင့်ကို သူလအမနဲ့ချိတ်ပေးမယ်ပြောတော့ သူစိတ်ဆိုးရသည်။ကိုပိုင့်ကို ဘယ်သူမှ မပေးချင်။ သဝန်တိုသည်။ကိုပိုင်က သူကျ ယူတော့မယ် မိန်းမမယူနဲ့တရာသလားမေးတော့ သူရီပဲနေမိသည်။ တကယ်တမ်းတော့ သူနဲ့ ကိုပိုင်က ဘာမှမဆိုင်။ဟိုတလောက မမနှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကို ပြောသည်။ကိုပိုင့်ကို ချစ်လားတဲ့။သူလဲ ဘာဖြေရမှန်းမသိ။မမနှင်းမြတ်မွန်က သူကတော့ ချစ်သည်။ဒါပေမယ့် နောက်ကျသွားပြီသူမမှာယူရမယ့်သူရှိတာမို့ တခဏလေးဖြစ်ဖြစ် ကိုပိုင့်ရင်ခွင်ထဲမှာနေချင်မိသည်လို့ရင်ဖွင့်သည်။ သူ့ကိုလဲ ဒီတိုင်းပဲနေမှာပါလို့လဲပြောသည်။သူမငြင်းမိ။ဟုတ်လဲဟုတ်နေတာကိုး။မမအေးမိစံလဲ ဒီတိုင်းပဲနေမှာလို့ ပြောတော့ သူလဲ ဟုတ်မယ်လို့ထောက်ခံမိသည်။တရက်က နှင်းမြတ်မွန်က သူလိုချင်တာကိုရပြီလို့ပြောတော့ သူတစုံတခုကို သိလိုက်သလိုပင်။သူမနာလိုဖြစ်သွားရသည်။သူမကိုလဲ ညီမလေး စိတ်ကို အရမ်းကြီးထိန်းမထားနဲ့။ နောင်ဆိုရင် အဲ့လိုအခွင့်အရေးရချင်မှ ရမယ်။ကိုယ်လိုချင်တာကို ခဏလေးဖြစ်ဖြစ် ရခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ နောက်ကျမှ နောက်တမရမိစေနဲ့လို့သူ့ကို ပြောတော့ သူလဲ တွေဝေသွားကာ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ။ခုလဲ
ဟိုးအရင်ကလို ကိုပိုင်နဲ့တအိမ်ထဲမှာ နှစ်ယောက်တည်း မီးကလဲ ပျက် မိုးကလဲ ရွာနေသည်။ သူစိတ်လှုပ်ရှားနေသလောက် ကိုပိုင်က တည်ငြိမ်နေသည်။သူမ ဘာလုပ်ရမည်မသိ။မီးကလဲ ခါတိုင်းအကြာကြီးပျက်နေတာကို ခုပြန်လာနေသည်။ကိုပိုင်ကမအိပ်သေး။ဖုန်းကြည့်နေသည်။သူမ အခန်းထဲမှာ ထိုင်လိုက်ထလိုက်နဲ့ ဂနာမငြိမ်။ဘာလုပ်ရမည်မသိ။မတွေးတက်။တဖက်ကလဲ လိုချင် တဖက်ကလဲ ရှက်ကြောက်နေမျသည်။တွေးရင်းနဲ့အတွေးလွန်နေစဉ်
စူးစူးဝါးဝါးအော်လိုက်တာမို့ သူလဲ အခန်းထဲသိုလ ပြေးဝင်လိုက်တော့ ပိုးပိုး ကုတင်ဘေးတွင် နားကို ပိတ်ကာ ငုတ်တုပ်လေးထိုင်ပြီးအော်နေတာတွေ့လိုက်တော့ သူရီချင်သွားသလို သနားလဲ သနားသွားသည်။ တကယ့်ကလေးလိုပင်။သူလဲ အနားကပ်သွားတော့ သူ့ကို မြင်ပြီး အားရှိသွားသလိုမျက်လုံးတွေက သူ့ကိုပြေးဖက်လိုက်သည်။
သူလဲ နှစ်သိမ့်လိုက်သည်။ပိုးပိုးက သူ့ကိုဖက်ထားရင်း သူ့ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းလေးစောင်းပြီးဝင်လာတာမို့ သူ့ရင်ခုန်နှုန်းမြန်သွားသည်။နှင်းမြတ်မွန်ပြောတာကိုပြန်ကြားယောင်ရင်း သူစိတ်လှုပ်ရှားသွားသည်။သူ ပိုးပိုးကို အဖြူထည်ခင်ချင်မိသည်။အရောင်မစိုးချင်။ကလေးတယောက်လို မို့ သူစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ပေမယ့် ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ မရတော့။တခုခုကို ငံ့လင့်နေတဲ့သူကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာဖြစ်သလို သူလဲ ပိုးပိုးကို ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။သူပိုးပိုးခေါင်းလေးကို အသာမော့လိုက်တော့ ပိုးပိုးရဲ့မျက်လုံးတွေက တခုခုကို တောင်းဆိုနေသလို။သူလဲ ငုံ့ကာနမ်းလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို အသာနမ်းလိုက်သည်။ပိုးပိုးကလဲ သူ့ကိုတင်းကျပ်စွာဖက်ရင်းပြန်နမ်းလိုက်သည်။လျှာခြင်းကလိလိုက်သည်။သူပိုးပိုးရဲ့
ပိုးပိုးခြေဖျားထောက်ကာသူ့ကိုငတ်မွတ်စွာနမ်းလိုက်ပြန်သည်။သူလဲ ပိုးပိုးကိုကုတင်ပေါ်သို့အသာလှဲချလိုက်ပြီး သူ့အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်သည်။ဘောင်းဘီကို ချွတ်လိုက်သည်။အတွင်းခံကိုပါ ချွတ်လိုက်ပြီး ပိုးပိုးကို အင်္ကျီချွတ်လိုက်သည်။ဘော်လီအနီရောင်ကိုပါချွတ်လိုက်ပြီး စကပ်ကိုပါချွတ်လိုက်သည်။ ဖြူဝင်တဲ့အသားအရည်နဲ့ပင်တီအနီလေးက သူ့စိတ်ကိုအရိုင်းဆန်စေသည်။သူလဲ ပင်တီကိုချွတ်လိုက်တေ့ အမွှေးပါးပါးလေးတွေနဲ့ တွေလိုက်ရသည်။သူလဲ နို့လေးတွေကိုအသာစို့လိုက်သည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စို့ချက်တွေက အရိုင်းဆန်လာသည်။ပိုးပိုးပါးစပ်မှ ညည်းသံတွေကသူ့ကိုအားပေးနေသလို။သူလဲ
ပိုးပိုးလက်ကိုယူကာလီးပေါ်တင်ပေးလိုက်ရာလီးကိုခပ်တင်းတင်းညှစ်ကိုင်ထားရင်းထက်အောက် ကစားနေသည်။ သူနို့တွေစို့နေရင်းနဲ့ အောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရွှေ့သွားငည်။ဗိုက်သားတွေကိုလျှာနဲ့လိုက်ပြီးလျက်လိုက်သည်။ ဗိုက်ပြီးချက် ချက်ပြီးတော့ ပေါက်ကိုအသာကားကာ ထိုင်လိုက်ပြီး အဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လျှာနဲ့လျက်လိုက်ရာ
”အာ ဟာ့ ကိုကြီးရာ ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ။ငရဲတွေကြီးကုန်တော့မှာပဲ။မလုပ်ပါနဲ့လို့ဆို။ဟာ့ ရှီး အို့ ”
သူအစေ့ကို လျှာနဲ့အပြားလိုက်ကော်လိုက်ရာကော့တက်သွားသည်။သူပိုးပိုးရဲ့ အဖုတ်ကို အားရပါးရ ဂျာလိုက်သည်။သန့်ရှင်းစွာဆေးကြောတက်သူမို့ထင်သည်။အနံ့ကင်းသည်။သူတော်ရုံဘယ်သူ့ကိုမှ မဂျာ။ ပိုးပိုးကိုကျတော့ စိတ်ပါလာတာမို့ လုပ်ပေးလိုက်သည်။ပိုးပိုးတယောက် လူးလိမ့်နေသည်။မွေ့ရာခင်းတွေကို ချေမွလိုက် ခေါင်းကိုကိုင်လိုက်နဲ့ ညည်းနေသည်။ပိုးပိုး အဖုတ်ထဲမှ အရည်တွေ ထွက်လာကာ ဖင်ကြီးက
မြောက်တက်နေသည်။ပြီးတော့မှ အောက်ကို ပြန်ကျသွားသည်။တချီပြီးသွားပြီ။သူထလိုက်တော့ ပိုးပိုး သူ့ကို ထဖက်ပြီး
”ကိုကြီးရာ် ဟင့် ဟင့် ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ။သူများမနေတက်တော့ဘူး။အရမ်းချစ်တယ်ကွာ။ကိုကြီးကို အရမ်းချစ်တယ်”
တတွက်တွက်ပြောရင်းသူ့ကိုအတင်းဖက်ထားသည်။သူလဲ ပြန်ဖက်ထားလိုက်သည်။ပိုးပိုးလဲ တစ်ရှူးယူကာ သူ့မျက်နှာကို တယုတယသုတ်ပေးလိုက်သည်။ပြီးတော့ သူ့ရှေ့မှာ ထိုင်ချလိုက်ကာ သူ့လီးကို ကိုင်ပြီး စုပ်ပေးလိုက်သည်။သူလဲကောင်းလာတာမို့ ဒီတိုင်းမပြီးချင်။ဒါကြောင့် ပိုးပိုးကို ဆွဲထူလိုက်ပြီး ကုတင်စွန်းပေါ် ဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်ကာ ကုန်းခိုင်းလိုက်တော့ ပိုးပိုးကလဲ ကုန်းပေးသည်။ဖြူဖွေးနေတဲ့တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုညှစ်ပြီး ဖြဲလိုက်ရာ စအိုရဲရဲလေးက ချစ်စရာ။သူလဲစအိုပေါ်တံတွေးထွေးချလိုက်ရင်း လက်မနဲ့ ဖိပွတ်လိုက်သည်။
”အဟင့် ကိုကြီးရယ် ဘာလုပ်နေတာလဲလို့။သူက သိပ်အဆန်းထွင်တာပဲကွာ။သူများမနေတက်တော့ဘူး” သူလဲ အဖုတ်ဝကိုအသာတေ့ကာ ဖိသွင်းလိုက်တော့
”အာ့ ရှီး ဖြည်းဖြည်းကိုကြီး နာတယ် အာ့ ကျွတ်ကျွတ်”
သူလဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းသွင်းလိုက်သည်။အရည်တွေနဲ့မို့ အဝင်ကချောပေမယ့် အတွင်းသားတွေက ကြပ်နေသည်။ သူအဆုံးထိထည့်လိုက်ပြီး ခဏရပ်ကာ ဖင်ဝကို ကလိနေရင်းလက်တစ်ဖက်က နို့တွေကိုညှစ်လိုက်သ်။ပိုးပိုးက သူ့ကိုလှည့်ကြည့်ရင်း သူ့ရင်ဘတ်ကို ပွတ်သပ်လိုက်သည်။သူလဲအသာကုန်းကာ ပိုးပိုးကိုနမ်းလိုက်တော့ ပိုးပိုးကလဲ ငတ်မွတ်စွာနမ်းလိုက်သည်။သူလဲလီးကိုအသာထုတ်လိုက်ရာ အဖုတ်အတွင်းသားတွေက လိပ်ကာပါလာသည်။ပိုးပိုး စုပိသပ်ရင်းညည်းရပြန်သည်။အသွင်းအထုတ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ရင်း ဖင်ဝကို
ကလိနေရင်းနဲ့အသာဖိထည့်လိုက်တော့ တင်းခနဲ့ဖြစ်သွားသည်။ပိုးပိုးက နာတယ်လို့ပြောပေမယ့်သူမရပ်။ ထည့်လိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်နေသည်။လီးကိုလဲ အသာညှောင့်နေရင်း အတော်ကြာလာတော့ နေသားတကျဖြစ်သွားသည်ထင်သည်။သူဆောင့်တာကို အတွင်းသားတွေက လက်ခံလာသည်။သူလဲ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။အခန်းထဲမှာ တဖွတ်ဖွတ်တဖတ်တဖတ်နဲ့ အသံ ညည်းသံတွေနဲ့ ဆူနေသည်။ သူလဲ ဆောင့်နေရင်းမှ ပိုးပိုးကို ဆောင့်စေချင်လားမေးရာ ခေါင်းငြိမ့်တာမို့ သူလဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုက်သည်။ ပိုးပိုးလဲ ကောင်းတာမို့ ဆောင့်ခိုင်းလိုက်သည်။သူလဲ ဆောင့်ချက်ပေါင်းများလာသည်နှင့်အမျှ ပြီးချင်လာပြီ။ ပိုးပိုးရဲ့အတွင်းသားတွေကလဲ ညှစ်ညှစ်လာသည်။သူလဲခါးသေးသေးလေးကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ညှပ်ကိုင်ရင်း မညှာတော့ပဲ အားကုန်ဆက်တိုက်ဆောင့်ချလိုက်သည်။ပိုးပိုးပါးစပ်မှ အသံတမျိုးလေးနဲ့ အော်လိုက်ရင်း ရှေ့ကိုငိုက်ကျသွားကာ သူ့လီးကိုတင်းခနဲ့ တင်းခနဲ့ ညှစ်လိုက်သည်။သူလဲ မထိန်းနိုင်တော့ပေ။သုတ်ရည်ကို ပန်းထည့်လိုက်ကာ ပြီးသွားရသည်။လေးငါးချက်ဆောင့်လိုက်ပြီး နောက်ဆုံးတချက်က လီးကိုတဆုံးထုတ်လိုက်ကာ တဆုံးထည့်လိုက်ပြီး တင်ပါးနဲ့ ဆီးခုံကိုကပ်ထားလိုက်ရင်းပိုးပိုးအပေါ်မှောက်ချကာ အနားယူလိုက်သည်။ပိုးပိုးလဲ တစောင်းလေးလှဲချလိုက်တော့ သူလဲ တစောင်းလေးလီးတပ်လျက်သားအမောဖြေနေကြသည်။ပိုးပိုးလဲ လက်နဲ့နောက်ပြန် သူ့ကိုဖက်လိုက်ရင်းခေါင်းကို လှည့်ကာ သူ့ကိုနမ်းလိုက်သည်။ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်မှအသာထကာ တစ်ရှူးယူပြီး သုတ်လိုက်ပြီး သူ့လီးကိုလဲ တယုတယသုတ်ပေးလိုပ်သည်။ ထမိန်တစ်ထည်ယူကာ အခန်းပြင်သို့ ထွက်သွားသည်။တော်တော်ကြာမှ ပြန်ဝင်လာပြီး
”လူဆိုးကြီး ခုထိအဝတ်မဝတ်ရသေးဘူး ရှက်စရာကြီးကွာ”ပြောပြီး ဘီရိုထဲမှ တဘတ်အကြီးတစ်ထည်ယုကာ သူ့ကိုပေးသည်။သူလဲ တဘတ်ကိုပတ်ကာ အိမ်သာဖက်သွားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကာ အပေါ့သွားလိုက်ပြီး အခန်းထဲ ပြန်ဝင်လာတော့ ပိုးပိုးက ညအိပ် ဂါဝန် ပန်ရောင်လေးဝတ်ပြီးသွားပြီ။သူဝင်လာတော့
”ကိုကြီးမီးမှိန်လိုက်ပါလား”ပြောတော့ သူလဲ မီးကိုမှိန်လိုက်သည်။ပိုးပိုးက
သူ့အနားကိုလာကာသူ့နောက်ကျောကိုဖက်ထားလိုက်သည်။သူလဲ ပိုးပိုးလက်တွေကိုကိုင်ထားလိုက်သည်။ အတန်ကြာမှ ပြန်ခွာကာသူလှည့်လာတော့ သူ့ကို ချီခိုင်းတာမို့ ပိုးပိုးကိုချီကာ ကုတင်ပေါ်သို့ အသာတင်ပေးလိုက်သည်။သူ စွပ်ကျယ်ကိုပြန်ဝတ်ကာ အပြင်ထွက်မယ်လုပ်တော့ ပိုးပိုးက သူ့အနားမှာအိပ်လို့ပြောတာနဲ့ သူလဲ ပိုးပိုးအနားမှာ ဝင်လှဲလိုက်သသည်။ပိုးပိုးက သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်ခေါင်းအုံးကာ သ့းကိုဖက်ထားသည်။ပြီးတော့
”ကိုကြီး ဒီလိုအချိန်ခဏလေးမှာလေ ချစ်သူတယောက်လို ဇနိးတယောက်လို နေချင်တယ်။ပိုးကို အထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့နော်။ပိုး ကိုကြီးကိုအရမ်းချစ်တယ်။ကိုကြီးချစ် ချစ် မချစ်ချစ် ဒီလိုအတူရှိနေချိန်လေးမှာ နေခွင့်ပေးပါ”
သူလဲ သနားသွားရသည်။သူပိုးပိုးကို မချစ်ချင်။သူတို့နှစ်ယောက်က ပေါင်းစပ်လို့မှ မရတာ။ဒါကြောင့်မျု့ ပိုးပိုးပြောသလို အတူရှိနေစဉ်အချိန်လေး အကောင်းဆုံးနေကြတာပေါ့လို့ပြောရင်း ပိုးပိုကိုဖက်လိုက်သည်။ ပိုးပိုးကတော့ သူ့ကို စကားတွေဆက်တိုက်ပြောနေသည်။သူ့ကိုအရမ်းချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောသည်။ နှစ်ယောက်သားစကားပြောကြရင်း ဘယ်ချိန်အိပ်ပျော်သွားသည်မသိတော့။သူတရေးနိုးတော့ ပိုးပိုးက သူ့လက်ပေါ်မှာ။သူလဲ အသာမကာခေါင်းအုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်ရင်း စောင်ကို အသာခြုံပေးလိုက်ကာ သေးထပေါက်လိုက်သည်။ပြန်ဝင်လာတော့ ပိုးပိုးက ပုံစံမပျက်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မောကျနေသည်။သူပိုးပိုးကို ကြည့်ရင်း ချစ်မိမှာစိုးမိသည်။သူနာကျင်ရမည်။သူပိုးပိုးကို အသာခပ်ဖွဖွနမ်းလိုက်ရင်း ဘေးနားမှာပြန်လှဲကာ အိပ်လိုက်သည်။
တစုံတယောက်ရဲ့ ပရောဂကြောင့် သူနိုးလာသည်။ကြည့်လိုက်တော့ ပိုးပိုး။သူ့ကို မေးထေါက်ကာကြည့်နေပြီး မျက်နှာကိုလေနဲ့မှုတ်နေသည်။သူနိုးလာတော့ တခိခိနဲ့ရီနေသည်။သူလဲအသည်းယားလာတာနဲ့ ပိုးပိုးကိုလှမ်းဖက်လိုက်ပြီး နမ်းလိုက်သည်။
”ဟိတ်ညစ်ပတ်ကြီးကွာ။မျက်နှာလဲ မသစ်ရသေးပဲနဲ့ သူများကိုနမ်းနေတယ်”
သူလဲ ပိုးပိုးကိုတအားဖက်ပြီးနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းလိုက်ရင်း နို့အုံလုံးလုံးလေးကို ကိုင်ကာ ချေပေးလိုက်သည်။ပိုးပိုးလဲ အသက်ရှူသံပြင်းကာလာပြီး သူပတ်ထားတဲ့တပတ်ကို ချွတ်ကာ သူ့လီးကိုကိုင်ကာထုပေးလိုက်သည်။သူလဲ ညအိပ်ဂါဂန်လေးကို ချွတ်လိုက်ကာ နို့လေးတွေကိုနမ်းလိုက်ရင်း ပေါင်ကြားထဲ လက်ထည့်ကာ အစေ့လေးကို ကလိလိုက်သည်။ပိုးပိုးမှာ အင့်ခနဲ အင့်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီး ဖင်ကြီးက ကော့ကော့တက်လာသည်။သူလဲ အစေ့ကိုကလိနေရင်းနဲ့ အဖုတ်ထဲသို့ လက်ထည့်လိုက်ကာ အသွင်းအထုတ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပေးလိုက်သည်။ အရည်တွေက ရွှဲကာလာသည်မို့ သူလဲ ပိုးပိုး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို မကာ သူ့ပုခုံးပေါ်တင်လိုက်ပြီး အဖုတ်ဝကို လီးတေ့လိုက်ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်လိုက်သည်။
”အဟင့် ကိုကြီးဖြည်းဖြည်း နာတယ်ကွာ။ကိုကြီးဟာကြီးက အရမ်းကြီးတာပဲ အား ကျွတ်ကျွတ်”
သူလဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းညှောင့်ပေးလိုက်သည်။အရည်တွေကလဲ ထွက်နေတာမို့ အဝင်အထွက်ကချောလာသည်။ သူလဲ ပိုးပိုးခံနိုင်လာသည်မို့ မညှာတော့ပဲ ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်သည်။ဆီးခုံချင်းတဖတ်ဖတ်ရိုက်သံ ပိုးပိုးရဲ့ ညည်းညူသံတွေက အခန်းထဲမှာ လွင့်ပျံနေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နှစ်ယောက်သားပန်းတိုင်ကိုရောက်လာကြသည်။ အပေးအယူမျှစွာ အပေါ်ကဆောင့်သမျှ အောက်ကနေ အလိုက်သင့် ကော့ကော့ပေးရင်း ပြီးသွားသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် အနားယူနေရင်း ကျီဆယ်နေကြသည်။တော်တော်လေးကြာတော့ ပိုးပိုးက ရေသွားချိုးဦးမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတော့ သူလဲလိုက်သွားကာရေအတူချိုးကြသည်။
ဒီချိန်လေးကတော သူတို့နှစ်ယောက်အတွက် ကြည်နူးစရာအကောင်းဆုံးကာလပင်။ပိုးပိုးက သူ့ကို ဒီအချိန်လေးတွေကို တသက်လုံးသိမ်းထားချင်သည်လိုပြောသည်။ ပိုးပိုးက သူ့ကို မချစ်နဲ့လို့ပြောသည်။ချစ်ရင် သူပဲခံစားရမှာစိုးတယ်တဲ့။သူမကတော့ သူ့ကို ချစ်တယ်။ဒါပေမယ့် ပေါင်းစပ်ဖို့ကံမပါလာတာမို့ ရတဲ့အချိန်လေးမှာ ကြည်နူးစွာနေကြမယ်လို့ပြောတော့ သူလဲ လက်သင့်ခံသည်။သူလဲ ပိုးပိုးကို မချစ်နိုင်ပေ။သူ ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးမခံစားချင်တော့။သူတို့ရေချိုးပြီး အပြင်ကို ထွက်ကာ လည်ကြသည်။နေ့လည်ကျ သူ့တိုက်ခန်းကို သွားကာ လုပ်ကြသည်။ပိုးပိုးက သူ့ကို ဘာမဆိုပေးဆပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားသည်လားမသိ။ သူ့အလိုကို အမြဲ လိုက်သည်။ညမိုးချုပ်မှ သူ့တိုက်ခန်းက ပြန်ပို့ရသည်။ပိုးပိုးရဲ့အခန်းဖော်ကလဲ ပြန်ရောက်နေပြီမို့ သူလဲ ပြန်လာရသည်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ပိုးပိုးက သူ့ဆီဖုန်းဆက်ကာ အရမ်းလွမ်းလို့ဟု ချွဲသည်။သူလဲ သိပ်မချွဲနဲ့ ဒီမှအရည်ပျော်နေပြီ။ချစ်မိသွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲမေးတော့ ယူလိုက်မှာပေါ့ဟုပြောသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုးပိုးက သူတောင်းဆိုရင် တကယ် ယူမည့်ပုံပင်။ဒါတော့မဖြစ်သင့်။ခုလိုအနေအထားတောင်မှ တော်တော်လွန်လှပြီ။ အပျိုလူပျိုဆိုပေမယ့် ရည်ရွယ်တဲ့ချစ်သူရှိနေတာမို့ လူမှုရေးစည်းကိုဖောက်ဖျက်ရာကျနေပြီ။
သူလဲ နှင်းမြတ်မွန် အေးမိစံနဲ့ ပိုးပိုးတို့သုံးယောက်လုံးကို အလှည့်ကျ လုပ်ဖြစ်နေသည်။တနင်္လာ အဂါင်္ကနှင်းမြတ်မွန်နဲ့။ဗုဒ္ဓဟူး ကြာသာပတေးက အေးမိစံ၊ သောကြာစနေကျ ပိုးပိုးနဲ့။သုံးယောက်လုံးက သူ့ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျေနပ်မှုပေးစွမ်းသည်။နှင်းမြတ်မွန်နဲ့ အေးမိစံကျ
ခပ်ကြမ်ကြမ်းလုပ်ရတာကိုသဘောကျတာမို့ သူတို့နဲ့ဆိုရင် ခပ်ကြမ်းကြမ်းလုပ်ဖြစ်သည်။ပိုးပိုးကျ ချွဲတက်လွန်းတာကြောင့် တခါတလေဆို စိတ်မထိန်းနိုင်လောက်အောင်ကို ကြမ်းမိသည်။သုံးယောက်လုံးကိုတော့ ခုထိ နောက်ပေါက်ကို မဖွင့်ရသေးပေ။လက်နဲ့ကတော့ လုပ်တိုင်းကလိဖြစ်နေတာမို့ လုပ်ရင် ရသည့်အနေအထားပင်။ဒီလိုနဲ့ သင်တန်းကာလခြောက်လပြည့်တော့ သူတို့ သင်တန်းဆင်းပွဲ လုပ်သည်။ သူကတော့ မပြန်သေး။သင်တန်းနောက်တခုဆက်တက်ရင်း ဖြေရမည့် စာမေးပွဲကို စောင့်ရမည်။ နှင်းမြတ်မွန်ကတော့ နောက်သုံးရက်လောက်နေရင်ပြန်မယ်လို့သူ့ကိုပြောသည်။အားလုံးကိုတော့ အိမ်ကိုပြန်ဦးမယ်လို့ပြောထားပေမယ့် သူနဲ့ အတူနေမှာပင်။နှုတ်ဆက်ပွဲကို ကျင်းပသည့်ညက အားလုံးအတော်ကဲကြသည်။နောက်ရက်မနက်ကျ သူနှင်းမြတ်မွန်ကို လိုက်ပို့ဖို့အဆောင်ကို သွားခေါ်လိုက်ပြီး သူ့တိုက်ခန်းသို့ခေါ်လာကာ သုံးရက်လုံးလုံးလုပ်ကြသည်။စားလိုက် လုပ်လိုက်နဲ့။နည်းပေါင်းစုံ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လုပ်ကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်ပြန်သွားတော့ သူကားဂိတ်သို့လိုက်ပို့လိုက်သည်။နောက်နှစ်ရက်လောက်သူ အားပြန်မွေးရသည်။
နောက်ပိုင်းရက်များတွင် အေးမိစံရဲ့ ရည်းစားကလဲ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရန်ကုန်သို့ရောက်လာသလို ပိုးပိုးရဲ့ ရည်းစားကလဲ နိုင်ငံခြားမှ ပြန်ရောက်လာတာကြောင့် သူဘယ်သူနဲ့မှမတွေ့ရတော့။မြင်ငတ်ကြီးဖြစ်နေသည်။ ဒါကြောင့် သူလဲ သင်တန်းတက်လိုက် လေ့လာစရာတွေကို လေ့လာလိုက် အားရင်အိမ်ကိုပြန်လိုက်လုပ်နေရသည်။ ညဖက်တွေမှာတော့ လိုင်းပေါ်မှာ ဆုံဖြစ်ကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ အလုပ်တွေများနေတာကြောင့် မအားပေ။ ဒီလိုနဲ့တစ်လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာ အေးမိစံက သူ့ဆီဖုန်းဆက်သည်။သောကြာနေ့အားရင်တွေ့ချင်သည်ဟု။ သူလဲ စိတ်က တင်းနေတာကြာပြီမို့ ပထမဆုံးတွေ့တဲ့သူကတော့ နာပြီဆိုပြီးကြုံးဝါးထားတာ။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဂေါ်လီကိုလဲ ပြန်ထည့်ထားသည့်အချိန်နဲ့မှ အေးမိစံက ဖုန်းဆက်သည်။ဒါကြောင့် သူလဲ တွေ့ကြမယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်သည်။သောကြာနေ့ကျ သူလဲ တိုက်ခန်းကိုပြန်ကာ ရေချိုးကာ စောင့်နေလိုက်သည်။ခုနှစ်နာရီလောက်ကျ အေးမိစံက သူ့ကို လာကြိုဖို့ပြောတာနဲ့ သူလဲ သွားကြိုလိုက်သည်။
ဖက်ဖူးရောင်အောက်ခံမှာ အစိမ်းရောင်အလုံးလေးတွေပါတဲ့ အပျော့သား ဝမ်းဆက်ကို ဝတ်ထားပြီး ဆံပင်ကို
ဖျားလားချထားတဲ့ အေးမိစံရဲ့ပုံစံက ရွှင်လန်းတက်ကြွနေသည်။သူလဲ အေးမိစံကိုခေါ်လိုက်ပြီး ဘာစားပြီးပြီလဲ မေးတော့ မစားရသေးဘူးဆိုတာနဲ့ ညနေစာစားရန်သွားလိုက်ကြသည်။စားနေကြရင်းနဲ့ အေးမိစံဘဲက ဘယ်ချိန်ပြန်သွားတာလဲ မေးတော့ ပြန်တာသုံးရက်လောက်ရှိပြီလို့ပြောသည်။သူတို့စားကြသောက်ကြရင်းနဲ့ စကားပြောနေကြသည်။စားသောက်ပြီးတာနဲ့ ပိုက်ဆံရှင်းကာ ထွက်လာကြသည်။ကားပေါ်ရောက်တော့ သူက
”ကို တစ်လ လုံးညည်းကို သတိရနေတာ။ညည်းကတော့ ဘဲနဲ့ဆိုတော့ သတိရမယ်မထင်ဘူး” ”ညီမလဲ ကိုပိုင့်ကို သတိရပါတယ်။မလွယ်လို့သာမတွေ့ရတာပါ”
”တစ်လလုံးတင်းနေတာ ကို အားရပါးရ ဖွင့်ချလိုက်မယ် ဟင်းဟင်း”
”အမလေး ကြောက်စရာကြီး။ရတယ်လေ စိန်လိုက်။ပြီးမှ အရှုံးပေးပါပြီမပြောနဲ့”
”ဒီတစခါတော့ ကို အေးမိစံရဲ့ နောက်ပေါက်ကို လုပ်ချင်တယ်။မငြင်းနဲ့တော့။တစ်လလုံးပစ်ထားတဲ့အတွက် အပြစ်ပေးတာ”
”ဟင်း သူက လူတွေ့ရင် ဒါပဲ။ဘယ်သူမှ ထိတောင်မထိဘူးသေးတဲ့ဟာကို သူက။ဒါပဲနော်။အရမ်းကြီးမလုပ်နဲ့။ တခုခုဖြစ်သွားရင် ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းနဲ့”
သူတို့ဆေးဆိုင် တခုကို ဝင်ကာအားဆေးတွေနဲ့ လိုအပ်တဲ့ ဟာတွေပိုဝယ်လိုက်သည်။တိုက်ခန်းရောက်တော့ သူအေးမိစံကို ဖက်ကာ နမ်းလိုက်သည်။အေးမိစံကလဲ အားကျမခံ ပြန်နမ်းသည်။သူလဲ အေးမိစံဖင်လုံးလုံးလေးကိုပွတ်သပ်ညှစ်လိုက်သည်။ပြီးတော့ သူ့အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်ပြီး အေးမိစံကို ဒူးထောက်ပြီး သူ့လီးကိုစုပ်ခိုင်းလိုက်သည်။ အေးမိစံက ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီး သူ့ပုဆိုးကိုချွတ်ကာ အတွင်းခံကိုပါချွတ်လိုက်ရာ မြွေဟောက်တကောင်းအလား သူ့လီးကြီးကငေါက်ကနဲပေါ်လာသည်။
”ဟင် ကိုပိုင့်ဟာကြီးက အဖုအဖုတွေနဲ့ ဘာဖြစ်တာလဲ”
”အဲ့ဒါဂေါ်လီတွေ အေးမိစံရဲ့ ဒီဂေါ်လီနဲ့ အေးမိစံရဲ့ ဘယ်သူမှမလုပ်ဖူးသေးတဲ့ဖင်ကို လုပ်မလို့” ”ကြောက်စရာကြီး ကိုပိုင်ရယ်။နာမှာကြောက်တယ်။”
”နောက်မှ ဂေါ်လီအရသာတွေ့ပြီး ကြိုက်သွားမယ်။ကဲ စုပ်ကွာ”
အေးမိစံလဲ သူ့လီးကိုကိုင်ကာ ပါးစပ်ထဲအသာထည့်ကာ စုပ်ပေးလိုက်သည်။ပုလွေကျွမ်းကျင်နေတာမို့ သူလဲ အေးမိစံခေါင်းကို ကိုင်ကာ ပါးစပ်ကို လိုးနေလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ သူတက်တဲ့ပညာနဲ့ သူ့ကို ပညာပြနေသည်။ သူလဲ ကောင်းလာတာမို့ အေးမိစံပါးစပ်ထဲမှလီးကိုထုတ်လိုက်ပြီး အေးမိစံကိုကုတင်ပေါ်သို့တင်လိုက်ပြီး အင်္ကျီနဲ့ ထမိန်စကပ်ကိုချွတ်လိုက်တော့ ဘရာ အဖြူရောင်လေးနဲ့ ပင်တီ ခရမ်းရောင်လေးသာကျန်တော့သည်။ပင်တီဂွဆုံက စိုပြီးကွက်နေတာမို့
သူလဲ ဘရာကိုချွတ်လိုက်ကာ နို့တွေကိုချေလိုက်သည်။နို့သီးခေါင်းတွေကို ကလိရင်းနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်လိုက်သည်။ အေးမိစံလဲ အသက်ရှူသံတွေမြန်လာပြီး သူ့ကိုဖက်ထားသည်။သူလဲအေးမိစံကို ပက်လက်လှန်ချလိုက်ပြီးနို့တွေကို စို့လိုက်သည်။လက်တွေက တင်ပါးတွေကို ဖြစ်ညှစ်နေရင်းပင်တီကိုချွတ်လိုက်သည်။အေးမိစံလဲ ပင်တီကို ကူချွတ်ပေးလိုက်သည်။သူ အေးမိစံပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားလိုက်ပြီး အစေ့ကို ကလိပေးလိုက်ရာ ပါးစပ်မှ ရှီးခနဲ အသံထွက်လာပြီး သူ့ခေါင်းကို လာဖက်ပြီးဆံပင်တွေကို ပွတ်နေသည်။သူလဲ အစေ့ကို ခပ်သွက်သွက်ချေလိုက်ရာ
ဖင်က ကြွကြွတက်လာသည်။နို့တွေကို အားရအောင်စို့ပြီး နောက် အေးမိစံပေါင်ကြားထဲ ထိုင်ကာ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အေးမိစံလက်တွေနဲ့ချိတ်လိုက်ပြီး လက်တဖက်က အစေ့ကို ကလိရင်း ကျန်လက်တစ်ဖက်က အဖုတ်ထဲကို ထည့်လိုက်သည်။လက်တချောင်းကနေ နှစ်ချောင်းထည့်လိုက်သည်။ခပ်သွက်သွက်သွင်းထုတ်လုပ်လိုက်ရာ အရည်တွေက ရွှဲလာသည်။လက်နှစ်ချောင်းကနေသုံးချောင်း ထည့်လိုက်ပြန်သည်။အဖုတ်က အရည်တွေရွှဲနေတာမို့ ဝင်သွားသည်။
”အ့ ကျွတ်ကျွတ် နာတယ်ကိုပိုင် ဖြည်းဖြည်း”
သူလဲ ဖြည်းဖြည်းလေးသွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်ရင်းအစေ့ကို ချေပေးလိုက်သည်။အေးမိစံမှာ တကိုယ်လုံး ကော့ပျန်နေသည်။ပါးစပ်မှလဲ အသံမျိုးစုံညည်းနေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဖင်က ကော့တက်လာပြီး ပြန်မကျတော့ပေ။လက်တွေက နို့တွေကို ဆုပ်နယ်ရင်း လက်သွင်းထုတ်လုပ်တာကို ဖင်က လိုက်ကော့ပေးနေသည်။ပါးစပ်မှ အသံတမျိုးလေး ထွက်လာပြီးဖင်ကြီးကလေထဲမှာကော့ပေးထားရင်းနဲ့ ကိုယ်လုံက ဆက်ခနဲတုန်တုနိသွားကာ မွေ့ရာပေါ်သို့ ပြုတ်ကျသွားသည်။သူမတစ်ချီပြီးသွားပြီ။အဖုတ်ထဲမှ လက်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်တော့ အရည်တွေက ထွက်လာကာ အဖုတ်ဝမှတဆင့် ဖင်ဝပေါ်သို့စီးကျသွားသည်။သူလဲ ဖင်ဝကို သုတ်လိမ်းလိုက်ကာ ဖင်ဝကိုဖိကာ လက်ညှိုးကိုထည့်လိုက်သည်။လက်ညှိုးက ချောခနဲဝင်သွားသည်။ သူလဲ လက်ညှိုးကို သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်ပေးလိုက်သည်။ခဏကြာတော့ အေးမိစံကို ကုန်းခိုင်းလိုက်ရာ အေးမိစံလဲ ကုတင်စွန်းမှာခြေထောက်တင်ပြီးကုန်းပေးလိုက်သည်။သူလဲ လုံးလုံးကျစ်ကျစ်တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ချေလိုက်ရင်း တဖျန်းဖျန်းနဲ့ ရိုက်လိုက်သည်။
”ခု ဖင်ခံမှာလားဟင် ဖျန်း”
”ခံမယ်။ဖင်လဲခံမယ်။အဖုတ်ကိုလဲ လုပ်ပေးပ ကိုပိုင်ရယ် အဟင့်ဟင့်”
သူဖင်ကိုရိုက်နေရင်းနဲ့ အေးမိစံကိုစိတ်ကြွလာအောင်ဆွပေးရင်း တစ်တစ်ခွခွပြောနေသည်။နှင်းမြတ်မွန်နဲ့ အေးမိစံတို့က ဒီလိုတစ်တစ်ခွခွပြောရတာကို သဘောကျသည်။သူလဲ ဖက်တွေကိုရိုက်ရင်းနဲ့ အေးမိစံကိုဖင်ဖြဲခိုင်းလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ လက်နှစ်ဖက်နဲ့နောက်ပြန်ဖြဲလိုက်ရာ စအိုဝက ရဲ ခနဲပေါ်လာသည်။ သူလဲ စအိုဝကိုတံတွေးထွေးချလိုက်ပြီး လက်နှစ်ချောင်းပူးကာ ဖင်ဝကိုထောက်လိုက်ပြီး ဖိထည့်လိုက်သည်။ ဝင်ထွက်နေကျမို့ ဖင်ဝကိုဖွင့်ပေးထားသည်။လက်နှစ်ချောင်းပူးကာ
အသွင်းအထုတ်ကိုခပ်သွက်သွက်လုပ်ပေးလိုက်သည်။လက်နှစ်ချောင်းပူးကနေ သုံးချောင်းစုကာ ထည့်လိုက်တော့ နာတယ်ဆိုတာနဲ့ သူလဲ ဝယ်လာတဲ့ ဂျယ်ကိုထုတ်ကာဖင်ဝကိုရွှဲနေအောင်သုတ်လိုက်ပြီးကွန်ဒုံးတစ်ခုဖောက်ကာ လက်သုံးချောင်းစုကာစွပ်လိုက်ပြီး ဂျယ်လ်သုတ်ကာဖိထည့်လိုက်တော့ အရည်တွေနဲ့မို့
တဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်သွားသည်။အေးမိစံလဲ ဖင်ဝက နာကျင်နေရာမှတဖြည်းဖြည်းကောင်းလာသည်။သူကလဲ ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ပေးနေရာမှ ကောင်းလာသည်ကိုသိတာမို့ ခပ်သွက်သွက်လုပ်ပေးလိုက်သည်။ ဖင်ဝကကောင်းလာပြီးအဖုတ်ကလဲ အရည်တွေထွက်လာရပြန်သည်။
”အရှေ့ကို အရင်လုပ်ပေးကွာ ပြီးမှ ကိုပိုင်သဘောနောက်ကို ကြိုက်သလိုလုပ်နော်”
သူလဲ ခဏဆက်ပြီးကလိနေလိုက်သေးသည်။အေးမိစံကို ထခိုင်းလိုက်ပြီး သူ့လီးပေါ်ကို ထိုင်ကာအပေါ်ကနေဆောင့်ခိုင်းလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ အပေါ်ကနေ သူလီးကိုကိုင်ကာ အဖုတ်ဝတွင်တေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချလိုက်သည်။ဂေါ်လီတွေက အဖုတ်အတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်သွားတာမို့ နာကျင်ခံကောင်းကြီး။တဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင့်ကာ အဆုံးထိ လီးကဝင်သွားသည်။သူမအပေါ်ကနေ အသာလေးညှောင့်နေတော့သူလဲ အေးမိစံနို့တွေကိုစို့ပေးလိုက်သည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စမ်းကာ ကြွလိုက်ထိုင်လိုက်လုပ်နေသည်။တဖြည်းဖြည်းကောင်းလာတာမို့ အားနဲ့အင်နဲ့ဆောင့်နေသည်။သူလဲ အောက်ကနေကော့ကာပေးပြီး နို့တွေကိုစို့ပေးနေသည်။အေးမိစံရဲ့ စုပ်သပ်သံ အသားချင်းရိုက်သံ အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းအသံ ညည်းသံတွေက စည်းချက်နဲ့အညီထွက်ပေါ်နေသည်။အေးမိစံအခြေအနေကို ကြည့်ပြီးသူလဲ အေးမိစံဆောင့်နေရာမှ အသာရပ်ခိုင်းလိုက်တော့ မကျေမနပ်ဖြစ်သွားသည်။သူလဲ အေးမိစံကို ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီးနောက်ကနေ မီးကုန်ယမ်းကုန်ဆောင့်တော့သည်။သူ့ရဲ့ဂေါ်လီပါတဲ့လီးကြောင့်ရော ဆွပေးမှုတွေကြောင့်ရော အားပါတဲ့ ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် အေးမိစံ အဆက်မပြတ်ကို ညည်းနေရင်း ပြီးသွားသည်။ခပ်ကြမ်းကြမ်းပြီးသွားသည်ထင်သည်။အသံမျိုးစုံနဲ့အော်ပြီး မွေ့ရာခင်းကို ထုလိုက်ချေလိုက်ဖြစ်နေသည်။တော်တော်လေးကြာမှငြိမ်သွားကာ အသက်ကို လုရှူနေသည်။သူလဲ အသာမှိန်းကာနေလိုက်သည်။အေးမိစံအမောပြေသွားမှ အေးမိစံကို
”ညီမ ဘယ်လိုနေပေးရမလဲ ကိုပိုင်။အရမ်းကြီးမလုပ်နဲ့နော်။ကြောက်တယ်”
သူလဲ အေးမိစံကိုပက်လက်လှန်လိုက်ရာအဖုတ်ထဲမှအရည်တွေက ဖင်ဝသို့စီးလာသည်။သူလဲ ဂျယ်လ်ကိုယူကာ ခပ်ရွှဲရွှဲစအိုကို သုတ်လိုက်ပြီး သူ့လီးကိုလဲ သုတ်လိမ်းလိုက်သည်။အေးမိစံကို ခြေထောက်နှစ်ဖက်မိုးပေါ်ထောင်ကာ လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖင်ကိုဖြဲပေးခိုင်းလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ ခြေထောက်ကိုမြှောက်ကာ ဖင်နှစ်ခြမ်းကို လက်နဲ့ဖြဲပေးလိုက်သည်။သူလဲဖင်ဝကို လီးထိပ်နဲ့ အသာထောက်လိုက်သည်။ပြီးတော့ ဒစ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတေ့သွင်းလိုက်တော့ ”အားကျွတ်ကျွတ်။ဖြည်းဖြည်းကိုပိုင်။ နာတယ်”သူဒစ်ကို ဖြေးဖြေးချင်းသွင်းလိုက်သည်။လီးထိပ်ကြီးက ဖင်ဝမှတဆင့်အထဲကို ကျွံ့ဝင်သွားကာ
ဒစ်တစ်ခုလုံးဝင်သွားသည်အထိ သူထည့်လိုက်သည်။အေးမိစံ မျက်နှာမှာ နာကျင်မှုကြောင့် ရှုံမဲ့နေပေမယ့် မလိုလားဟန်တော့မပြ။သူမလဲ ဖင်ကိုစမ်းချင်နေသည့်ပုံ။သူလဲ ဒစ်တစ်ခုလုံးဝင်သွားတော့ ဆက်မသွင်းသေးပဲ အစေ့ကို ကလိလိုက်သည်။
”ဟ အ အ ကိုပိုင် ရှီး နည်းနည်းထည့်ကြည့်လေ”
သူလဲ ထပ်ပြီးဖိထည့်လိုက်သည်။ဂေါ်လီတစ်လုံးက ဖင်ဝကြွက်သားကိုဖြတ်ကာထစ်ခနဲ အတွင်းသို့ဝင်သွားရာ ဖင်ဝက လန့်ပြီး တင်းကနဲ ညှစ်လိုက်သဘ်။သူလဲ အစေ့ကို ချေပေးလိုက်ပြန်တော့ ပြန်ပြီးပွင့်လာပြန်သည်။ သူအဲ့တိုင်းလေးပဲသွင်းလိုက်ထည့်လိုက်လုပ်ပေးနေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခံနိုင်လာတာမို့ နောက်ထပ်ထည့်လိုက်ပြန်သည်။သူလဲ အေးမိစံဖင်ထဲကို ချော့ချော့ပြီးစိတ်ရှည်လက်ရှည် ထည့်လိုက်ရာ ဂေါ်လီထည့်ထားတဲ့ လီးတစ်ချောင်းလုံးဖင်ပေါက်ထဲသို့ဝင်သွားကာ သူ့ရဲ့ ဆီးခုံနဲ့
အေးမိစံတင်ပါးထိကပ်သွားသည်ယအေးမိစံပါးစပ်မှလဲ နာနာကျင်ကျင် နဲ့
”အာ့ ဟင်းဟင်း နာတယ်ကိုပိုင်ရယ်။ဘယ်လိုကြီးလဲကွာ။အဟင့်ဟင့် ရှီး ကျွတ်ကျွတ်”သူလဲ ကပ်ပြီးညှောင့်နေလိုက်ရင်း နို့တွေကိုကုန်းစို့လိုက်ပြီး အစေ့ကိုချေပေးလိုက်သည်။တော်တော်လေးကြာလာတော့
နာကျင်သည့်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိလာပုံရသည်။စအိုကြွက်သားတွေက ညှစ်လိုက် ပွင့်လိုက်ဖြစ်လာတာမို့ သူလဲ ဖြည်ူဖြည်းချင်း ထုတ်လိုက်ပြီးတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ ဖြည်းညှင်းစွာထည့်လိုက်သည်။ လီးကြီးတာကတကြောင်း ဂေါ်လီပါထည့်ထားတာမို့ လီးတိုးဝင်သွားတိုင်းစအိုဝက အတွင်းထဲ လိပ်ပါသွားပြီး ပြန်ထွက်လာတော့ ပြန်ကပ်ပါလာသည်။အေးမိစံတကိုယ်လုံးလဲချွေးတွေနဲ့။သူလဲ စိတ်ရှည်စွာ လုပ်ပေးနေရာမှ တဖြည်းဖြည်း အေးမိစံလဲ ဖင်ခံရတဲ့အရသာကို သိလာသည်ထင်သည်။နာကျင်နေရာမှ ကောင်းလာသည်ထင်သည်။သူ့ကို နည်းနည်းဆောင့်ခိုင်းလိုက်တာမို့ သူလဲ ဆောင့်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းခံနိုင်လာသည်မို့ အေးမိစံရဲ့ ညည်းသံက နာကျင်သည့်အသံမှ တဏှာသံဖြစ်လာသည်။သူလဲ ခပ်ဆက်ဆက်ဆောင့်လိုက်တော့လဲ ငြင်းဆန်သံထွက်မလာ။
”ကောင်းတယ် ဖင်ခံရတာကို ကြိုက်တယ် ဆောင့် ဆောင့် ညီမကို မညှာနဲ့တော့ ရှီး အာ့ကျွတ်ကျွတ် ကောင်းလိုက်တာ အင့်, ဟင့် ဟင့်”
သူလဲ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်နေလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ အောက်ကနေ ဖင်ကို ကော့ကော့ပေးလာသည်။ အဖုတိကလဲ အရည်တွေက စိန့်ထွက်လာသည်။သူလဲ ညှာမနေတော့ပဲ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုက်သည်။ အေးမိစံကလဲ ကောင်းနေသည်မို့ သူ့ခါးကို ဖက်ကာ ဖိဖိချပေးနေသည်။သူလဲ နို့နှစ်လုံးကိုဆုပ်ကိုင်ကာ အားရပါးရ ဆောင့်နေလိုက်သည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျဉ်းကြပ်လွန်းတဲ့ အေးမိစံရဲ့ အပျိုစင်ဖင်ပေါက်ရဲ့ ညှစ်အားကြောင့် သူ့လီးက ကောင်းလာပြီး ပြီးချင်လာသလို အေးမိစံကလဲ ပြီးချင်လာတာမို့ သူလဲ နို့တွေကို အတင်းညှစ်ကာ အားရပါးကဆောင့်လိုက်သည်။ဖင်ကလဲ တအားညှစ်လာသည်။သူလဲ ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်ရင်း သုတ်ရည်တွေက မထိန်းနိုင်တော့ ဖင်ပေါက်ထဲကို ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်။အေးမိစံလဲ
”အား ကိုပိုင်ရယ် ကောင်းလိုက်တာ ဟာ့ ကျွတ် ကျွတ် အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ ဟင့် ဟင့် အိုး ရှီး”
သူလဲအတော့်ကို ဟိုက်သွားသည်။အဖုတ်ကို လိုးရတာနဲ့ ဖင်ကိုလိုးရတာ မတူ။ဖင်ကို လိုးရတာ ပိုအားစိုက်ရတာမို့လားမသိ။အားပိုကုန်သည်။သူလဲ အေးမိစံအပေါ်မှာမှောက်ရက်
ထပ်ရက်သားအမောဖြေနေလိုက်သည်။စအိုကြွက်သားတွေက လီးကို ညှစ်နေသေးသည်။ သူလဲအေးမိစံကိုနမ်းလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ သူ့ကို အတင်းဖက်ထားကာ နမ်းနေသည်။နှစ်ယောက်သား အတော်ကြာ နားနေပြီး သူလဲ ဖင်ထဲမှ လီးကိုထုတ်ကာ တစ်ရှူးနဲ့ သုတ်လိုက်ကာ သန့်ရှင်းလိုက်သည်။ အေးမိစံလဲ ထမိန်တထည်ထုတ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားသည်။သူလဲ ပုဆိုးကို ထုတ်ကာ ဝတ်လိုက်ပြီးအိမ်သာသို့သွားကာ အပေါ့သွားကာ ရေဆေးလိုက်သည်။ပြန်လာပြီး ကုတင်ပေါ်တက်လာလှဲနေလိုက်သည်။တအောင့်နေ အေးမိစံပြန်ဝင်လာပြိ်း ညဝတ်အင်္ကျီဘောင်းဘီ အဝါကို ထုတ်ဝတ်ပြီး သူ့နားတွင်လာလှဲကာ ”ဖင်က နာပြီးစပ်နေတယ်ကိုပိုင်ရယ်။ရေထိရင် အရမ်းစပ်တာပဲ။ဟင့် သူ့ဟာအကြီးကြီးပါဆိုမှ ဂေါ်လီကထည့်ထားသေး။ သူများဟာလေးကိုအရမ်းလုပ်တယ်”
”သိဘူးသွား။ခုတော့စပ်တယ်။ပြန်လျှော်ပေး”သူလဲ အေးမိစံကိုဖက်လိုက်ပြီးနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်ကာနမ်းလိုက်သည်။ အတန်ကြာနမ်းပြီးမှ နှစ်ယောက်သားပင်ပန်းသွားတာမို့ အနားယူလိုက်ရာမှိန်းခနဲ ဖြစ်သွားကြသည်။နိုးတော့
ကိုးနာရီ ကျော်နေပြီ။နိုးလာကြတော့ နှစ်ယောက်သား ဗိုက်ဆာတာနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲကရှိတာလေးတွေထုတ်ကာ လုပ်စားကြသည်။အေးမိစံကသူ့အတွက် ကြက်ဥမကြက်တကြက်ပြုတ်ပေးသည်။ကြက်ဥမွှေကြော်ကြော်ပေးသည်။ သူလဲ ဘီယာတစ်လုံးဖောက်ကာ သောက်လိုက်ပြီး အေးမိစံကတော့ အအေးသောက်ကာဘေးကနေ အမြည်းစားသည်။သူတိုက်တာနဲ့ ဘီယာနည်းနည်းသောက်သည်။ဘီယာသောက်ပြီး ပန်ကန်ဆေးကာ အခန်းထဲကိုဝင်လာတော့ သူလဲ အေးမိစံကို နမ်းလိုက်ပြီးနောက်တစ်ချီလုပ်ဖို့် ဆိုင်းပြင်းလိုက်သည်။
”ကိုပိုင် ဒီတခါတော့ နောက်ကိုမလုပ်သေးနဲ့ဦးနော်။နာနေသေးတယ်”
သူလဲ ဘာမှမပြောတော့ပဲ ညဝတ်အင်္ကျီတွေကိုချွတ်ကာနို့တွေကိုနမ်းလိုက် အစေ့ကိုကလိလိုက် အဖုတ်ကိုဆွလိုက်လုပ်နေလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ စိတ်တွေကြွလာကာ သူ့လီးကို အားကျမခံ ပြန်စုပ်ပေးသည်။ အတော်ကြာကလိပြီးတာနဲ့ သူလဲ အေးမိစံကို ပက်လက်လှန်လိုက်ကာ အပေါ်ကနေ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ပါခုံးပေါ်ထမ်းကာ စကတည်းက တရစပ်ကို ဆောင့်လိုက်သည်။သူ့ရဲ့အားပါလှတဲ့ဆောင့်ချက်တွေကြောင့် အေးမိစံ အသက်ရှူပင် မှားလောက်သည်။တချက်မှ မနားပဲဆောင့်နိုင်ဖို့က တော်ရုံသက်လုံကောင်းရုံနဲ့မရ။သူကတော့ ဆက်တိုက်ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆွဲလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ ဆောင့်ချက်တိုင်းမှာ အဖုတ်အတွင်းသားတွေကို ဂေါ်လီတွေက ပွတ်တိုက်နေသာမို့ ခဏနဲ့ ပြီးချင်လာသည်။အောက်ကနေ မနားတမ်းကို အော်ဟစ်ညည်းနေသည်။ ဆောင့်ချက်ပေါင်းးငါးဆယ်ကျော်လာတော့ အေးမိစံ ခပ်ကြမ်ကြမ်းပင် ပြီးသွားရသည်။
”အား ကိုပိုင် ပြီးပြီ။ပြီးသွားပြီ။အားရှီး ဘယ်လိုကြီးလဲကွာ။ကောင်းလိုက်တာ အား ဟာ့ဟာ့ ”
အေးမိစံတချီပြီးသွားပေမယ့် သူကမပြီးသေးတာမို့ အေးမိစံကို ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြန်သည်။အေးမိစံကလဲ မငြင်းပေ။ သူ့စိတ်ကြိုက် ကုန်းပေးလိုက်တော့ သူလဲ အဖုတ်ဝကိုတေ့ကာ ဆောင့်ထည့်လိုက်ကာ အားရပါးရ ဆောင့်ကာလိုးလိုက်ပြန်သည်။
”အား ဟာဟာ အင့် အင့် ”
”ဗျွတ် ဗျွတ် ဖတ်ဖတ် ဗြိ ဗြိ ဖုတ်ဖုတ် ဖုတ်”
သူလဲ အရှိန်ကောင်းနေတာမို့ ဖင်ကို တဖျန်းဖျန်းရိုက်ကာ ဆောင့်လိုးနေသည်။အချက်ပေါက်းတစ်ရာကျော်လာတော့ သူ ပြီးချင်လာပြီ။အေးမိစံလဲ နောက်တခါပြီးဖို့နီးလာတာမို့ သူလဲ အစေ့ကို ကုန်းကာကလိရင်း ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။အေးမိစံဖင်ကိုနောက်ပြန်ဆောင့်ဆောင့်ပေးကာ
”ကိုပိုင်ဆောင့်ပါ မညှာနဲ့ အားရပါးရလိုးပေးပါ ပြီးတော့မယ် ပြီးတော့မယ်”သူလဲ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းကိုင်ကာ တရစပ်ဆောင့်လိုက်သည်။အချက်သုံးဆယ်ကျော်တော့ သူ့လီးတစ်ခုလုံးတင်းခနဲ ဖြစ်သွားကာ သုတ်ရည်တွေကတရဟောထွက်သွားသလို အေးမိစံလဲ တအစ်အစ်နဲ့ သူ့လီးကို ညှစ်ညှစ်နေတော့သည်။သူလဲ ဖင်ကိုကိုင်ကာကပ်တိုးလေးညှောင့်ပေးရင်းအမောဖြေလိုက်သည်။ခဏကြာတော့ အေးမိစံကို ဆွဲထူလိုက်ပြီး နို့တွေကို ညှစ်ကာ ကုပ်သားကိုနမ်းလိုက်ရင်း
”အေးမိစံ ကိုနဲ့ လိုးရတာဘယ်လိုလဲ ”
”အရမ်းကောင်းတာပဲကိုပိုင်ရယ် ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုကြီးမှန်းကိုမသိဘူး”
”အဖုတ်ထဲကရော ကောင်းတယ် ဖင်ထဲကလဲ ကောင်းတယ်”သူလဲ လီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ အဖုတ်ထဲကအရည်တွေက ထွက်ကျလာသည်။သူလဲ အေးမိံစံကို ခေါ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲသို့သွားလိုက်သည်။
နှစ်ယောက်သားအဝတ်မပါကြ။တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်ပြီးရီလိုက်ကြကာ ရေဆေးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြရင်း စနေကြသည်။ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ တယောက်နဲ့တယောက် ဖက်ကာ စကားပြောနေကြသည်။
အေးမိစံက သူ့ဘဲနဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသည်။သူ့ဘဲနဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာတွဲလာပြီး အကြိမ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် သူမအကြိုက်ကို ခုထိမသိ။သိအောင်လဲ မကြိုးစားဘူးလို့မကျေမနပ်ပြောသည်။သူလဲ အဲ့လိုမတွေးသင့်ကြောင်း အဲ့လိုတွေးရင် အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါနောက်ပိုင်းမှာ လင်သားအပေါ်မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး ဖောက်ပြန်နိုင်ကြောင်းပြောတော့ ဖောက်ပြန်ရင်လဲ ကိုပိုင်နဲ့ပဲဖောက်ပြန်မှာ လို့ စသလိုလိုနဲ့ပြောသည်။ သူ့ရည်းစားက များသောအားဖြင့် သူမရဲ့ဆန္ဒကိုမသိ။အရင်ပြီးသွားတက်သည်လို့ပြောသည်။သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ တခါတခါကိုယ့်ရည်းစားနဲ့အကြောင်းကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြတော့ ဆုပြည့်က
သူတို့နှစ်ယောက် စကားပြောကြရင်း စိတ်ပန်ပါလာတာမို့ နောက်တစ်ကြိမ်လုပ်ကြဖို့ ပြင်ကြပြန်သည်။သူက ”အေးမိစံ ဒီတစ်ခါ ကို ဖင်ကိုလုပ်ချင်သေးတယ် အားမရသေးဘူးကွာ”
”ကိုပိုင်ကလဲ ဒီမှာ နာနေသေးလို့ပါဆိုမှကွာ။ဇွတ်ပဲ ဟင်း မပြောချင်ဘူး။မနက် အီးပါလို့မရရင် ကိုပိုင်ကြောင့်ပဲ ဟင့်”
ပြောနေပေမယ့် သူမလဲ စိတ်ပါလာသည့်ပုံ။ခုနက စကားပြောကြရင်းနဲ့ ဖင်ချတဲ့အကြောင်းတွေမေးရင်းနဲ့ သူလဲ တစ်တစ်ခွခွပြောတာကြောင့် စိတ်ပြန်ပါလာသည့်ပုံ။သူလဲ အေးမိစံကို ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး စအိုဝပေါ်ကို ဂျယ်လ်တွေရွှဲနေအောင်လိမ်းလိုက်ပြီး လက်နဲ့အသာထည့်ပြီးကလိလိုက်သည်။ပါးစပ်ကလဲ ပြောနေရင်း ဖြည်းဖြည်းချင်းလက်တချောင်းကနေ နှစ်ချောင်း၊နှစ်ချောင်းကနေ သုံးချောင်းဝင်အောင် ထည့်ရင်းကလိနေသည်။ တံတွေးထွေးချလိုက်ကလိလိုက် ဂျယ်လ်သုတ်လိုက်ထည့်လိုက်နဲ့ လက်သုံးချောာင်းဝင်ကာ ကလိလိုက်သည်။ အေးမိစံလဲ ဖင်ခံဖူးသွားသည်မို့ ဖင်ခံရတဲ့အတွေ့အကြုံရနေပြီ။ဖင်ရဲ့အရသာကိုကောင်းစွာခံစားတက်သွားပြီမို့ အောက်ကနေ ဇိမ်ခံနေသည်။အစကနာကျင်သလောက် နောက်ပိုင်းမှာ နာကျင်ကောင်းမွန်ခြင်းကိုခံစားရသည်ကို ကောင်းကောင်းသိသွားပြီ။သူလဲ ကလိနေရင်းရပ်ကာ အေးမိစံကို လီးကိုစုပ်ခိုင်းရာ အေးမိစံလဲ သူ့လီးကိုအားရပါးရလွေပေးလေသည်။သူလဲ တလှည့်အရသာကို ခံစားလိုက်သည်။တော်တော်ကြာတော့ အးမိစံကိုရပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး ကုန်းခိုင်းကာ ဖင်ကိုဖြဲခိုင်းလိုက်ပြီး အပေါ်ကနေ ခွကာ လီးကို ဖင်ဝတွင်တေ့ကာ ထည့်လိုက်သည်။အရည်တွေကရွှဲနေတာရော ကလိထားတာရော အကျင့်ရှိသွားတာကြောင့်ပါ ခုနကလောက် အခက်အခဲမရှိတော့။သူလဲ ဖြည်းညှင်းစွာ ထည့်လိုက်သည်။လီးကတဆုံးထိဝင်သွားတော့ တစ်ဝက်လောက်ပြန်ထုတ်လိုက်ကာ ပြန်ထည့်လိုက်သည်။တစ်ဝက်လောက်ကို ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက် လိုးပေးနေရင်းနဲ့ အေးမိစံလဲ ကောင်းလာတာမို့ သူ့ကို ဆောင့်ခိုင်းတော့သည်။
”ကိုပိုင် ကောင်းလာပြီ ဆောင့်တော့ အားမနာနဲ့တော့ ခံနိုင်ပြီ။ဆောင့်ဆောင့် အာ့ အာ့ အာ့ ဟာ့ ဟာ့ ဟာ့” ”ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ဖတ်ဖတ်ဖတ်”
သူလဲ ဒူးအားကိုအသုံးပြုကာ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်လိုက်သည်။ဖင်က ညှစ်အားကြောင့် သူလဲ ပြီးချင်သွားတာမို့ ခဏ ရပ်လိုက်ကာ ဖင်ထဲမှ လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်တော့
”အာ ကိုပိုင် ဘာလုပ်တာလဲလို့ သူများကောင်းနေတဲ့ဟာကို”
ပြောရင်း သူလဲ ကုတင်အောက်ကိုဆင်းကာ အေးမိစံကိုကုတင်အစပ်နားဆွဲလိုက်ပြီး
ဖင်ကိုလက်နဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးဖြဲခိုင်းလိုက်ပြန်သည်။အေးမိစံလဲ ဖင်ကိုဖြဲပေးလိုက်တော့ သူလဲ
ခပ်သွက်သွက်ဖိထည့်ကာ ဆောင့်လိုက်သည်။အေးမိစံလက်ကို ဖယ်ကာ တင်းပါးတွေကို ညှစ်ကာဆောင့်နေလိုက်သည်။အေးမိစံလဲ ကောင်းနေပြီ။လက်တွေက အစေ့ကိုချေရင်း နို့ကိုကိုင်နေသည်။ သူမပြီးချင်လာတာမို့ သူ့ကို ဆောင့်ခိုင်းနေသည်။သူလဲ စိတ်ကိုလျော့ကာ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ခပ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ရင်း ဆောင့်ချလိုက်ရာ အေးမိစံရဲ့နှုတ်က အားအူးဆိုပြီးအသံနဲ့အတူ စအိုတစ်ခုလုံးက ညှစ်လိုက်သလို သူလဲအါးနဲ့ဆောင့်ချရင်း သုတ်ရည်တွေက ပန်းထွက်သွားရသည်။နှစ်ယောက်သားအတော်ကို မောဟိုက်သွားသည်။သန့်ရှင်းလုပ်ပြီး သူလဲ အားဆေးသောက်လိုက်သလို အေးမိစံကိုလဲ အားဆေးသောက်ခိုင်းလိုက်သည်။နှစ်ယောက်သားအဝတ်မဝတ်တော့ပဲ စောင်ကိုခြုံကာဖက်ပြီးအိပ်လိုက်ကြသည်။ မနက်ခြောက်နာရီကျော်တော့ နိုးလာကြသည်။လန်းလန်းဆန်းဆန်းနိုးလာပြီးသူ့လီးကထနေတာမို့ အေးမိစံက ထကိုထတယ်ပြောသည်။သူလဲ အေးမိစံကို ပုလွေပေးခိုင်းရာ စိတ်ပါလက်ပါလွေပေးသည်။သူလဲ ပြီးချင်လာတော့ အေးမိစံကိုဖယ်ခိုင်းပေမယ့် ဆက်လွေနေတာကြောင့် ပါးစပ်ထဲ ပြီးလိုက်သည်။ပြီးတော့ မျက်နှာသစ် အဝတ်လဲကာ မနက်စာထွက်စားလိုက်ကြသည်။စားစရာသောက်စရာတွေကို ဝယ်လာကြပြီး အခန်းပြန်ရောက်တော့ ချက်ပြုတ်ကြသည်။သူလဲ အေးမိစံချက်ပြုတ်နေတုန်း လုပ်စရာ ကိစ္စတွေကို လုပ်နေလိုက်သည်။ထမင်းမစားခင် ဆွဲ ကြပြန်သည်။ခုမှ ညားကာစလင်မယားတွေလိုပင်။နေ့လေးညငါးထမင်းစားပြီးတစ်ဖြစ်နေသည်။ စနေတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်လုံးအပီအပြင်ကိုလုပ်ကြသည်။သူ အေးမိစံရဲ့တကိုယ်လုံးကို မထိဘူး မလုပ်ဖူးတဲ့နေရာမရှိသလောက်ပင်။နို့နှစ်လုံးကြားလီးညှပ်ပြီးလဲ လုပ်သည်။ချိုင်းကြားထဲလဲလုပ်သည်။ ဖင်နဲ့အဖုတ်ကတော့ ပြောမနေတော့နဲ့။အေးမိစံလဲ ဖင်ကိုကောင်းကောင်းခံတက်သွားသည်မို့ ဖင်ခံရတာကို အတော်ကိုကြိုက်နေသည်။နောက်ပိုင်း ဖင်ချမယ့်သူမရှိရင်ဒုက္ခပဲ ကိုပိုင်လာချပေးရမယ်လို့ပြောသည်။သူမ ယောက်ကျားရသွားရင်တော့ သူလုပ်ဖြစ်ချင်မှ လုပ်ဖြစ်တော့မည်။ တနင်္ဂနွေညလဲ သူမ မပြန်ပေ။သူနဲ့ တညလုံးလိုလို လုပ်ကြသည်။မနက်ကျမှ ခုနှစ်နာရီလောက်ထကာ ရေချိုးပြီး သူမအဆောင်သို့လိုက်ပို့လိုက်သည်။ အေးမိစံရုံးကိုရောက်တော့ သူ့ဆီဖုန်းဆက်သည်။အိပ်ချင်ပြီးခုမှနုံးနေတယ်တဲ့။သူလဲ ရီပဲနေလိုက်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းက ဆက်ရန်ရှိနေသည်ဆိုတာသူသိသည်။သူလဲ အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်တော့ ရှောင်ရမည်။
သူလဲ သင်တန်းဖက်ကို အာရုံစိုက်ကာလေ့လာရပြန်သည်။
စာမေးပွဲကနောက်လဒုတိယပတ်တွင်စာတွေ့ထပ်ဖြေရမည်။အောင်ပါက နောက်ဆုံးပတ်တွင် လူတွေ့ဖြေရမည်။ လူတွေ့အောင်ရင်တော့ ဂျပန်တွင် သုံးနှစ်မာစတာဘွဲ့တက်ရမည်။သူမရရအောင်ကြိုးစားမည်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားသည်။မလုပ်ရင်လဲ မလုပ်လူး။လုပ်ပြီဆိုရင်လဲ ပြီးဆုံးအောင်ဇွဲရှိရှိလုပ်တက်တာသူ့အကျင့်ပင်။
အေးမိစံနဲ့တွေ့ပြီးနောက်တစ်ပတ်တွင် နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကိုဖုန်းဆက်လာပြန်သည်။သူမ ဒီတစ်ပတ်သောကြာညနေကားနဲ့ ရန်ကုန်လာခဲ့မည်။သူ့ကိုလာကြိုပေးပါဟု။သူအကြိုက်ပင်။နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ဖင်ကို လုပ်ချင်နေတာကြာပြီ။မလုပ်လိုက်ရလို့ မကျေမနပ်ဖြစ်နေတာ။လာရင်သိမယ်လို့စိတ်ထဲမှာကြိမ်းထားလိုက်သည်။
အေးမိစံလဲ သူ့အမေ ဆေးရုံတက်ရလို့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေက ပြန်သွားသည်။သူပဲ ကားဂိတ်ကို လိုက်ပို့လိုက်ရသည်။ ပိုးပိုးက ညဖက်တွေမှာ သူ့ဆီဖုန်းဆက်ရင်း ချွဲတက်သည်။သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့နဲ့ သတိရနေတဲ့အကြောင်းပြောသည်။ သူလဲ ပိုးပိုးကို သတိရတာတော့အမှန်ပင်။သူမကို ဖြူစင်စွာချစ်ချင်သည်။ဖြစ်နိုင်ရင် ပိုင်ဆိုင်ချင်မိလာသည်။ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပေမယ့် စိတ်ကူးတော့ယဉ်မိတာအမှန်။တကယ်လို့သာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် သူမအရင်က ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ ကြည်ဖြူနိုင်သည်။သူလဲ ဖြူစင်တဲ့သူမှမဟုတ်တာ။ချစ်သူရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သူလဲ ကွယ်ရာမှာ လုပ်ခဲ့တာပဲ။ဒါပေမယ့် ပိုးပိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကဲ့ရဲ့မှာကိုမလိုလား။သူတကယ်ချစ်မိနေပြီလားမသိ။သူမတွေးချင်။
မတွေးပဲနေလေ ပိုတွေးမိလေလားမသိ။သူမနေနိုင်တဲ့အဆုံး သင်တန်းချိန်ဖျက်ကာ
ပိုးပိုးဆီဖုန်းဆက်ပြီးခဏတွေ့လို့ရမလားမေးတော့ လာခဲ့မယ်လို့ပြောတာနဲ့ သူတို့ ဆိုင်တဆိုင်မှာတွေ့ကြသည်။ သူလဲ ရင်ထဲမှာရှိတာတွေကိုအကုန်ဖွင့်ပြောတော့ ပိုးပိုးကလဲ သူ့ကို အရမ်းချစ်နေမိပြီလို့ပြောသည်။ သေချာတာတခုက သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်တာလိင်ကိစစ္စကြောင့်တော့မဟုတ်တာအမှန်ပင်။
”တကယ်လို့ ပိုးပိုးရယ် ဆုံဆည်းခွင့် ရခဲ့ရင် ကိုကြီးရဲ့လက်ကို လာပြီးဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါ။ဘာကိုမှမတွေဝေပဲနဲ့ပေါ့”
”ကိုကြီးက ပိုးရဲ့ ဘဝကို ကြည်ဖြူနိုင်လို့လား။ပိုးက ပိုးရဲ့ချစ်သူနဲ့ ငြိစွန်းနေတာကို ကိုကြီးအသိဆုံးပဲ။ ကိုကြီးနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာကလဲ တဒင်္ဂသာယာချင်မှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာ။ပိုးက မဖြူစင်ဘူးလေ။ကိုကြီးအတွက် ပိုးရဲ့ဘဝက မဖြူစင်ဘူး”
”ဒါတွေကို မလိုအပ်ဘူးလေ။ကိုကြီးလဲ ပိုး ထင်သလောက် မဖြူစင်ပါဘူး။ပိုးဖက်ကနေ အရာရာလွတ်လပ်သွားတဲ့တနေ့ ပိုးရဲ့ဘေးမှာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကင်းသွားတဲ့တနေ့ ကိုကြီးဆီကိုလာခဲ့ပါ။ဒါပေမယ့် အပြစ်မဲ့တဲ့သူကိုတော့ ချန်ထားပြီးမှတော့ မလာပါနဲ့။သူက အရင်တုန်းကရော အခုရော နောင်ရော ပိုးရဲ့ အချစ်ဦး အချစ်ဆုံးပဲဆိုတာ ပိုးအမြဲသတိရပါ။အပြစ်မဲ့သူကို အပြစ်ရှာထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုကြီးပိုးကို အထင်သေးမိလိမ့်မယ်”
”စိတ်ချပါ ကိုကြီးရယ်။ပိုး အဲ့လိုဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူး။ကံဆုံလို့ ဆုံဖို့ဖြစ်လာမယ့် မျှော်လင့်ချက် ဝေဝါးလေးကို ပိုး အမြဲတမ်းတရင်း ပိုး လျှောက်ရမဲ့ဘဝကို ဆက်လျှောက်သွားမှာပါ”
သူတို့နှစ်ယောက် ခံစားချက်ပေါက်ကွဲကြပေမယ့် ကိုယ်အမူအရာတော့ ထိန်းကြသည်။သူလဲ ပိုးပိုးကို အမှန်တိုင်းဝန်ခံလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်နဲ့အကြောင်းကိုရော အေးမိစံနဲ့အကြောင်းကိုပါ။ပိုးပိုးက မအံ့သြပေ။ သူ့ကိုပြောသည်။သူမနဲ့အကြောင်းကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြောလဲ သူတို့အံ့သြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူတို့တွေက မိန်းမချင်းချင်းမို့ ရိပ်မိတယ်လို့ပြောသည်။ဖွင့်မမေးကြပေမဲ့ တရက် ဒီလိုကြုံလိမ့်မယ်ဆိုတာ အားလုံးက ကိုယ်စီရိပ်မိပြီးသားပဲလို့ပြောသည်။သူ့ကို မဖွင့်ပြောရင်တောင် စိတ်ဆိုးချင်ဆိုးမှာတဲ့။ပြောပြလို့ စိတ်မဆိုဘူးလို့ပြောသည်။ပြီးတော့ သူ့ကို ကိုကြီးက စွံကိုစွံတာကိုးတဲ့။မနာလိုတောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောသည်။ တကယ်လို့ သူတို့ရခဲ့ရင်တောင် ကြုံနေဦးမယ်ဆိုရင် ကြည်ဖြူတယ်လို့ပြောတော့ သူရီမိလိုက်သည်။ သူတို့အတော်ကြာအောင်စကားပြောဖြစ်ကြသည်။ရင်ထဲကအရာတွေဖွင့်ချလိုက်ရလို့လားမငိ။ နှစ်ယောက်သားပိုပြီးနီးကပ်သွားသလို ပေါ့ပါးသွားသည်။သူတို့ပြန်လာခဲ့သည့်အချိန်ထိ စကားစက မပြတ်သေး။
သောကြာနေ့ညရှစ်နာရီကျော်တော့ ပိုးပိုးက သူ့ကို သတိပေးသည်။မမနှင်းမြတ်မွန်ကို သွားကြိုဖို့မမေ့နဲ့ဦးဆိုပြီး။ သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ဆီဖုန်းဆက်တော့ ၁၁၅မိုင်ရောက်ပြီတဲ့။သူလဲ စာကိုဆက်ပြီးကြည့်နေလိုက်သည်။ ဆယ့်တစ်ကျော်တော့ နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ဆီဖုန်းဆက်သည်။ရောက်တော့မည်တဲ့။သူလဲ အင်္ကျီကိုကောက်ဝတ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးတစ်ထည်ထုတ်ဝတ်လိုက်ကာ ကားသော့ယူပြီး အခန်းသော့ပိတ်ကာ အဝေးပြေးကွင်းကို ထွက်လာခဲ့လိုက်သည်။
ကားဂိတ်ရောက်တော့ ကားကမရောက်သေး။သူကားထဲမှာပြစောင့်နေလိုက်သည်။ငါးမိနစ်လောက်နေတော့ ကားဆိုက်လာသည်။သူကားနားကိုသွားကာစောင့်နေလိုက်သည်။မိုးပြာရောင်ဝမ်းဆက်ကို အကြပ်ဝတ်ထားပြီး သရီးစတပ်ကေဆံပင်နဲ့ အိတ်ကိုဆွဲကာ ဆင်းလာတဲ့ နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ ဟန်က ကျော့ရှင်းလှပနေသည်။အနားရှိ ယောက်ကျားသားတွေက ကပ်ကပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှပေါ်အောင်ဝတ်ထားတဲ့
နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့နောက်ပိုင်းအလှကို ကြည့်ရင်းသဘောကျနေတာတွေ့တော့ သူဟက်ခနဲတချက်ရီလိုက်ရင်း နှင်းမြတ်မွန်အနားကိုသွားကာ ခေါ်လိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ သူ့ကို တွေ့တော့ ဝမ်းသာသွားဟန်နဲ့
သူခေါ်တဲ့နောက်ကို လိုက်လာခဲ့လိုက်သည်။ကားနောက်ခန်းဖွက့်ကာ အိတ်ကို ထားပြီး နှစ်ယောက်သားကားဂိတ်က ထွက်လာခဲ့ကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်ကို ဘာစားချင်သေးလဲ မေးတော့ မစားချင်ဟုပြောသည်။သူလဲ အိမ်မှာလိုအပ်တာတွေဝယ်ထားတာမို့ ဘာမှမဝယ်တော့ပဲ ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။
တိုက်ခန်းကိုရောက်တော့ ဝိုင်တလုံးနဲ့ ဘီယာတလုံးယူကာ ဖောက်လိုက်ပြီးခွက်ထဲငှဲ့ကာ ဝိုင်ခွက်ကို နှင်းမြတ်မွန်ကိုပေးလိုက်ပြီး ခွက်ချင်းတိုက်ကာ သောက်လိုက်သည်။သူတို့ သောက်ကြရင်းနဲ့ စကားပြောနေကြသည်။သောက်ပြီးတော့ သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကိုအခန်းထဲခေါ်သွားလိုက်သည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ နှင်းမြတ်မွန်ကိုဖက်လိုက်ကာ တင်ပါးတွေကို ဖျစ်ညှစ်နယ်ပေးလိုက်သည်။
”ဟိတ် ကိုပိုင်နော် သူများက ခရီးပန်းလာတာအိပ်ချင်ပြီ။အိပ်တော့မယ်”မူနေသည်။သူလဲ ဘာမှမပြောတော့ပဲ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့ကာနမ်းလိုက်ရင်း ပင်တီကြိုးတွေကို ဆွဲလိုက်လွှတ်လိုက်လုပ်နေသည်။ပြီးတော့ နှင်းမြတ်မွန်ကို ပုခုံးဖိချလိုက်တော့ အလိုက်တသိ ထိုင်ချလိုက်ကာ ပုဆိုးကိုချွတ်လိုက်ပြီး အတွင်းခံကိုပါချွတ်လိုက်တော့
”ဝိုး ဘယ်လောက်အောင့်ထားရလဲဟင်။ဟယ် အဖုအဖုတွေနဲ့ ဘာတွေလဲကိုပိုင်”
”ဂေါ်လီတွေလေ နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ ဖင်ကို လုပ်မလို့အဲ့ဒါတွေတပ်ထားတာ”
”အော်ဂေါ်လီဆိုတာ ဒါလား။အမလေး ဒါကြီးနဲ့ ဖင်ကို..ကြောက်စရာကြီး ခိခိ”
ပြောရင်း အသာငုံ့ကာ စုပ်လိုက်သည်။သူလဲ အရသာခံကာ နေလိုက်ရင်း ခါးကိုကော့ကော့ပေးလိုက်သည်။ တော်တော်လေးကြာတော့မှ နှင်းမြတ်မွန်ကို ထခိုင်းလိုက်ပြီး အဝတ်တွေကိုချွတ်ခိုင်းကာ သူလဲ အင်္ကျိကိုချွတ်လိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ အင်္ကျီထမိန်နဲ့အတွင်းခံတွေကိုပါချွတ်လိုက်သည်။သူလဲ နို့တွေကိုညှစ်ကိုင်လိုက်ရင်း အစေ့ကို ကလိပေးလိုက်သည်။အဖုတ်က အရည်တွေ စိုနေသည်။သူလဲ အစေ့ အဖုတ်နဲ့ ဖင်ကို တပြိုင်နက်တည်းကလိလိုက်ရာ နှင်းမြတ်မွန်လဲ ငါဖယ်ပျံသလို ကော့ပျံနေသည်။ပါးစပ်ကလဲ တတွတ်တွက်ရွက်နေရင်း ဖင်ကြီးက ကော့တက်လာလိုက် ပြန်ပြုတ်ကျသွားလိုက်နဲ့။သူကလိနေရင်းနဲ့
”အား ကိုပိုင် အင့် အင့် လုပ်လုပ် ပြီးတော့မယ် ပြီးတော့မာ် အိုး ဟား ဟား ရှီး”ဖင်က
မြောက်တက်သွားပြီးတော်တော်နဲ့ ပြန်ကျမလာတော့။သူလဲ ဆက်တိုက်ကလိပေးလိုက်ရာ ဟင်းခနဲ အသံနဲ့ ဖင်က အောက်ကိုပြန်ကျသွားကာ ပြီးသွားသည်။နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ မျက်နှာက အားရကျေနပ်သည့်ပုံ။သူလဲနှင်းမြတ်မွန်ကို
”ကဲ ကိုယ့်ကို ကုန်းပေးကွာ ကိုယ် မင်းလေးရဲ့ ဖင်လေးကို လုပ်ချင်နေပြီ”
နှင်းမြတ်မွန်လဲ ဖင်ကို ခံကြည့်ဖူးချင်သည်။ကိုပိုင်ဆွတာကြောင့်ရော ပွန်းဆိုက်တွေမှာကြည့်ဖူးတာတွေကြောင့် ဘယ်လိုဆိုတာ ခံကြည့်ချင်ပေမယိ့ သူ့ဘဲက ယောင်လို့တောင်မှမထိ။ကိုပိုင်က လုပ်ချင်တယ်ပြောတော့ သူနည်းနည်းကြောက်တာလဲ ပါတာမို့ ငြင်းတော့ ကိုပိုင်က ဇွတ်မလုပ်။ဒီကိုလာမယ်ပြောတော့ကိုပိုင်က ဖင်ချမှာလို့ပြောတာနဲ့ သူလဲ လေ့လာကြည့်မိသည်။ဘယ်လို ဆိုတာတော့လက်တွေ့ခံဖူးမှသိမည်ပင်။သူလဲ ကုန်းကာ ဖင်ကိုစွင့်ကာ ခါးကိုကော့ပေးထားလိုက်သည်။ကိုပိုင်က ဖင်ကိုတဖျန်းဖျန်းနဲ့ရိုက်နေတော့ သူစပ်လဲ စပ် ကောင်းလဲကောင်းသလို။သူ နာနာကျင်ကျင်အရသာကို ကြိုက်သည်။ဒါကြောင့်တင်ပါးရိုက်ခံရင်းနဲ့ စိတ်တွေက ပါလာရပြန်သည်။အဖုတ်ထဲက စစ်ခနဲဖြစ်လာရသည်။ကိုပိုင်လဲ ဂျယ်လ်ဘူးယူကာ သူမဖင်ဝကို သုတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ကွန်ဒုံးတစ်ခုယူကာ သူ့လီးမှာစွပ်ရင်း ဂျယ်လ်ကိုသုတ်လိုက်သည်။ပြီးတော့ သူ့ကိုဖင်ဖြဲခိုင်းလိုက်တော့ သူလဲ ဖင်နှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ ဖြဲကာ ဖင်ဝကို ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ကိုပိုင့်လီးကြီးက ဖင်ဝကိုလာထောက်တော့ သူ့ရင်ထဲ ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားကာ ရင်ခုန်မိသွားသည်။လီးကြီးကဖင်ဝကိုခွဲကာ တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးဝင်လာသည်။
နှိုးဆွမှုကြောင့်ရော အရည်တွေရွှဲနေတာကြောင့်လားမသိ ထင်သလောက်မနာ။သူခံနိုင်သည်။ကိုပိုင်က ခဏရပ်ကာ သူမအစေ့ကိုချေလိုက်သည်။သူမလဲ အဟင့်ဟင့်နဲ့ဖြစ်သွားပြီး အဖုတ်ထဲက အရည်စိမ့်ကျလာသည်။ပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်လိုက်ရာ ဖင်ဝကိူဖုထစ်ထစ်ဂေါ်လီးကချိတ်ကာအထဲကို ခေါ်သွားသည်။ သူမအသည်းခိုက်သွားရသည်။နာကျင်ပေမယ့်ကြိုက်သွားသည်။ဂေါ်လီတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူမဖင်ထဲကို တစ်လုံးချင်းတိုးဝင်နေသည်။ကြီးမားတဲ့ လီးနဲ့ဂေါ်လီတွေက သူမရဲစအိုကြွက်သားတွေကို ပွတ်တိုက်နှိုးဆွနေသည်။ သူမရဲ့စအိုကြွက်သားတွေက ထိုအရာတွေကို ဖျစ်ညှစ်နေပြီး လက်သင့်ခံနေသည်လားမသိ။နာကျင်ပေမယ့် ကောင်းနေသည်။အဲ့အရသာကိူ နှစ်သက်သွားသလိုအဖုတ်ထဲမှလဲ အရည်တွေက တစိမ့်စိမ့်ကျနေသည်။သူမလဲ ဖင်နှစ်ဖက်ကိုဖြဲရင်း
”အာ့ ရှီး ဘယ်လိုကြီးလဲကွာ။ဟင့်ဟင့် ကောင်းတယ်ကိုပိုင်ရယ်။အရမ်းကြိုက်တယ်။အင့် အင့် ဟင့်ဟင့်”ကိုပိုင့်လီးကြီးတခုလုံးက ကျဉ်းကြပ်တဲ့ ဖင်စအိုထဲကိုတစ်ချောင်းလုံးဝင်နေတာအံ့သြစရာပင်။ ဖင်ဝကတင်းကြပ်တဲ့ဝေဒနာက ဖင်ဝမှတဆင့်တကိုယ်လုံးပျံနှံ့လာပြီးကောင်းလာသည်။ သူမလဲအားမလိုအားမရဖြစ်ကာဖင်ကိုနောက်သို့ဆောင့်ပေးမိသည်။ကိုပိုင်ကလဲ သူမသဘောကို သိသည်မို့ခပ်သွက်သွက်လေးဆောင့်နေသည်။ဂေါ်လီတွေက ထွက်သွားလိုက် ဝင်လာလိုက်နဲ့ စအိုဝကို ခလုတ်တိုက်တိုက်သွားပေမယ့် အဲ့အရသာကိုက အရမ်းကိုဟော့စေသည်။အဖုတ်ကို ခံရတာနဲ့မတူ။ သူမကြိုက်သည်။ကိုပိုင်ဆောင့်တာတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မြန်လာသည်။သူမအရမ်းကောင်းနေပြီ။
”အာကိုပိုင် ဘာလို့ ထုတ်လိုက်တာလဲလို့။ဒီမှာ အရမ်းကောင်းနေပြီကို။ဆိုးတယ်ကွာ”
သူမလဲ ကုတင်အစပ်နားမှာဒူးထောက်ကုန်းလိုက်ပြန်သည်။ကိုပိုင်က သူမဖင်ကိုဖြဲကာလီးကိုထည့်လိုက်သည်။ သူမလဲ အစေ့ကိုချေလိုက် နို့တွေညှစ်လိုက်နဲ့ဟော့နေသည်။ကိုပိုင်လဲ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ညှစ်ကိုင်ကာ အားရပါးရဆောင့်နေတော့သည်။သူမ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြီးချင်လာတာမို့ အရမ်းကိုဆောင့်ခိုင်းလိုက်သည်။ကိုပိုင်လဲ အားကုန်ဆောင့်ချလိုက်ရာ အချက်နှစ်ဆယ်ကျော်တော့ သူမ အဖုတ်ထဲမှ အရည်တွေ ထွက်ကျကုန်သည်။သူမ ဘဝမှ ဒီလောက်ပြီးတာမျိုးတခါမှမကြုံဖူးခဲ့။ကိုပိုင်နဲ့တွေ့တိုင်းအရမ်းပြီးခဲ့ပေမယ့် ဒီလောက်မပြီးခဲ့ဖူးပေ။ကိုပိုင်လဲ အားကုန်ဆောင့်နေရင်းပြီးသွားသည်။ပြီးတော့သူမပေါ်မှေးကာ အမောဖြေနေသည်။နှစ်ယောက်သား ချွေးတွေနဲ့ရွှဲကာ အားပြတ်သွားသလိုပင်။နှုံးချိသွားရသည်။အမောဖြေပြီးတော့ သူမလဲ ကိုပိုင့်ကိုဖယ်ကာ ထမိန်တထည်ထုတ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲဝင်ကာ ရေဆေးလိုက်သည်။ဖင်ဝက ခုမှ စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်နေသည်။ ဒါပေမယ့်သဘောကျမိသည်။သူမ ထမိန်ကိုရင်လျားပြီးအခန်းထဲဝင်လိုက်တော့ ကိုပိုင်က ပုဆိုးနဲ့စွပ်ကျယ်ဝတ်ကာ ကုတင်ပေါ်မှာလှဲနေသည်။သူမလဲ ကိုပိုင့်ဘေးဝင်လှဲလိုက်ရင်းကိုပိုင်းကိုအသာနမ်းလိုက်ကာ အနားယူလိုက်သည်။ ခဏကြာတော့ နှစ်ယောက်သားအိပ်ပျော်သွားကြသည်။မနက် ခြောက်နာရီကျော်တော့မှ နိုးလာကြသည်။ နိုးလာကြတော့ လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေသည်။နှင်းမြတ်မွန်ကရေချိုးပြီးတော့
သူလဲမျက်နှာသစ်ရေချိုးလိုက်သည်။ရေချိုးပြီးတော့ နှင်းမြတ်မွန်က မနက်စာကိုပြင်ထားပေးသည်။ နှစ်ယောက်သားမနက်စာကိုစားပြီး ဘုရားသို့သွားကာ ဘုရားဖူးကြသည်။ဂျန်းရှင်းအိတ်ကိုခဏဝင်ကာ နှင်းမြတ်မွန်က လိုအပ်တာတွေဝယ်သည်။ပြီးတော့ သူ့တိုက်ခန်းကိုပြန်လာကြသည်။အခန်းထဲပြန်ရောက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက် အချိန်ရှိခိုက် လုံ့လစိုက်ကြရန်စိုင်းပြင်းကြပြန်သည်။အဝတ်တွေကိုချွတ်လိုက်ကာ နှစ်ယောက်သားပွတ်သပ်ရင်း နူးနေကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်က တော်တော့်ကို စိတ်ထန်လွယ်သည်။ ခပ်ကြာကြာပင်မနူးလိုက်ရ။အရည်တွေရွှဲနေသည်။သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို အပေါ်ကနေနေခိုင်းလိုက်ရာ နှင်းမြတ်မွန်လဲ သူ့အပေါ်ခွကာ လီးကိုကိုင်ပြီးအဖုတ်ဝမှာတေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချလိုက်သည်။အဖုတ်ထဲသို့
ဂေါ်လီတပ်ထားတဲ့လီးက တစ်ရစ်ချင်းဝင်သွားသည်။အတွင်းသားနံရံတွေက ဂေါ်လီများရဲ့ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် သာမန်ထက်ပိုပြီးနှိုးဆွနေသလိုဖြစ်နေသည်။အပေါ်ကနေ စိတ်လိုက်မာန်ပါဆောင့်ဆောင့် ချနေတဲ့နှင်းမြတ်မွန်ကို ကြည့်ရင်း သူလဲ နို့တွေကိုလက်နဲ့အုပ်ကာချေနေရင်းအောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးလိုက်သည်။ဆောင့်ချက်တွေ ကြမ်းသထက်ကြမ်းလားသည်။အဖုတ်အတွင်းထဲက ညှစ်လာသည်။သူမပြီးတော့မည်။နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ ပြီးချင်လာတာမို့ အားရပါးရဆောင့်လိုက်ရင်း ဆယ့်လေးငါးချက်လောက်ဆောင့်ရင်း ကော့တက်သွားကာ အဖုတ်ထဲက အရမ်းကို ညှစ်သွားသည်။ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် ညှစ်နေလေသည်။သက်ပြင်းရှည်ကြီးချကာ သူ့အပေါ်ကို မှောက်ချလိုက်ရင်း
”အရမ်းကောင်းတာပဲ ကိုပိုင်ရယ်။ကိုပိုင်ရဲ့ဂေါ်လီတပ်ထားတဲ့ လီးကြီးကိုအရမ်းစွဲသွားပြီကွာ။ အရမ်းကောင်းတယ်”ပြောရင်း သူ့နှုတ်ခမ်းကို အငမ်းမရစုပ်နမ်းနေသည်။သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို ဖက်ကာနမ်းလိုက်ပြီး တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ညှစ်လိုက်ခပ်ဆက်ဆက်ရိုက်လိုက်လုပ်နေသည်။အတော်လေးကြာတော့မှ
နှင်းမြတ်မွန်နဲ့လုပ်ရတာတခုတော့ကောင်းသည်။ပွင့်လင်းသည်။အပေးအယူမျှသည်လို့ပြောရမည်။သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို doggyနေခိုင်းလိုက်ပြီး နောက်ကနေ အဖုတ်ထဲထည့်ကာ ဆောင့်လိုက်သည်။လုံးဝန်းတဲ့တင် သေးကျဉ်တဲ့ခါးကို ကြည့်ရင်း ဆောင့်ရတာမို့ သူသဘောကျသည်။သူလဲ အားမနာတော့ပဲ ဆောင့်နေလိုက်သည်။ နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ ပျော့စင်းနေတဲ့ ဆံပင်တွေက ဝဲခါနေသလို တင်ပါးတွေက ဆောင့်ချက်တွေနဲ့အတူ လှိုင်းထသလို တုန်တုန်တက်သွားတာကို ကြည့်ရင်း သူလဲ စိတ်ပိုထန်လာကာ ခါးကိုကိုင်ရင်း အသားကုန်ဆောင့်လိုက်သည်။ နှင်းမြတ်မွန်လဲ နောက်တကြိမ်ပြီးဖို့နီးလာသည်။
”ကိုပိုင် ဆောင့်ဆောင့် မြတ်မွန် ပြီးချင်လာပြန်ပြီ။အာ အာ ဟ ဟ ”
”ဗျွတ် ဗျွတ် ဖတ်ဖတ် ဘွတ်ဘွတ်”အသံတွေနဲ့အတူ ဆောင့်ချက်တွေက ကြမ်းသထက်ကြမ်းလာသည်။ ဆောင့်ချက်လေးဆယ်ကျော်ရောက်လာတော့ သူလဲ ပြီးချင်လာပြီ။ဒါကြောင့် သူလဲ ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်ရာ နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ အာ့ဟားဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ သူ့ရဲ့သုတ်ရည်တွေက အဖုတ်ထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်သလို နှင်းမြတ်မွန်လဲ ပြီးသွားသည်။နှစ်ယောက်သား ခဏအနားယူလိုက်ပြီး နှင်းမြတ်မွန်က ရေချိုးခန်းထဲသို့ဝင်သွားတော့ သူလဲ လိုက်ဝင်သွားကာ သူ့လီးကိုဆေးခိုင်းလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ သူ့ကိုဆေးပေးနေရင်း ဆွနေပြန်ရာ ပြန်ထလာတာမို့ သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို လွေခိုင်းလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ ကောင်းကောင်းကိုလွေပေးလိုက်သည်။ နှစ်ယောက်သားရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာကြပြီး အဝတ်တွေဝတ်ကာ နှင်းမြတ်မွန် နေ့လည်စာအတွက် ပြင်နေသည်။သူလဲ ဘေးကနေ ဝိုင်းလုပ်ပေးရင်း ပိုးပိုးကို သတိရလိုက်မိသည်။သူ တည်ငြိမ်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို တဒင်္ဂအတွင်း လိုချင်မိသွားသည်။ဒါပေမယ့် လကိတွေ့ဘဝမှာဒီလိုသာယာနိုင်ပါ့မလား။နှစ်ယောက်သား စကားထိုင်ပြောနေရင်း တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုတယောက်မေးကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကိုပြောသည်။ပိုးပိုးကို မကြိုက်ဘူးလားလို့။သူကလဲ ချစ်သူရှိနေတာကြီးကိုလို့ပြောတော့ ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လေ။ဒါပေမယ့် ပိုးပိုးက သူ့ကိုကြိုက်နေတာလို့ပြောသည်။သူနဲ့ပိုးပိုးရဲ့အကြောင်းကိုမသိသေးဘူးထင်သည်။သူလဲ ဘာမှတော့မပြောတော့ပေ။နေ့လည်စာကို နှစ်ယောက်သား စားပြီး ခဏနားကာ နောက်တချီဆွဲကြပြန်သည်။ ဒီတခါတော့ နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကို နောက်ပေါက်ကိုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုသည်။သူလဲ နောက်ပေါက်ကို ကြိုက်တာမို့ အကြိုက်ပင်။နှင်းမြတ်မွန်က ပုလွေတော့ အတော့ကို ကျွမ်းသည်။ဒါကြောင့် သူဘဲက သူ့ကို စွဲနေတာနေမည်။ သူမကိုအတော်အလိုလိုက်ကာ သူမသဘောဟုပြောသည်။သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ဖင်ကို စိတ်ကြိုက်ဆွဲပစ်လိုက်သည်။ နှင်းမြတ်မွန်လဲ အီစိမ့်နေအောင် ကောင်းလွန်းသည်လို့ပြောသည်။ညကျမလုပ်နိုင်မှာစိုးတာမို့ အိပ်ရေးဝအောင်လုပ်မှ ဖြစ်မည်ဆိုပြီး နှင်းမြတ်မွန်က အိပ်တော့သည်။သူလဲ အိပ်လိုက်သည်။ညနေနိုးလာတော့ တချီဆွဲကြပြန်သည်။
ပြီးတော့ ရေချိုး အဝတ်လဲကာ အပြင်ကိုထွက်ပြီး ညနေစာစားပြီး ပြန်လာကြသည်။ပြန်ရောက်တော့ အားဆေးသောက်ကာ ထပ်လုပ်ကြသည်။ညသုံးနာရီလောက်ထိပင်။နောက်ပေါက်ကို လုပ်ဖြစ်တာများသည်။ရှေ့ကို နှစ်ချီလောက်သာလုပ်ဖြစ်သည်။သုံးနာရီကျော်မှအိပ်ကြသည်။မနက်ကျကိုးနာရီကျော်မှနိုးကြသည်။ နှင်းမြတ်မွန်ကတော့ သူ့ကိုအရမ်းကို စွဲနေသည်။အားရင်းအားသလိုတွေ့ချင်မိတယ်လို့ပြောသည်။သူလဲ ပြသာနာမဖြစ်ရင်ပြီးရောလို့ပြောတော့ နှင်းမြတ်မွန်က အဲ့လောက်ကတော့ အေးဆေးပါလို့ပြောသည်။ နှင်းမြတ်မွန်ကညနေ သုံးနာရီကားနဲ့နေပြည်တော်ကို ပြန်မည်မို့ မပြန်ခင်ကို အချိန်ရှိတုန်းလုပ်ကြသည်။ ညနေကားဂိတ်လိုက်ပို့ရင်းနဲ့မှ မနက်စာနဲ့ နေ့လည်စာပေါင်းစားလိုက်ကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်ကားထွက်သွားတော့မှ သူလဲ ပြန်လာသည်။ပြန်ရောက်တော့ သူလဲ အနားယူလိုက်သည်။ညကျတော့ နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ဆီဖုန်းဆက်သည်။ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ထပ်ပြီးတွေ့ချင်တဲ့အကြောင်းပင်။သူလဲ
တွေ့ကြတာပေါ့ဆိုပြီးပြောလိုက်သည်။အတော်လေးကြာကြာဖုန်းပြောပြီးဖုန်းချသွားတော့ တအောင့်ကြာ ပိုးပိုးဆီက ဖုန်းဝင်လာသည်။အိုကေရဲ့လားလို့မေးသည်။သူလဲ အိုကေပါတယ်လို့ပြောတော့ ပိုးပိုးကရီနေသည်။သူကလဲ သဝန်မတိုဘူးလားလို့မေးရာ မတိုပါဘူး။သူတို့ကိုနားလည်လို့ဟုပြောသည်။သူတို့နှစ်ယောက်ဖုန်းချကာ လိုင်းပေါ်မှာ စကားပြောဖြစ်ကြသည်။
နောက်ရက်မနက် သူသင်တန်းသွားတော့ ပိုးပိုးရည်းစားနဲ့တွေ့သည်။ဆိုင်ထိုင်ရင်းစကားပြောဖြစ်ကြသည်။ ဘယ်တော့ယူမလဲမေးတော့ သူကရီနေသည်။အေးဆေးပေါ့ကိုပိုင်ရာ အချိန်ရှိပါသေးတယ်ဟုပြောလို့ သူကလဲ အချိန်မရမ်းကြီးတော့ဆွဲတာမသင့်တော်ကြောင်းနဲ့ အချိန်ကြာလာရင် မိန်းကလေးဖက်က နစ်နာနိုင်တယ်လို့ပြောတော့ သူက ခေါင်းသါငြိမ့်ပြီးအဖြေတော့မပေးပေ။
အေးမိစံလဲ မိခင်သက်သာလာတာမို့ပြန်လာသည်။သူတို့လဲ ယူတော့မယ်လို့ပြောသည်။ ဒါလဲကောင်းတာပေါ့လို့ပြောတော့ အေးမိစံက မယူခင် အားရအောင်တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောတော့ သူခေါင်းတောင်ကြီးသွားသည်။သူနေပြည်တော်ကို သွားလိုက် နှင်းမြတ်မွန်နဲ့တွေ့လိုက် ရနိကုန်မှာအေးမိစံနဲ့တွေ့လိုက်နဲ့လုပ်နေသည်။ပိုးပိုးနဲ့တော့အခွင့်အရေးမသာတာနဲ့မတွေ့ဖြစ်။ သူအရမ်းလဲတွေ့ချင်သလို ပိုးပိုးကလဲ တွေ့ချင်နေသည်။
ဒီလိုနဲ့ သူလဲ စာမေးပွဲဖြေမယ့်ရက်ရောက်လာသည်။ကောင်းမွန်အဆင်ပြေစွာဖြေနိုင်တာမို့ နောက်ဆုံးလူတွေ့ကိုပါဝင်မယ်လို့သူ မျှော်လင့်မိသည်။သူမှန်းသလိုပဲ လူတွေ့ထိသူပါသည်။လူတွေ့စစ်တော့လဲ သူအိုကေသည်။အဖြေကိုနှစ်ပတ်နေရင် အားလုံးကို ပြန်ကြားမယ်လို့ပြောတာမို့ သူလဲ နေပြည်တော်ကို ပြန်ရပေမည်။ပြန်ခါနီးတွင် အေးမိစံနဲ့နှစ်ကြိမ်ခေါက်တွေ့ဖြစ်သည်။အေးမိစံလဲ နောက်ပေါက်ကို အတော်ကြိုက်နေသလို ကောင်းစွာခံတက်နေပြီ။သူ ပြန်ခါနီးတော့ အေးမိစံတို့အတွဲနဲ့
ပိုးပိုးတို့အတွဲဆုံကာနှုတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်ဖြစ်သည်။အေးမိစံတိုက နှစ်ကုန်ရင် ယူကြမယ်လို့ပြောသည်။ သူပညာတော်သင်ပါရင်တော့ မမှီတော့ပေ။ဒါကြောင့် သူသွားခါနီးရင် လက်ဖွဲ့ကြီးကြီးပေးမယ်လို့စသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သိမ်းစရာတွေထည့်စရာတွေသူ ထည့်နေလိုက်သည်။ရင်ထဲမှာတော့ ဟာတာတာနှင့်ပင်။ ဖုန်းလာတော့ ကြည့်လိုက်ရာ ပိုးပိုး။အရမ်းတွေ့ချင်တယ်လို့ပြောတော် သူလဲတွေ့ချင်တာပဲလို့်ပြောသည်။ ခဏဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါလားလို့ပိုးပိုးက ပြောတော့အဆင်ပြေပါ့မလားမေးရာ ပြေပါတယ်လို့ပြောသည်။သူလဲ ကားယူကာပိုးပိုးတို့တိုက်ခန်းနားသွားလိုက်သည်။ပိုးပိုးက ထွက်လာပြီးချောင်ကျပြီးမှောင်ရိပ်နားမကိုခေါ်ကာ သူ့ကိုတင်းကြပ်စွာဖက်ရင်း ငိုသည်။ခွဲရဦးမယ်ဆိုပြီး။
”ကိုကြီးနဲ့ တွေခြင်မိပေမယ့် အခွင့်အရေးကမရဘူး။ကိုကြီးရဲ့ ယုယမှုကိုလိုချင်မိတယ်။ပိုး ရူးချင်တာပဲကိုကြီးရယ်”
လာတွေ့မယ်နော်”နှစ်ယောက်သားစကားအတော်ကြာပြောပြီး သူလဲ ပြန်လာလိုက်သည်။နောက်ရက်မနက်ကျ သူလဲ နေပြည်တော်ကို ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။နေ့လည်ကို ရောက်တော့ ရုံးကို တခါတည်းဝင်ကာ လူကြီးဆီသတင်းဝင်ပို့လိုက်သည်။အခြေအနေမေးတော့ သူလဲ ပြောပြလိုက်သည်။လူကြီးက သူ့ကို ပါသွားရင် အထူးကြိုးစားဖို့မှာပြီး သူ့ကို ပြန်နားခိုင်းလိုက်သည်။သူလဲ သူ့ဆရာဆီ ဝင်ကာ သတင်းပို့တော့ဆရာက သူ့အခြေအနေကို မေးကာ သဘောကျနေသည်။သူလဲ အတော်ကြာစကားပြောပြီး
အဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။အဆောင်ရောက်တော့ သူပိုးပိုးဆီဖုန်းဆက်ကာ ပြန်ရောက်ပြီလို့ပြောတော့ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့မှာသည်။သူလဲဖုန်းပြောပြီးအနားယူလိုက်သည်။
စနေရုံးပိတ်ရက်ကျ သူနှင်းမြတ်မွန်နဲ့ချိန်းကာ ဟိုတယ်မှာတွေ့ဖြစ်ကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်က သူ့အတွက်အမြဲတမ်းရယ်ဒီပင်။
ဒီလိုနဲ့တရက်မှာလူကြီးက သူ့ကိုလာတွေ့ဖို့ခေါ်တာမို့ သူလဲ သွားတွေ့တော့ ဝမ်းသာတဲ့မျက်နှာနဲ့ သူ့ကို ကြိုသည်။ ပြီးတော့ သူ့ကို လက်ဆွဲနှုတိဆက်ကာ
”ကောင်လေး မင်းရွေးခံရတယ်ဟေ့။ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးမှာ မင်းတယောက်တည်းပဲပါတာတဲ့။ဝန်ကြီးက ဂုဏ်ယူနေတယ်။မင်းကိုတွေ့ချင်တယ်တဲ့။မှာစရာရှိတာတွေမှာမလို့ထင်တယ်”
သူလဲဝမ်းသာသွားသည်။ဝန်ကြီးတွေ့မယ့်အချိန်ကို ဖုန်းဆက်မယ်လို့ပြောပြီးပြန်လွှတ်တာမို့ သူလဲ ပြန်လာကာ ဆရာ့ကိုပြောပြတော့ ဆရာလဲ ဝန်းသာသွားသည်။အခန်းထဲက အလုပ်ဖော်တွေက မုန့်ကျွေးခိုင်းတာနဲ့ သူလဲ ဝယ်ကျွေးမယ်ပြောပြီး ပိုက်ဆံထုတ်ပေးလိုက်သည်။လူကြီးက သူ့ကို ဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဖို့ခေါ်တာမို့ သွားတွေ့လိုက်သည်။ဝန်ကြီးက သူ့ကို အကြောင်းကြားစာပေးရင်း ချီးကျူးစကားပြောသည်။ ဟိုမှာဆောင်ရန်ရှောင်ရန်မှာသည်။နိုင်ငံသိက္ခာမကျစေဖို့နဲ့ ဌာနဂုဏ်ကို မြှင့်တင်ဖို့အထူးမှာကြားကာ သွားခါနီးရင် လာတွေ့ဖို့မှာသည်။သူလဲ ပြန်လာတော့ ပိုးပိုးဆီကိုဖုန်းဆက်ကာ ပြောပြသည်။ပိုးပိုးလဲ ဝမ်းသာနေသည်။ နောက်ရက်တွေမှာ သူလဲ ဆေးစစ် ပတ်စပို့ကိစ္စ ဗီဇာကိစ္စတွေနဲ့ ရှုပ်နေတာမို့မအားတော့။ အားလုံးကိစ္စပြီးပြတ်သွားတော့ ဝန်ကြီးဆီသတင်းပို့ လူကြီးဆီသတင်းပို့ကာ သူရန်ကုန်ကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်သည်။ သူရန်ကုန်ရောက်တော့ ပိုးပိုး ကတွေ့ချင်တယ်လို့ပြောသည်။သူ့ရည်းစားနိုင်ငံခြားသွားတာနှစ်ပတ်နီးပါးရှိပြီတဲ့။ သူလဲ အရမ်းတွေ့ချင်တာမို့ တွေ့မယ်လေဆိုပြီးပြောလိုက်သည်။ပိုးပိုးလဲ ညနေကျ သူ့ကို လာခေါ်ခိုင်းတာမို့သူလဲ သွားခေါ်လိုက်သည်။အင်္ကျိပန်းရောင်အကြပ်လေးပေါ်မှာကုတ်အနက်အသေးလေးထပ်ဝတ်ထားပြီး ဂါဝန်အတိုပန်းရောင်လေးနဲ့ ရှုးအနီလေးစီးကာ အိတိအကြီးတစ်လုံးကိုလွယ်လာရင်းလမ်းလျှောက်တိုင်း ဝဲနေတဲ့ ကျောလယ်လောက်ဆံပင် နီညိုရောင်လေးနဲ့ ပိုးပိုးရဲ့ပုံစံလေးက သူ့ကိုရူးသွပ်သွားစေငည်။ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့လှပတဲ့မျက်နှာလေးကိုသူငေးကြည့်ရင်း ပိုင်ဆိုင်ချင်မိပေမယ့် ထိန်းရပြနိသည်။ သူ့ကားပေါ်တက်လာပြီး ဘာမှမစားရသေးဘူးလို့ပြောတာမို့နှစ်ယောက်သား ဆိုင်းကောင်းကောင်းတဆိုင်ရွေးကား ညနေစာ စားလိုက်သည်။
”သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လျှောက်လည်မှာလို့ပြောထားတယ်။ရုံးကခွင့်နှစ်ရက်ယူထားတယ်” ”ကောင်းရောကွာ”
”ဘာလဲ မကြိုက်ဘူးလား ဟင့် ဒီမှာတော့ သူ့ကို သနားလို့ တွေ့စေချင်လို့ ခွင့်တောင်ယူထားတာကို အာ့ဆိုပြန်လိုက်ရမှလား”
”အော် ခွင့်တောင်ယူပြီးမှတော့ အလကားဖြစ်မယ့်အတူတူ ကိုကြီးကပဲ အနစ်နာခံလိုက်ပါ့မယ်ကွာ”
”သွားလူလည်ကြီး”နှစ်ယောက်သားကြည်နူးစွာရီလိုက်ကြသည်။ဆိုင်ထဲက ကောင်လေးတချို့တွေက ပိုးပိုးကို သဘောကျသည့်ပုံနဲ့ လှမ်းကာကြည့်နေတာတွေ့တော့ သူစိတ်တိုမိသည်။သဝန်တိုမိနေသည်။ပိုးပိုးကိုပြောပြတော့ ရီရင်း ဘာဖြစ်လဲ ကြည့်ပါစေပေါ့။လှတဲ့သူကကြည့်ခံရမှာပဲ။ရုပ်ဆိုးတဲ့သူကျ သူ့မကြည့်လို့ စိတ်တိုနေတယ်ဟုပြောပြီးစသည်။စားသောက်ပြီးတာနဲ့ သူတို့လဲ သူ့တိုက်ခန်းရှိရာကို လာလိုက်ကြသည်။ တိုက်ခန်းရောက်တော့ သူလဲ ပိုးပိုးကို ဖက်ထားလိုက်သည်။ပိုးပိုးကလဲ သူ့ကို ဖက်ထားရင်း သွားတဲ့အခါအရမ်းလွမ်းနေမှာလို့ပြောသည်။သူတို့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက ချစ်ခြင်းတွေပြည့်နေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ကြည့်ရင်း ပိုးပိုးရဲ့ နှုတ်ခမ်းလှလှလေးကိုအသာလေးစုပ်နမ်းလိုက်သည်။ ပိုးပိုးကလဲ မျက်လုံးလေးမှေးစင်းသွားရင်း သူ့ကိုတင်းကြပ်စွာဖက်ထားလိုက်ပြီးအလိုက်သင့်ပြန်နမ်းလိုက်သည်။ နှစ်ယောက်သားအနမ်းတွေရှည်ကြာသွားပြီးနောက် သူလဲပိုးပိုးကို ကုတင်ပေါ်သို့ အသာလှဲလိုက်ကာ အပေါ်အင်္ကျီလေးကိုချွတ်လိုက်တော့ ဘရာ အသားရောင်လေးပေါ်လာသည်။ဘရာကိုချိတ်ဖြုတ်ကာ ချွတ်လိုက်တော့ နိုလုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးပေါ်လာသည်။အကိုင်အတွယ်ခံရဖူးပေမယ့် စနစ်တကျထိနိးသိမ်းကာ ဆေးသုံးသည်ထင်သည်။တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့နို့သီခေါင်းလေးတွေက မဲမနေ ပန်ရောင်ပင်သန်းနေသည်။သူလဲ နို့အုံလေးကို အသာစို့လိုက်ရင်း ကျန်တစ်ဖက်ကို ကိုင်ကာပွတ်ပေးလိုက်သည်။
ပိုးပိုးရဲ့အပြောက သူ့နားထဲမှာ ပျားရည်မြစ်စီးသွားသလို။နို့တွေကိုစို့ပြီးတော့ဘဂါဝန်ကို ချွတ်လိုက်တော့ ပင်တီအသားရောင်သာကျန်တော့သည်။ပင်တီကိုအသာလိပ်ကာချွတ်လိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ဖက်ကို အသာမကာ ပိုးပိုးရဲ့ အဖုတ်နဲ့အစေ့ကို အသာနမ်းလိုက်ပြီး အစေ့ကို နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုနဲ့ညှပ်ကာ လျှာနဲ့ကလိလိုက်တော့
”အာ့ဟ ဟ ကိုကြီးရယ် ဘယ်လိုကြီးလဲ အဟင်ဟင့်”
အေးမိစံလဲ သူ့အမေ ဆေးရုံတက်ရလို့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေက ပြန်သွားသည်။သူပဲ ကားဂိတ်ကို လိုက်ပို့လိုက်ရသည်။ ပိုးပိုးက ညဖက်တွေမှာ သူ့ဆီဖုန်းဆက်ရင်း ချွဲတက်သည်။သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့နဲ့ သတိရနေတဲ့အကြောင်းပြောသည်။ သူလဲ ပိုးပိုးကို သတိရတာတော့အမှန်ပင်။သူမကို ဖြူစင်စွာချစ်ချင်သည်။ဖြစ်နိုင်ရင် ပိုင်ဆိုင်ချင်မိလာသည်။ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပေမယ့် စိတ်ကူးတော့ယဉ်မိတာအမှန်။တကယ်လို့သာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် သူမအရင်က ဘာဖြစ်ဖြစ်သူ ကြည်ဖြူနိုင်သည်။သူလဲ ဖြူစင်တဲ့သူမှမဟုတ်တာ။ချစ်သူရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သူလဲ ကွယ်ရာမှာ လုပ်ခဲ့တာပဲ။ဒါပေမယ့် ပိုးပိုးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကဲ့ရဲ့မှာကိုမလိုလား။သူတကယ်ချစ်မိနေပြီလားမသိ။သူမတွေးချင်။ မတွေးပဲနေလေ ပိုတွေးမိလေလားမသိ။သူမနေနိုင်တဲ့အဆုံး သင်တန်းချိန်ဖျက်ကာ
ပိုးပိုးဆီဖုန်းဆက်ပြီးခဏတွေ့လို့ရမလားမေးတော့ လာခဲ့မယ်လို့ပြောတာနဲ့ သူတို့ ဆိုင်တဆိုင်မှာတွေ့ကြသည်။
သူလဲ ရင်ထဲမှာရှိတာတွေကိုအကုန်ဖွင့်ပြောတော့ ပိုးပိုးကလဲ သူ့ကို အရမ်းချစ်နေမိပြီလို့ပြောသည်။ သေချာတာတခုက သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်တာလိင်ကိစ္စကြောင့်တော့မဟုတ်တာအမှန်ပင်။
”ဒါတွေကို မလိုအပ်ဘူးလေ။ကိုကြီးလဲ ပိုး ထင်သလောက် မဖြူစင်ပါဘူး။ပိုးဖက်ကနေ
အရာရာလွတ်လပ်သွားတဲ့တနေ့ ပိုးရဲ့ဘေးမှာ ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကင်းသွားတဲ့တနေ့ ကိုကြီးဆီကိုလာခဲ့ပါ။ဒါပေမယ့် အပြစ်မဲ့တဲ့သူကိုတော့ ချန်ထားပြီးမှတော့ မလာပါနဲ့။သူက အရင်တုန်းကရော အခုရော နောင်ရော ပိုးရဲ့ အချစ်ဦး အချစ်ဆုံးပဲဆိုတာ ပိုးအမြဲသတိရပါ။အပြစ်မဲ့သူကို အပြစ်ရှာထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုကြီးပိုးကို အထင်သေးမိလိမ့်မယ်”
နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့နောက်ပိုင်းအလှကို ကြည့်ရင်းသဘောကျနေတာတွေ့တော့ သူဟက်ခနဲတချက်ရီလိုက်ရင်း နှင်းမြတ်မွန်အနားကိုသွားကာ ခေါ်လိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ သူ့ကို တွေ့တော့ ဝမ်းသာသွားဟန်နဲ့ သူခေါ်တဲ့နောက်ကို လိုက်လာခဲ့လိုက်သည်။ကားနောက်ခန်းဖွက့်ကာ အိတ်ကို ထားပြီး နှစ်ယောက်သားကားဂိတ်က ထွက်လာခဲ့ကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်ကို ဘာစားချင်သေးလဲ မေးတော့ မစားချင်ဟုပြောသည်။သူလဲ
အိမ်မှာလိုအပ်တာတွေဝယ်ထားတာမို့ ဘာမှမဝယ်တော့ပဲ ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။
နှင်းမြတ်မွန်လဲ ဖင်ကို ခံကြည့်ဖူးချင်သည်။ကိုပိုင်ဆွတာကြောင့်ရော ပွန်းဆိုက်တွေမှာကြည့်ဖူးတာတွေကြောင့် ဘယ်လိုဆိုတာ ခံကြည့်ချင်ပေမယိ့ သူ့ဘဲက ယောင်လို့တောင်မှမထိ။ကိုပိုင်က လုပ်ချင်တယ်ပြောတော့ သူနည်းနည်းကြောက်တာလဲ ပါတာမို့ ငြင်းတော့ ကိုပိုင်က ဇွတ်မလုပ်။ဒီကိုလာမယ်ပြောတော့ကိုပိုင်က ဖင်ချမှာလို့ပြောတာနဲ့ သူလဲ လေ့လာကြည့်မိသည်။ဘယ်လို ဆိုတာတော့လက်တွေ့ခံဖူးမှသိမည်ပင်။သူလဲ ကုန်းကာ ဖင်ကိုစွင့်ကာ ခါးကိုကော့ပေးထားလိုက်သည်။ကိုပိုင်က ဖင်ကိုတဖျန်းဖျန်းနဲ့ရိုက်နေတော့ သူစပ်လဲ စပ် ကောင်းလဲကောင်းသလို။သူ နာနာကျင်ကျင်အရသာကို ကြိုက်သည်။ဒါကြောင့်တင်ပါးရိုက်ခံရင်းနဲ့ စိတ်တွေက ပါလာရပြန်သည်။အဖုတ်ထဲက စစ်ခနဲဖြစ်လာရသည်။ကိုပိုင်လဲ ဂျယ်လ်ဘူးယူကာ သူမဖင်ဝကို သုတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ကွန်ဒုံးတစ်ခုယူကာ သူ့လီးမှာစွပ်ရင်း ဂျယ်လ်ကိုသုတ်လိုက်သည်။ပြီးတော့ သူ့ကိုဖင်ဖြဲခိုင်းလိုက်တော့ သူလဲ ဖင်နှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ ဖြဲကာ ဖင်ဝကို ဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ကိုပိုင့်လီးကြီးက ဖင်ဝကိုလာထောက်တော့ သူ့ရင်ထဲ ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားကာ ရင်ခုန်မိသွားသည်။လီးကြီးကဖင်ဝကိုခွဲကာ တဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးဝင်လာသည်။ နှိုးဆွမှုကြောင့်ရော အရည်တွေရွှဲနေတာကြောင့်လားမသိ ထင်သလောက်မနာ။သူခံနိုင်သည်။ကိုပိုင်က ခဏရပ်ကာ သူမအစေ့ကိုချေလိုက်သည်။သူမလဲ အဟင့်ဟင့်နဲ့ဖြစ်သွားပြီး အဖုတ်ထဲက အရည်စိမ့်ကျလာသည်။ပြီးတော့
တဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်လိုက်ရာ ဖင်ဝကိူဖုထစ်ထစ်ဂေါ်လီးကချိတ်ကာအထဲကို ခေါ်သွားသည်။ သူမအသည်းခိုက်သွားရသည်။နာကျင်ပေမယ့်ကြိုက်သွားသည်။ဂေါ်လီတွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူမဖင်ထဲကို တစ်လုံးချင်းတိုးဝင်နေသည်။ကြီးမားတဲ့ လီးနဲ့ဂေါ်လီတွေက သူမရဲစအိုကြွက်သားတွေကို ပွတ်တိုက်နှိုးဆွနေသည်။ သူမရဲ့စအိုကြွက်သားတွေက ထိုအရာတွေကို ဖျစ်ညှစ်နေပြီး လက်သင့်ခံနေသည်လားမသိ။နာကျင်ပေမယ့် ကောင်းနေသည်။အဲ့အရသာကိူ နှစ်သက်သွားသလိုအဖုတ်ထဲမှလဲ အရည်တွေက တစိမ့်စိမ့်ကျနေသည်။သူမလဲ ဖင်နှစ်ဖက်ကိုဖြဲရင်း
သူလဲမျက်နှာသစ်ရေချိုးလိုက်သည်။ရေချိုးပြီးတော့ နှင်းမြတ်မွန်က မနက်စာကိုပြင်ထားပေးသည်။ နှစ်ယောက်သားမနက်စာကိုစားပြီး ဘုရားသို့သွားကာ ဘုရားဖူးကြသည်။ဂျန်းရှင်းအိတ်ကိုခဏဝင်ကာ နှင်းမြတ်မွန်က လိုအပ်တာတွေဝယ်သည်။ပြီးတော့ သူ့တိုက်ခန်းကိုပြန်လာကြသည်။အခန်းထဲပြန်ရောက်တော့ သူတို့နှစ်ယောက် အချိန်ရှိခိုက် လုံ့လစိုက်ကြရန်စိုင်းပြင်းကြပြန်သည်။အဝတ်တွေကိုချွတ်လိုက်ကာ နှစ်ယောက်သားပွတ်သပ်ရင်း နူးနေကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်က တော်တော့်ကို စိတ်ထန်လွယ်သည်။ ခပ်ကြာကြာပင်မနူးလိုက်ရ။အရည်တွေရွှဲနေသည်။သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို အပေါ်ကနေနေခိုင်းလိုက်ရာ နှင်းမြတ်မွန်လဲ သူ့အပေါ်ခွကာ လီးကိုကိုင်ပြီးအဖုတ်ဝမှာတေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချလိုက်သည်။အဖုတ်ထဲသို့ ဂေါ်လီတပ်ထားတဲ့လီးက တစ်ရစ်ချင်းဝင်သွားသည်။အတွင်းသားနံရံတွေက ဂေါ်လီများရဲ့ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် သာမန်ထက်ပိုပြီးနှိုးဆွနေသလိုဖြစ်နေသည်။အပေါ်ကနေ စိတ်လိုက်မာန်ပါဆောင့်ဆောင့် ချနေတဲ့နှင်းမြတ်မွန်ကို
ကြည့်ရင်း သူလဲ နို့တွေကိုလက်နဲ့အုပ်ကာချေနေရင်းအောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးလိုက်သည်။ဆောင့်ချက်တွေ ကြမ်းသထက်ကြမ်းလားသည်။အဖုတ်အတွင်းထဲက ညှစ်လာသည်။သူမပြီးတော့မည်။နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ ပြီးချင်လာတာမို့ အားရပါးရဆောင့်လိုက်ရင်း ဆယ့်လေးငါးချက်လောက်ဆောင့်ရင်း ကော့တက်သွားကာ အဖုတ်ထဲက အရမ်းကို ညှစ်သွားသည်။ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် ညှစ်နေလေသည်။သက်ပြင်းရှည်ကြီးချကာ သူ့အပေါ်ကို မှောက်ချလိုက်ရင်း
”ဗျွတ် ဗျွတ် ဖတ်ဖတ် ဘွတ်ဘွတ်”အသံတွေနဲ့အတူ ဆောင့်ချက်တွေက ကြမ်းသထက်ကြမ်းလာသည်။ ဆောင့်ချက်လေးဆယ်ကျော်ရောက်လာတော့ သူလဲ ပြီးချင်လာပြီ။ဒါကြောင့် သူလဲ ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်ရာ နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ အာ့ဟားဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ သူ့ရဲ့သုတ်ရည်တွေက အဖုတ်ထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်သလို နှင်းမြတ်မွန်လဲ ပြီးသွားသည်။နှစ်ယောက်သား ခဏအနားယူလိုက်ပြီး နှင်းမြတ်မွန်က ရေချိုးခန်းထဲသို့ဝင်သွားတော့ သူလဲ လိုက်ဝင်သွားကာ သူ့လီးကိုဆေးခိုင်းလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ သူ့ကိုဆေးပေးနေရင်း ဆွနေပြန်ရာ ပြန်ထလာတာမို့ သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို လွေခိုင်းလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်လဲ ကောင်းကောင်းကိုလွေပေးလိုက်သည်။ နှစ်ယောက်သားရေချိုးခန်းထဲကထွက်လာကြပြီး အဝတ်တွေဝတ်ကာ နှင်းမြတ်မွန် နေ့လည်စာအတွက် ပြင်နေသည်။သူလဲ ဘေးကနေ ဝိုင်းလုပ်ပေးရင်း ပိုးပိုးကို သတိရလိုက်မိသည်။သူ တည်ငြိမ်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို တဒင်္ဂအတွင်း လိုချင်မိသွားသည်။ဒါပေမယ့် လကိတွေ့ဘဝမှာဒီလိုသာယာနိုင်ပါ့မလား။နှစ်ယောက်သား စကားထိုင်ပြောနေရင်း တစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကိုတယောက်မေးကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကိုပြောသည်။ပိုးပိုးကို မကြိုက်ဘူးလားလို့။သူကလဲ ချစ်သူရှိနေတာကြီးကိုလို့ပြောတော့ ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လေ။ဒါပေမယ့် ပိုးပိုးက သူ့ကိုကြိုက်နေတာလို့ပြောသည်။သူနဲ့ပိုးပိုးရဲ့အကြောင်းကိုမသိသေးဘူးထင်သည်။သူလဲ ဘာမှတော့မပြောတော့ပေ။နေ့လည်စာကို နှစ်ယောက်သား စားပြီး ခဏနားကာ နောက်တချီဆွဲကြပြန်သည်။ ဒီတခါတော့ နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ကို နောက်ပေါက်ကိုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုသည်။သူလဲ နောက်ပေါက်ကို ကြိုက်တာမို့ အကြိုက်ပင်။နှင်းမြတ်မွန်က ပုလွေတော့ အတော့ကို ကျွမ်းသည်။ဒါကြောင့် သူဘဲက သူ့ကို စွဲနေတာနေမည်။ သူမကိုအတော်အလိုလိုက်ကာ သူမသဘောဟုပြောသည်။သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ရဲ့ဖင်ကို စိတ်ကြိုက်ဆွဲပစ်လိုက်သည်။ နှင်းမြတ်မွန်လဲ အီစိမ့်နေအောင် ကောင်းလွန်းသည်လို့ပြောသည်။ညကျမလုပ်နိုင်မှာစိုးတာမို့ အိပ်ရေးဝအောင်လုပ်မှ ဖြစ်မည်ဆိုပြီး နှင်းမြတ်မွန်က အိပ်တော့သည်။သူလဲ အိပ်လိုက်သည်။ညနေနိုးလာတော့ တချီဆွဲကြပြန်သည်။ ပြီးတော့ ရေချိုး အဝတ်လဲကာ အပြင်ကိုထွက်ပြီး ညနေစာစားပြီး ပြန်လာကြသည်။ပြန်ရောက်တော့ အားဆေးသောက်ကာ ထပ်လုပ်ကြသည်။ညသုံးနာရီလောက်ထိပင်။နောက်ပေါက်ကို လုပ်ဖြစ်တာများသည်။ရှေ့ကို
နှစ်ချီလောက်သာလုပ်ဖြစ်သည်။သုံးနာရီကျော်မှအိပ်ကြသည်။မနက်ကျကိုးနာရီကျော်မှနိုးကြသည်။ နှင်းမြတ်မွန်ကတော့ သူ့ကိုအရမ်းကို စွဲနေသည်။အားရင်းအားသလိုတွေ့ချင်မိတယ်လို့ပြောသည်။သူလဲ ပြသာနာမဖြစ်ရင်ပြီးရောလို့ပြောတော့ နှင်းမြတ်မွန်က အဲ့လောက်ကတော့ အေးဆေးပါလို့ပြောသည်။ နှင်းမြတ်မွန်ကညနေ သုံးနာရီကားနဲ့နေပြည်တော်ကို ပြန်မည်မို့ မပြန်ခင်ကို အချိန်ရှိတုန်းလုပ်ကြသည်။ ညနေကားဂိတ်လိုက်ပို့ရင်းနဲ့မှ မနက်စာနဲ့ နေ့လည်စာပေါင်းစားလိုက်ကြသည်။နှင်းမြတ်မွန်ကားထွက်သွားတော့မှ သူလဲ ပြန်လာသည်။ပြန်ရောက်တော့ သူလဲ အနားယူလိုက်သည်။ညကျတော့ နှင်းမြတ်မွန်က သူ့ဆီဖုန်းဆက်သည်။ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ထပ်ပြီးတွေ့ချင်တဲ့အကြောင်းပင်။သူလဲ
လာတွေ့မယ်နော်”နှစ်ယောက်သားစကားအတော်ကြာပြောပြီး သူလဲ ပြန်လာလိုက်သည်။နောက်ရက်မနက်ကျ
သူလဲ နေပြည်တော်ကို ပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။နေ့လည်ကို ရောက်တော့ ရုံးကို တခါတည်းဝင်ကာ လူကြီးဆီသတင်းဝင်ပို့လိုက်သည်။အခြေအနေမေးတော့ သူလဲ ပြောပြလိုက်သည်။လူကြီးက သူ့ကို ပါသွားရင် အထူးကြိုးစားဖို့မှာပြီး သူ့ကို ပြန်နားခိုင်းလိုက်သည်။သူလဲ သူ့ဆရာဆီ ဝင်ကာ သတင်းပို့တော့ဆရာက သူ့အခြေအနေကို မေးကာ သဘောကျနေသည်။သူလဲ အတော်ကြာစကားပြောပြီး
သူလဲပိုးပိုးရဲ့ တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုအသာပင့်တင်လိုက်ရင်း စအိုဝလေးကို လျှာနဲထိုးကာကလိလိုက်ပြန်သည်။ပိုးပိုးမှာ ကော့တက်နေရသည်။သူအစေ့ကိုကလိလိုက်ရင်း အဖုတ်ထဲကို လက်ထည့်ကာကလိနေပြန်ရာ အဖုတ်ထဲမှာ အရည်တွေက စီးကျလာသည်။သူလဲ အရည်တွေကို ဖင်ဝမှာ သုတ်လိုက်ပြီး ဖင်ဝကိုလက်နဲ့ အသာဖိကာထည့်လိုက်ရင်း အစေ့ကို လျှာနဲ့ဖိကာ ကစားလိုက်တော့ ပိုးပိုးဖင်ကမြောက်တာက်လာပြီး ဖင်ထဲသို့ လက်ကဝင်သွားသည်။
”အ့ ဟာ့ ကိုကြီး ပိုး မခံနိုင်တော့ဘူး ဟာ့ ဟာ့”
သူလဲ ပိုးပိုးပို အစေ့ကိုကလိ အဖုတ်ကိုမွှေနေရင်းစအိုကိုပါကလိနေတာကြောင့် ပိုးပိုးလဲ အောက်ကနေ လူးလွန့်နေသည်။သူလဲ အသာထကာ ပိုးပိုးကို ဆွဲထူလိုက်ပြီးပက်လက်လှန်ကချကာ ပိုးပိုးကို သူ့အပေါ် ခွထိုင်ခိုင်းရင်6း9 ပုံစံဖြင့်ထပ်ပြီး ဂျာလိုက်ပြန်သည်။ဖင်ထဲကို လက်နှစ်ချောင်းထည့် အဖုတ်ကိုအပီအပြင်ဂျာနေတာမို့ ပိုးပိုးလဲ သူ့လီးကို စုပ်နေရင်း ဖင်ကသာ ရမ်းနေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုးပိုးဖင်က သူအပေါ်ကနေ ဆောင့်ဆောင့်ပေးရင်း လီးစုပ်တာက ပိုပြီးအားပါလာသည်။ဖင်ကလဲ ပိုရမ်းလာသည်။
” ကိုကြီးရယ် အရမ်းချစ်တယ်။ကြည့်စမ်းကိုကြီး ပေကုန်ပြီ။အရမ်းအားနာတာပဲ။ဟင့် ပိုးစိတ် ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရလိုက်ဘူး ”
ပိုးပိုးက သူ့မျက်နှာကို တစ်ရှူးနဲ့သုတ်ပေးရင်း ပြောနေသည်။သူလဲ ပိုးပိုးကို ဖက်ထားကာ ငြိမ်ခံနေလိုက်သည်။ ပိုးပိုးက သူ့ကိုနမ်းလိုက်ရင်း
”ကိုကြီး ပိုးကို လုပ်ချင်လုပ်တော့လေ။ကိုကြီး စိတ်ထဲရှိသလိုသာ လုပ်။”
”အင်း ပြီးတော့လေ ဟို ကိုကြီး ပိုးကို နောက်ပေါက်လုပ်ချင်တယ်မလား။ကိုကြီးလုပ်ချင်လုပ်လေ” ”ပိုးနာမှာပေါ့”
”ပိုး ကြည်ဖြူပါတယ်။ပိုးရဲ့ ဘဝကို ကိုကြီးကိုအရင်ဆုံးမပေးခဲ့ရပေမယ့် ဒီဟာတော့ ပိုး ကိုကြီးကို ပေးမယ် အရမ်းကြီးနာအောင်တော့မလုပ်ရဘူးနော်”
ပြောပြီးသူ့လီးကိုစုပ်ပေးနေသည်။သူလဲ ပိုးပိုးရဲ့ ဆံပင်လေးကိုဖွရင်း အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးမိသည်။ အတန်ကြာတော့ ပိုးပိုးက ”ကိုကြီးလုပ်တော့လေ”
ပြောတော့ သူက”ဘယ်ကို လုပ်ရမလဲဟင်”
”ကိုကြီး ကလဲ နောက်ကို လုပ်ချင်တာမဟုတ်လားလို့”
”အင်း အဲ့ဒါဆိုနောက်ကို အရင်လုပ်မယ်”
ပြောပြီးပိုးပိုးကို ပက်လက်လှန်လိုက်ကာ တင်းပါးအောက်မှ ခေါင်းအုံးခုလိုက်သည်။ဂျယ်လ်ဘူးယူကာ ဖင်ဝကို ဂျယ်လ်ရွှဲနေအောင်းလိမ်းလိုက်ပြီး သူလီးကိုလဲ လိမ်းလိုက်သည်။ပြီးတော့ ပိုးပိုးခြေထောက်တွေကို မြှောက်ကာ ဖြဲလိုက်ပြီး ဖင်ကိုအသာဖြဲကာ ဖင်ဝတွင် လီးကိုတေ့လိုက်ပြီး
”ပိုး တအားကြီးရှုံ့မထားနဲ့ ဖွင့်ထားနော်။နာလိမ့်မယ်”သတိပေးရင်း လီးကို အသာ ဖိထည့်လိုက်သည်”
”အာ့ ရှီး နာတယ်ကိုကြီး ဖြေးဖြေး”မျက်နှာလေးရှုံ့မဲ့သွားရင်းပြောသည်။သူလဲ အစေ့လေးကိုချေပေးလိုက်သည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်လိုက်ရာ တင်းကြပ်တဲ့ စအိုထဲသို့ လီးဒစ်က ဖြည်းညှင်းစွာတိုးဝင်သွားသည်။ပိုးပိုးလဲ အံကိုကြိတ်ထားရင်း ခံနေသည်။သူလဲ ပိုးပိုးကိုအသာနမ်းလိုက်ရင်း လီးဒစ်ဝင်သွားတော့ အသာရပ်ကာ နို့တွေကိုပွတ်သပ်နေလိုက်သည်။ထိပ်တစ်ခုလုံးက တင်းကြပ်နေသည်။ဖင်ဝကညှစ်ညှစ်နေတာလဲပါသည်။ ကြီးမားတဲ့ လီးကို လက်သင့်မခံနိုင်သေးတာမို့ သူအချိန်ယူလိုက်သည်။ခဏကြာတော့ နည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်သည်။
”အာ့ ရှီး အဟင့် နာတယ်”
သူလဲ ပြန်မထုတ်တော့ပဲ ရပ်လိုက် အစေ့လေးကိုချေလိုက် နို့လေးကိုစို့လိုက် နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်နေသည်။ ကျဉ်းကြပ်တဲ့အပေါက်ထဲမှာ လီးက တစ်ဝက်နီးပါးလောက်ဝင်နေပြီ။သူလဲအသာပြန်ထုတ်လိုက် ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်လိုက်နဲ့ အကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်နေရင်းနဲ့ လီးတချောင်းလုံးက
စအိုထဲကိုအောင်မြင်စွာဝင်သွားသည်။သူလဲ အသာရပ်ကာ ပိုးပိုးနှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းရင်းနို့တွေကိုကိုင်ကာ ပွတ်နေလိုက်သည်။ပြီးတော့ အစေ့ကို ချေပေးလိုက်သည်။အဖုတ်ထဲမှ အရည်လေးတွေက စိမ့်ကျနေသည်။ စအိုကြွက်သားတွေက လီးကို ညှစ်ထားသည်။သူလဲ လီးကို နည်းနည်းပြန်ထုတ်လိုက်တော့
”ဟာ့ အ အ ဖြည်းဖြည်း ကိုကြီး နာနေသေးတယ်”သူလဲ ပြန်ထည့်လိုက် ထုတ်လိုက်လုပ်ပေးလိုက်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စအိုကြွက်သားတွေက လီးကို လက်သင့်ခံနိုင်လာသည်မို့ အဝင်အထွက်က ချောမွေ့လာသည်။ ပိုးပိုးလဲ ခံနိုင်လာသည်။သူလဲ အသာညှောင့်ပေးနေရာမှ ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင့်လို့ရလာသည်။
”ဟား နာသေးလာ ပိုးလေး ”
”အင့် အင့် သိပ်မနာတော့ဘူး ကိုကြီး ခံနိုင်လာပြီ။ဆောင့်ချင် ဆောင့်ကြည့်လေ”သူလဲ
ခပ်မှန်မှန်လေးဆောင့်လိုက်သည်။ပိုးပိုးလဲ ခံနိုင်လာပြီ။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နာတာမှတဆင့် ကောင်းလာပြီ။ဒါကြောင့် သူလဲ ခပ်သွက်သွက်လေးဆောင့်လိုက်ပြန်ရာ ပိုးပိုးလဲ ခံနိုင်လာသည်။သူလဲ ပိုးကိုးနှုတ်ခမ်းကိုအသာစုပ်လိုက်ရာ ပိုးပိုးလဲ သူ့ကိုဖက်ထားပြီးပြန်နမ်းလိုက်သည်။သူလဲ ခပ်သွက်သွက်လေးဆောင့်ပေးနေရင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုက်သည်။ပိုးပိုးလဲ အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးလာသည်။ဖင်ထဲ့သို့အဝင်အထွက် ချော့မွေ့လာတာမို့ နှစ်ယောက်သား အရသာကို ပြည့်ဝစွာခံစားလာနိုင်သည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုးပိုးလဲ ကောင်းလွန်းလာသည်ထင်သည်။အနမ်းတွေက ကြမ်းလာပြီး သူ့ကို အတင်းဖက်ထားကာ ဖင်ကိုအရမ်းကိုကော့လာသည်။သူလဲ ဆက်တိုက်ဖိဖိဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
”အ အ ကောင်းလာပြီကိုကြီး ဆောင့်ပေး ဟ ဟ ဟင်း ဆောင့် ဆောင့် ”
သူလဲ ပိုးပိုးခြေထောက်နှစ်ချောင်ကို ပိုးပိုးအပေါ်ဖက်ထိ ပင့်တင်ကာ လက်မှာချိတ်လိုက်ပြီး ”ပိုး ကိုကြီး ပြီးချင်လာပြီ ဆောင့်တော့မယ်”
”ပိုးလဲ ပြီးချင်ပြီ ကိုကြီး ဆောင့်ဆောင့် ဟား ရှီး ဘယ်လိုကြီးလဲ မသိဘူးကွာ ဒီလိုမျိုးတခါမှ မဖြစ်ဖူးဘူးကွာ ဆောင့် ပါ ဟား ”
သူလဲ ကိုယ်ကိုရှေ့ကို ကိုင်းလိုက်ကာ အားကုန်ဆောင့်လိုက်သည်။တဖတ်ဖတ် တဇွိဇွိနဲ့ အသံတွေ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ညည်းညူသံတွေက အခန်းထဲမှာ ပျံ့လွင့်နေသည်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုးပိုးရဲ့အဖုတ်ထဲမှာ အရည်တွေကလဲ စီးကျလာသလိုဖင်ကလဲ တအားကို ညှစ်လာသည်။သူလဲ လီးကလဲ အရမ်းညှစ်ထားသည့်အတွက် တခုလုံး ပူထူလာပြီး ပြီးချင်လာသည်။ဒါကြောင့်ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်ရာ သုတ်ရည်တွေက တရှိန်ထိုးပန်းထွက်သွားသည်။သူလဲ အရမ်းကိုဟိုက်သွားကာ ပိုးပိုးမျက်နှာကို အငမ်းမရနမ်းလိုက်ရင်း ပိုးပိုးအပေါ်မှောက်ချလိုက်ကာ အမောဖြေနေလိုက်သည်။ပိုးပိုးလဲ အဖျားတက်သလို တဟင်းဟင်းနဲ့ သူ့ကိုတင်းကျပ်စွာဖက်ထားရင်း ခြေထောက်နှစ်ချောင်းက သူ့ကိုအတင်းချိတ်ကာထားသည်။ နှစ်ယောက်သားတက်းကြပ်စွာဖက်ထားကြသည်။
”ဟုတ် ကိုကြီး ကောင်းတယ် အရမ်းလဲ မောတယ်။လူလဲအရမ်းနှုံးသွားတာပဲ”
သူတို့နှစ်ယောက်ဖက်လျက်သားစကားပြောနေကြသည်။တအောင့်နေမှ သူလဲ ပိုးပိုးအပေါ်က ထကာ ဖင်ထဲမှလီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ရာ ဖင်ဝမှ အရည်တွေစီးကျလာလို့ တစ်ရှူးနဲ့သုတ်လိုက်ရသည်။သူလဲ တစ်ရှူးနဲ့သုတ်လိုက်ကာ ပိုးပိုးကိုချီပြီးရေချိုးခန်းထဲသွားလိုက်သည်။ရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့ နှစ်ယောက်သားဆေးကြောသန်းရှင်းကြရင်း စနောက်နေကြသည်။ပြီးတော့ ပြန်ထွက်လာတော့ ပိုးပိုးက သူ့ကိုချီခိုင်းတာမို့ သူလဲ ချီပြီးပြန်လာလိုက်သည်။နှစ်ယောက်သားအဝတ်မဝတ်တော့
သူ့အပေါ်ကိုတက်ကာခွထိုင်လိုက်ပြီးသူ့နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းသည်။သူလဲ ပြန်နမ်းလိုက်သည်။ပြီးတော့ပိုးပိုးက လက်နဲ့နောက်ပြန် သူ့လီးကို ဆွပေးပြန်ရာ လီးက တဖြည်းဖြည်းထလာကာ မာလာပြန်သည်။ပိုးပိုးလဲ သူ့လီးကို ကိုင်ကာ အဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းထိုင်ချလိုက်သည်။ပြီးတော့အပေါ်ကနေ ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။သူလဲ ပိုးပိုးခါးလေးကို ကိုင်ကာ အောက်ကနေ ကော့ကော့ပေးလိုက်သည်။နှစ်ယောက်သား စည်းချက်ညီစွာ လှုပ်ရှားနေရင်း နာရီဝက်လောက်ကြာတော့ နောက်တချီပြီးသွားကြပြန်သည်။သူလဲနှစ်ချီဆက်တိုက်ပြီးသလို ပိုးပိုးလဲ သုံးချီပြီးရသည်။နှစ်ယောက်သား အတော်ကို ဟိုက်သွားတာမို့ အနားယူလိုက်ကြသည်။
သူတို့နှစ်ယောက် နိုးလာကြာတော့ မနက်လင်းနေပြီ။အိပ်ရာနိုးနိုးချင်းသူလဲ ပိုးပိုးကို နမ်းလိုက်တော့
”မျက်နှာလဲမသစ်ရသေးပဲနဲ့။ညစ်ပတ်တယ်”ချစ်စဖွယ်မျက်စောင်းလေးထိုးပြီးပြောတော့ သူလဲ အသည်းယားလာတာနဲ့ ပိုးပိုးကို ဆွဲလှည့်ကာ မျက်နှာကိုအနှံနမ်းလိုက်ပြီး
လက်တွေကနို့တွေကိုညှစ်ကာနို့သီးခေါင်းကိုချေပေးလိုက်တော့ ပိုးပိုးအသက်ရူသံပြင်းလာပြီးသူ့ကိုနမ်းလာသည်။ သူလဲ စိတ်က ပါလာပြန်တာမို့ နို့တွေကိုကုန်းစို့လိုက်ပြီးလက်တွေက ပေါင်ကြားထဲကိုဆင်းကာ အစေ့ကို ကလိပေးလိုက်တော့ ပေါင်နှစ်ဖက်က ကားပေးလိုက်သည်။သူလဲ အစေ့ကိုဆက်တိုက်
ကလိပေးလိုက်ရာပိုးပိုးမှာသူ့ကို အတင်းဖက်ထားပြီးနှုတ်ခမ်းတွေကိုအတင်းနမ်းနေသည်။သူလဲ အဖုတ်ထဲသို့ လက်ထည့်ပြီးဆွလိုက်ရာ အရည်တွေက ထွက်လာသည်။သူလဲ အသာထကာ ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး အဖုတ်ဝကို တေ့ကာ ထည့်လိုက်သည်။ပြီးတော့ နှစ်ယောက်သား အတိုင်အဖောက်ညီစွာ ဆောင့်နေကြသည်။ အခန်းထဲမှာအသားချင်းရိုက်သံ အဝင်အထွက်စည်းချက်ညီစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့အသံ ရမက်တွေလွှမ်းနေတဲ့ ညည်းညူသံတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေသည်။နှစ်ယောက်သား စည်းချက်ညီစွာလှုပ်ရှားမှုပြီးသွားတော့ ရေချိုးခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်တူရေချိုးလိုက်ကြသည်။ရေချိုးပြီးတော့ ပိုးပိုးက သူ့ကို မနက်စာပြင်ပေးကာ နှစ်ယောက်သားမနက်စာ စားလိုက်ကြသည်။စားသောက်ဆေးကြောပြီးတော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ တီဗီကြည့်ရင်း ပိုးပိုးက သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာထိုင်ကာ တွတ်တီးတွက်တာပြောနေသည်။အပြင်သို့မထွက်ချင်ဘူးလို့လဲပြောသည်။ပြီးတော့ သူ့ကို သူတို့နဲ့လုပ်တာတွေကို ဗွီဒီယိုမရိုက်ထားဘူးလားမေးပြီး ကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောတော့သူလဲ ကွန်ပျူတာထဲမှာ သူနဲ့ အေးမိစံ နှင်းမြတ်မွန်နဲ့ ပိုးပိုးတို့နဲ့ လုပ်ခဲတာတွေကို ရိုက်ထားတာတွေကို ပြလိုက်သည်။သူတို့နှစ်ယောက်လဲ ကြည့်ရင်းနဲ့စိတ်ပြန်လာကာ ပိုးပိုးကိုနောက်ကနေ သိုင်းဖက်ရင်းနမ်းကာ နို့တွေကို
ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်လိုက်ရင်းဂါဝန်ကိုအောက်ကနေပင့်တင်ကာခေါင်းကနေမကာချွတ်လိုက်တော့အတွင်းခံအနီရောင် ဝမ်းဆက်လေးသာကျန်တော့သည်။ပိုးပိုးကို ကုတင်ပေါ်လေးဖက်ထောက်ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး ပင်တီအနီလေးကိုချွတ်ကာ နောက်ကနေ ဂျာပေးလိုက်တော့ ပိုးပိုးလဲ
”ရှီး ကိုကြီးရယ် အာ့ဟား”
သူလဲ စအိုကိုပါလျှက်လိုက်ပြီး လက်နဲ့ကလိလိုက်သည်။ပိုးပိုးလဲ ကုတင်ပေါ်တွင်ကိုယ်ကိုဝပ်ကျသွားပြီးဖင်က ကော့တက်သွားသည်။သူလဲ အပီအပြင်ကိုဂျာပေးလိုက်တော့ ပိုးပိုးအဖုတ်ထဲကအရည်တွေက ပေါင်ကြားမှစီးကျလာသည်။ပိုးပိုးလဲ
”ကိုကြီးကို စုပ်ပေးမယ်ကွာ”ပြောပြီးထလာကာသူ့ရှေ့ဒူးထောက်ကာ လီးကို စုပ်ပေးလိုက်သည်။ အတန်ကြာတော့သူလဲ ပိုးပိုးကို ကုတင်စောင်းမှာ ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီးနောက်ကနေ
”ဲ ဗြစ် တစ်တစ် ဗြစ်”
”အာ့ ကျွတ်ကျွတ် ဟင့် ဟင့် ”
စအိုဝတွင်တင်းကျပ်ကာဝင်သွားသည်။ဖြည်းဖြည်းချင်းလီးကတဆုံးထိဝင်သွားကာ သူလဲ အသာဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ပိုးပိုးလဲသူ့ဖက်ကို လှည့်ကြည့်ရင်း
”ကိုကြီးဆောင့်ချင်ဆောင့်တော့ ပိုး ခံနိုင်တယ်”
သူလဲမီးစိမ်းပြလိုက်တာမို့း ဖြည်းဖြည်းချင်းပုံမှန်ဆောင့်ပေးနေရင်းခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်၊ ဆောင့်ချက်တွေကြာလာသည်နှင့်အမျှ နှစ်ယောက်သား ကောင်းလာကြပြီး ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
ညည်းညူသံတွေနဲ့အတူ ဆောင့်ချက်တွေကပိုပိုသွက်လာကြသည်။သူလဲ ပြီးချင်လာပြီမို့ မနားတမ်းဆောင့်ချပေးလိုက်ရာ သုတ်ရည်တွေက ပိုးပိုးစအိုထဲတွင်ပန်းထည့်လိုက်သည်။ပိုးပိုးလဲ ပြီးသွားပြီမို့ နှစ်ယောက်သားဖက်ကာအနားယူလိုက်ကြသည်။ခဏကြာမှ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးကုတင်ပေါ်တွင်လှဲကာ ပိုးပိုးက သူ့ကိုမေးသည်။
”မမအေးမိစံနဲ့ မမနှင်းမြတ်မွန်တို့ကိုလုပ်တုန်းက ကိုကြီးလီးမှာအဖုအဖုတွေနဲ့ ဘာတွေလဲဟင်”
”အဲ့ဒါဂေါ်လီတွပိုးရဲ့။အရင်တုန်းကဂေါ်လီထည့်ထားတာ။နောက်တော့ ပြန်ဖြုတ်ထားလိုက်တာ။သူတို့နဲ့တုန်းက ပြန်ထည့်တဲ့အချိန်မို့”
”အော် ဂေါ်လီဆိုတာ အဲ့ဒါလား”
သူ့ကို သိချင်တာတွေကိုမေးနေသည်။သူကလဲ ပြန်ဖြေပေးရင်း ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေကိုဖျက်လိုက်ရမလားမေးတော့ ပိုးပိုးက မဖျက်ပါနဲ့ပြောပြီး ဘယ်သူမှတော့ မပြနဲ့လို့ပြောသည်။သူတို့နှစ်ယောက် အတူရှိနေချိန်အတိုင်းအတာတွင်းမှာ တကယ့်လင်မယားတွေလိုပင်။ပိုးပိုးကလဲ နောက်ဆို ပြန်မတွေ့ရတော့မယ့်တူတူ
အတုနေတုန်းလေးအပြည့်အဝပျော်မည်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသည့်အလား။နှစ်ယေညက်သားအစွမ်းကုန်ချစ်ကြသလို သူ့ကိုလဲ ပိုးပိုးက ဇနီးတယောက်လိုပင် လုပ်ပေးသည်။တကယ်လို့ ဆုံဆည်းဖြစ်ခဲ့ကြရင် မိန်းမကောင်းတယောက်အနေနဲ့ သူ့ကို ပြုစုပေးမယ်လို့လဲ ကတိပေးသည်။သူကလဲ သူ့ရည်းစားနဲ့ရရင်လဲ လုပ်ပေးပါလို့ပြောတော့ လုပ်ပေးမှာပါလို့ပြောသည်။နှစ်ယောက်သားခွဲခါနီးတော့ ပိုးပိုးတအားငိုနေတာမို့သူလဲ မနည်းချော့ရသည်။သူ့ကိုပြန်ပို့ပေးတော့ ပိုးပိုးတယောက် မျက်နှာလေးချောင်ကျနေသည်။
သူလဲနိုင်ငံခြားမသွားခင် မိဘတွေအိမ်ကိုပြန်ကာခဏနေလိုက်သည်။သွားမယ့်နေ့ကျမိဘနှစ်ပါး အကိုလင်မယား အမလင်မယားတို့က လေဆိပ်လိုက်ပို့ကြသည်။အေးမိစံတို့စုံတွဲရော နှင်းမြတ်မွန် ပိုးပိုးတို့ပါလိုက်ပို့ကြသည်။ သူ့အမေနဲ့အမက သူ့ကို ပိုးပိုးကို သဘောကျပြီး အဲ့ကောင်မလေးကိုမကြိုက်ဘူးလားတိုးတိုးလေးမေးတော့ သူရီပဲနေလိုက်သည်။သူလေယာဉ်ပေါ်တက်တော့မှ အားလုံးပြန်သွားကြသည်။သူဂျပန်ကိုရောက်တော့ လာကြိုသည့်သူက လာကြိုပြီး နေရာချထားပေးကာ လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်ပေးသည်။သူလဲ ဖုန်းကဒ်ဝယ်ကာ မိဘတွေဆီဖုန်းဆက်ပြီး ပိုးပိုးဆီဆက်တော့ ပိုးပိုးက ငိုနေသည်။သူလဲ ချော့ရပြန်သည်။ သူဂျပန်ကိုရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း ပိုးပိုးနဲ့ ညှိကာ ဖုန်းမဆက်တော့။ပိုးပိုးကလဲကြာရင် ခက်ရချည်ရဲ့လို့ပြောသည်။ လိုင်းပေါ်မှာ အေးမိစံနဲ့နှင်းမြတ်မွန်တို့နဲ့တော့ ပြောဖြစ်သည်။သူဂျပန်ရောက်ပြီးတစ်နှစ်ခန့်ကြာတော့ အေးမိစံနဲ့ နှင်းမြတ်မွန်တို့ ယောက်ကျားယူသွားကြသည်။ပိုးပိုးကတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောသည်။သူလဲ မဆက်တော့ပါ။
ဒီလိုနဲ့ သူစာကိုသာ တစိုက်မတ်မတ်လေ့လာဖြစ်သည်။နှစ်နှစ်ခန့်ကြာတော့ သူလဲ
ပရောဂျတ်အတွက်စာတမ်းပြုစုရသည်။သူလဲ မြန်မာနိုင်ငံပြန်လာကာ သူလုပ်ရမည့်စာတမ်းအတွက် ဌာနကိုတင်ပြကာ ကရင်ပြည်နယ်ဖက်သို့သွားကာ လေ့လာပြီး စာတမ်းအတွက်လုပ်ရသည်။မသိတာတွေကို ဆရာသမားတွေကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေဆီမှာ မေးကာ လေ့လာပြီးလုပ်ရသည်။မိဘတွေဆီကို ခဏသာပြန်နိုင်သည်။စာတမ်းလုပ်ပြီးတော့ဂျပနိသို့ပြန်လာကာ သူ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အဖွဲ့လိုက်စုကာ စာတမ်းအားလုံးကို ပြန်ပြီးပြုစုပြီးပြန်လုပ်ရပြန်သည်။ပြီးတော့ group လိုက် ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ရသည်။ အတော့်ကိုလေ့လာပြီး အင်တာနက်မှာလဲ အမြဲတမ်းလေ့လာခဲ့ရတာမို့ သူ့အတွက် အရမ်းကြီးတော့ မခက်ခဲလှပေမယ့် အတော်တော့ ခက်လှသည်။အားလုံးပြီးသလောက်ဖြစ်သွားတော့မှ သူလဲ သက်ပြင်းချနိုင်သည်။
ဒါတောင် သူတင်သည့်စာတမ်းက အဆင်ပြေချော့မွေ့ပြီးသဘောကျမှ သူ ဘွဲ့ရမည်။သူလဲ အဲ့ကိစ္စကိုခေါင်းထဲက ထုတ်ကာ အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တာမို့ ဖိအားမထားတော။တနေ့သူလဲ တိုကျိုမြို့ထဲ သွားရင်းနဲ့ အမှတ်မထင် လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်သည်။ဆုပြည့်စံရဲ့ ညီမဝမ်းကွဲ နွယ်နီ။သူမနဲ့က အရမ်းကြီးတော့မခင်ပေမယ့် သူနဲ့ဆုပြည့် ကြိုက်ခဲ့တုန်းက ခင်ခဲ့တာပင်။ဆုပြည့်နဲ့မတည့်သလို သူ့ကိုလဲ ကြည့်မရဘူးလို့ ပြန်ကြားရသည်။ သူကလဲ သိပ်ကြည့်မရ။ရုပ်ရည်က လှတပတရှိပေမယ့် ခန္ဓာကိုယ်က ပိန်ကပ်နေသည်။ဖင်မရှိရင်မရှိ။အရပ်က နည်းနည်းမြင့်တာမို့ ပိန်တော့ ရှည်သည်လို့ထင်ရသည်။ဘာတွေမာန်တက်နေမှန်းမသိ။သူကလဲ ဒါကို ကြည့်မရ။ အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ရင် ထေ့သလိုလို ခနဲ့စကားတွေပြောဖြစ်သည်မို့ သိပ်ပြီးလဲ မရင်းနှီးကြ။ ခုပြန်တွေ့တော့ ရေခြားမြေခြားမှာ ကိုယ့်နိုင်ငံက လူနဲ့ပြန်တွေ့ရတော့ဝမ်းသာသွားသလို သူမကလဲ ဝမ်းသာစွာနှုတ်ဆက်စကားပြောဖြစ်သည်။ စကားစပ်မိလို့ပြောကြရင်းနဲ့ သူမက ဒီကို
ကုမ္ပဏီအလုပ်နဲ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ရောက်တာတစ်လလောက်ရှိပြီတဲ့။သူနေတဲ့နေရာနဲ့ သိပ်မဝေးလှတာပေ။သူမက ဆုပြည့်ယောက်ကျားရသွားလို့စိတ်မကောင်းကြောင်းနဲ့ သူတို့လဲအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောသည်။သူလဲ ခုတော့ဘာမှသိပ်မခံစားရတော့တာမို့ အေးဆေးပင်ပြန်ပြောနိုင်သည်။နွယ်နီလဲ ခုတော့ အရင်လောက်မပိန်တော့ပေ။စလင်းဖြစ်ကာ ပြင်တက်ဆင်တက်လာလို့လားမသိ တင်နဲ့ရင်နဲ့အတော့်ကို ကြည့်ကောင်းလာသည်။သူလဲ နွယ်နီကို မယူသေးဘူးလာမေးရာ ယူတော့မှာတဲ့။ဒီနှစ်ကုန်ရင်ယူမယ်လို့ပြောသည်။ သူတို့ကုမ္ပဏီမှ လူပင်။သူ့ကိုဘာအတွက်လာတာလဲမေးတော့ သူက မာစတာဘွဲ့လာယူတာလို့ပြောတော့ အထင်ကြီးသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။သူတို့အတော်ကြာစကားပြောပြီးဖုန်းနံပါတ်တွေလဲကာ သူလဲ ပြန်လာလိုက်သည်။နောက်ရက်တွေမှာလဲ သူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဖြစ်ကြသည်။အလည်သွားလိုက် လျှောက်စားလိုက်နဲ့အတော့ကိုရင်းနှီးသွားကြသည်။နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာလဲ ဖြစ်ပြန်
သူတို့အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာလဲ ဖြစ်တာမို့ ရင်းနှီးပွင့်လင်းမှုက မြန်လှသည်။အတော့်ကိုပွင့်လင်းသွားသည်။ ဒီလိုနဲ့ နွယ်နီလဲ နှစ်လလောက်ကြာတော့ ပြန်ရခါနီပြီ။နောက်တစ်ပတ်လောက်နေရင် အလုပ်ကိစ္စတွေပြီးတော့မှာမို့ ပြန်ရတော့မည်။သူလဲညဖက်ကျ ညနေစာသွားစားရအောင်လို့ဖုန်းဆက်တော့ နွယ်နီကလဲ ညနေကျရင်လာခေါ်လေ လို့ပြောသည်။ညနေကျသူလဲ နွယ်နီကို သွားခေါ်လိုက်သည်။နွယ်နီလဲ အင်္ကျီအဝါချိုင်းပြတ်ပေါ်မှာ အဖြူရောင်အနွေးထည်ကိုဝတ်ကာ အောက်က ဘောင်းဘီအကြပ်အနက်ကို ဝတ်ထားသည်။ ကျောလည်လောက်ရှိတဲ့ ဆံပင်ကို ဖျားလျားချထားတာမို့ အတော်ပင်ကြည့်ကောင်းလှသည်ပင်။သူတို့လဲ ညနေစာစားရင်းနဲ့ နှစ်ယောက်သား နည်းနည်းသောက်ကြသည်။
စကားပြောရင်းနဲ့သောက်ကြရင်းတော်တော်သောက်ဖြစ်ကြသည်။နွယ်နီလဲ နည်းနည်းများသွားတာမို့ အတော်မူးသွားသည်။သူလဲ ပိုက်ဆံရှင်းကာ နွယ်နီကိုခေါ်ပြီးပြန်လာတော့ နွယ်နီက
မပြန်ချင်ဘူးလို့ဂျစ်တိုက်နေသည်။သူလဲချော့မော့ကာ ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်ပြောတော့ မရ။ လျှောက်လည်မယ်လို့ပြောတာမို့ သူလဲ စိတ်ညစ်သွားရကာ သွားကြတာပေါ့လို့
ပြောပြီးထွက်လာခဲ့ကြတော့လဲမူးနေတဲ့နွယ်နီကသိပ်မဟန်။ဒါကြောင့်ချော့ကာပြန်မယ်ပြောတော့လဲ ဂျစ်ပြီး မပြန်ဘူးလို့ပြောတော့ သူလဲ ဘယ်သွားမလဲမေးတော့ ဘယ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခန်းကိုမပြန်ချင်ဘူးပြောတာနဲ့ သူလဲ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ဟိုတယ်တခုဆီခေါ်သွားလိုပ်ကာ နှစ်ယောက်ခန်းတခန်းယူလိုက်သည်။အခန်းထဲရောက်တော့ နွယ်နီက ရေခဲသေတ္တာဖွင့်ကာ ဘီယာကိုတွေ့တော့သောက်မယ်လုပ်နေလို့သူတားလိုက်ရသည်။ သူလဲစိတ်ကတိုလာတာမို့ နွယ်နီကို ကုတင်ပေါ်လှဲချလိုက်တော့ နွယ်နီက ရီနေသည်။သူလဲ အနွေးထည်ကို ချွတ်ကာ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ခုံပေါ်မှာထိုင်နေတော့ နွယ်နီက ထလာပြီးသူ့ဘေးနားဝင်ထိုင်ကာ သူ့ကိုစနေသည်။သူလဲ အိပ်တော့လို့ပြောတော့ သိပ်မှအိပ်မယ်တဲ့။သူလဲ အဲ့လောက်မှရှိတာကွာဆိုပြီးနွယ်နီကို ကုတင်ပေါ်တင်ကာ အနွေးထည်ကိုချွတ်လိုက်ပြီးနို့တွေကိုဆုပ်နယ်ပေးလိုက်သည်။လူကလဲ မူး မိန်းမတွေနဲ့လဲဝေးတာလဲကြာနေတာမို့ စိတ်ကိုထိန်းချုပ်မထားတော့။နွယ်နီအင်္ကျီကို အောက်ကနေ မကာချွတ်လိုက်ပြီး
ပါးစပ်ကညည်းသံသဲ့သဲ့နဲ့အတူသူ့ခေါင်းကိုပွတ်သပ်လာသည်။သူလဲ သူ့ဘောင်းဘီကိုချွတ်လိုက်သည်။ ပြီးနွယ်နီ့ဘောင်းဘီအကြပ်ကိုချွတ်လိုက်တော့ နွယ်နီလဲ ဖင်ကိုအသာကြွကာ ချွတ်ပေးလေသည်။နှစ်ယောက်သား အရက်ကလဲမူးနေ ရမက်ကလဲ ကြူးဖို့ကြံနေကြသည်။သူလဲပြတ်လပ်နေသလို နွယ်နီလဲအတူတူပင်။ဒီရောက်ပြီး သူနဲ့တွေ့တော့ စိတ်တွေကလွတ်လပ်နေတာမို့ ခုလိုဖြစ်ကြခြင်းလဲ ဖြစ်သည်။သူလဲ အတွင်းခံ ခရမ်းရောင်လေးကိုပါတခါတည်းချွတ်လိုက်ကာ အစေ့ကိုချေပေးလိုက်သည်။နွယ်နီလဲ တအင်းအင်းနဲ့ကော့တက်လာသည်။ သူလဲ အဖုတ်ထဲကိုလက်ထည့်လိုက်တော့ အရည်တွေနဲ့မို့ ချောချောမွေ့မွေ့ဝင်ထွက်နေသည်။နွယ်နီကို ထူလိုက်ကာ သူလဲ နွယ်နီရဲ့အဖုတ်ကိုကလိနေရင်းနဲ့ ပါးစပ်ထဲကိုလီးထည့်ပေးလိုက်တော့ နွယ်နီလဲ အသားစုပ်ပေးလေသည်။လုပ်နေကျအလုပ်မို့ထင်သည် အခက်အခဲမရှိလှပေ။နွယ်နီလဲ သူ့ရည်းစားနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ဖူးထားသည်မို့ထင်သည်။ အစစအခက်အခဲမရှိလှပေ။အဖုတ်ထဲကလဲ အရည်တွေစိုနေတာမို့သူလဲ ပါးစပ်ထဲမှလီးကို ထုတ်ကာ နွယ်နီကိုပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး ပေါင်တွေကိုမြှောက်ကာ အဖုတ်ဝမှာလီတေ့လိုက်ကာ ထည့်လိုက်တော့ အဆုံးထိဝင်သွားသည်။သူလဲ တရစပ်ပင်ဆက်တိုက်ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။
”အ အ ကိုပိုင် ဆောင့်ဆောင့်ကောင်းတယ် ကောင်းလိုက်တာ ရှီး ဟ ဟ. ဟ ”
သူလဲဆက်တရုက်ဆောင့်ပေးလိုက်ရာ နွယ်နီလက်တွေကမွေ့ရာခင်းကို ဆုပ်ချေထားကာ ခြေချောင်းတွေက ကုပ်ကွေးသွားပြီး ခါက ကော့တက်လာကာ အဖုတ်ကလဲ သူ့လီးကိုတင်းကြပ်စွာညှစ်ကာထားသည်။ တစ်ချီပြီးသွားပြီ။သက်ပြင်းချသံနဲ့အတူ
”အရမ်းကောင်းလိုက်တာ ကိုပိုင်ရယ် ””ကိုယ်မပြီးသေးဘူ ကိုယ့်ကို ကုန်းပေး”
သူလဲ အဖုတ်ထဲမှလီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ကာ ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။နွယ်နီလဲ
ကုတင်စွန်းမှာပင်ခြေထောက်တွေတင်ကာဖင်ကို စွင့်ကာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဝပ်ကာကုန်းပေးလိုက်သည်။သူလဲ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်တင်ပါးနှစ်ဖက်ကိုဖြဲလိုက်တော့ စူပွပွစအိုဝကိုတွေလိုက်ရတော့အကြံတခုရလိုက်တာမို့ အဖုတ်ဝကစီကျနေတဲ့ အရည်တွေကိုစအိုဝမှာသုတ်လိုက်ပြီး တံတွေးထွေးကာ
”ကိုယ်လဲ ဖင်ချမလို့ ခံမလား”
”အာ အရမ်းနာတယ်။ဖြည်းဖြည်းတော့ လုပ်နော်။တခါကဖင်ကွဲသွားလို့ ကြောက်ပြီးနောက်မခံတော့ဘူး”
သူလဲဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲ လက်ညျီုးနဲ့လက်ခလယ်ကိုဖင်ထဲသို့ပူးထည့်ကာ ဆွနေလိုက်သည်။ အဝင်အထွက်ချောလာပြီမို့ သူလဲလီးကိုတံတွေးစွတ်ကာ ဖင်ဝတွင်တေ့ပြီး အသာဖိချလိုက်တော့
”အ့ ကျွတ်ကျွတ် ဖြေးဖြေး နာတယ်”သူလဲ တစ်ရစ်ချင်းသွင်းလိုက်သည်။ဖင်ခံဖူးသူမို့ ဖင်ကို အလိုက်သင့်ဖွင့်ပေးတက်သည်။သိပ်ပြီးအားမစိုက်လိုက်ရပဲ လီးကတဆုံးဝင်သွားသည်။မူးတဲ့အရှိန်ကလဲ ပါနေတာမို့ ခံနိုင်ရည်ရှိနေတာဖြစ်မည်။သူလဲအသာလေးဆောင့်ပေးလိုက်ရင်း အစေ့ကိုချေပေးလိုက်သည်။နွယ်နီလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခံနိုင်လာပြီမို့ သူလဲ သိပ်မညှာတော့။နွယ်နီလဲမူးမုးနဲ့သူ့ကိုဆောင့်ခိုင်းတာမို့ သူလဲ စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းဖင်နှစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းညှစ်ကာ အားကုန်းဆောင့်လို့းလိုက်သည်။
အချက်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော်လာတော့ သူလဲ ပြီးချင်လာပြီ။နွယ်နီလဲနောက်တစ်ချီပြီးချင်လာတာမို့ သူ့ကို ဆောင့်ဖို့ပြောတော့သူလဲ မနားတမ်းဆက်တိုက်ဆောင့်လိုက်ရာ သုတ်ရည်တွေက ဖင်ထဲမှာပန်းထွက်သွားသည်။ နှစ်ယောက်သားကောင်းမွန်တဲ့အရသာကို ပြည့်ဝစွာခံစားရင်း မူးပြီးအိပ်ပျော်သွားကြသည်။ သူတရေးနိုးတော့ထကြည့်တော့ နွယ်နီကသူ့ဘေးနားမှာအဝတ်တွေဝတ်ပြီးသူ့နဲ့အတူစောင်ခြုံကာ အိပ်နေသည်။ သူလဲအိမ်သာသို့သေးပေါက်သွားတော့ သူ့လီးကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးထားသည်။
ကြည့်ရတာနွယ်နီတရေးနိုးပြီးလုပ်ပေးသွားတာနေမည်။သူလဲရေချိုးခန်းထဲမှ တပတ်တထည်ပတ်ကာ ပြန်ထွက်လာပြီး အဲကွန်းကိုလျှော့ကာပြန်အိပ်လိုက်သည်။မနက်နိုးလာတော့နွယ်နီက နိုးနေပြီ။မျက်နှာသစ်ပြီးနေပြီ။ သူနိုးလာတော့ သူ့ကိုပြုံးပြပြီ မျက်နှာသစ်ဖို့ပြောသည်။သူလဲမျက်နှာသစ်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့ နွယ်နီက ပြန်ကြစို့လို့ပြောသည်။သူလဲနွယ်နီကိုဆွဲဖက်လိုက်ပြီးနမ်းလိုက်တော့
ညကျရင်ပြန်တွေ့မယ်လေနော”ပြောတာမို့သူလပြန်လွှတ်လိုက်ကာအဝတ်လဲလိုက်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြသည်။ ညနေကျသူလဲနွယ်နီကို သွားခေါ်ကာ ညနေစာစားပြီး ဟိုတယ်သို့သွားကြပြန်သည်။
ဟိုတယ်ရောက်တာနဲ့အဝတ်တွေချွတ်ကာသူကနွယ်နီ့ကို သူ့လီးကိုစုပ်ခိုင်းလိုက်သည်။နွယ်နီလဲ စိတ်ပါလက်ပါစုပ်ပေးနေသည်။ပြီးတော့ နွယ်နီ့ကိုဆွပေးလိုက်ကာ ဖင်ကိုပဲ လိုးလိုက်သည်။နွယ်နီလဲ သူနဲ့ကျမှ ဖင်လိုးခံရတဲ့အရသာကိုသိသွားသည်လို့ပြောသည်။သူတို့ညနှစ်နာရီနီးပါးထိလုပ်ကြသည်။ဖင်ကိုလုပ်လိုက် အဖုတ်ကိုလုပ်လိုက်နဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်လဲ မနက်ဆို နွယ်နီကအလုပ်သွား သူကကျောင်းသွားညနေကြ ဟိုတယ်သွားလိုက် သူ့အခန်းမှာနေလိုက်နဲ့ ညတိုင်းလုပ်ဖြစ်ကြသည်။နွယ်နီကပြန်ခါနီးတော့ သူတို့ကိစ္စကို ဘယ်သူ့မှမပြောပါနဲ့လို့တောင်းပန်သည်။သူလဲ ဘယ်သူ့မှပြောဖို့စိတ်ကူမရှိပါ။ဒီလိုနဲ့ နွယ်နီလဲ မြန်မာပြည်ပြန်သွားတော့ သူလဲ ပြန်တဲ့အချိန်ထိ ဘယ်သူနဲ့မှမလုပ်ဖြစ်တော့။
သူလဲ သူတင်လိုက်တဲ့စာတန်းအရွေးခံရပြီး သေချာစွာဖြေနိုင်ခဲ့တာမို့ မာစတာဘွဲ့ကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်။ သူတို့group တခုလုံးလဲအောင်မြင်ခဲ့ကြတာမို့အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းရသည်။ပြန်ခါနီးအားလုံးလျှောက်လည်ကြ နှုတ်ဆက်ပွဲလုပ်ကြ နဲ့ပျော်စရာပင်။ဖိအားတွေလဲကင်းသွားကြပြီမို့လွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေကြသည်။သူလဲဌာနကို ဘွဲ့ယူပြီးမှ ပြန်လာဖို့ခွင့်တောင်းတော့ ရတာမို့ ဘွဲ့ယူပြီးမှပဲ ပြန်လာခဲ့သည်။သူပြန်လာတော့ သူမိသားစုလာကြိုသည်။သူလဲ အိမ်ကိုလိုက်သွားပြီး တစ်ပတ်လောက်နေပြီးမှ နေပြည်တော်ကို ပြန်လာခဲ့သည်။ ရုံးရောက်တော့ လူကြီးကိုသတင်းဝင်ပို့ပြီး ပါလာတဲ့လက်ဆောင်နဲ့ကန်တော့သည်။လူုကြီးကသူ့ကို ချီးကျူးပြီးအတွေ့အကြုံတွေမေးသည်။သူလဲပြောပြသည်။သူ့ကိုလဲ ကြိုးစားဖို့နဲ့ ဌာနအတွက် အားကိုးရတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးမသည်။သူလဲ ပြန်ထွက်လာပြီးသူ့ဆရာဆီဝင်ကာ လက်ဆောင်ပေးရင်း ကန်တော့လိုက်သည်။ဆရာကလဲ ဆုံးမစကားပြောသည်။မိန်းမယူဖို့ကောင်းပြီလို့ပြောတော့ သူလဲ ယူစရာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ ဆရာက ဆဲသည်။အခန်းထဲကိုလဲ
ဒီလိုနဲ့သူနေပြည်တော်ရောက်တာတစ်လကျော်ပြီ။သူလဲ ရာထူးတက်သွားကာ တာဝန်က ပိုကြီးလာတာမို့
ခရီးသိပ်မထွက်ရတော့။ရုံးချုပ်မှာပဲ နေကာ သူ့ဆရာရဲ့လက်ထောက်အဖြစ်နဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေကို ကူလုပ်ပေးရသည်။
တရက်မှာတော့ သူဂျန်းရှင်းသွားရင်းနဲ့ နှင်းမြတ်မွန်နဲ့ဆုံသည်။နှင်းမြတ်မွန်ကနေပြည်တော်မှာပင်။ သူ့ယောက်ကျားက ရန်ကုန်မှာတဲ့။ကလေးတစ်ယောက်ရနေပြီ။နှင်းမြတ်မွန်က ကလေးရပြီး နည်းနည်းလေးပြည့်သွားတာကလွဲရင် ပိုပြီးကြည့်ကောင်းလာသလို ရင့်ကျက်သွားတာလဲပါမည်။ သူ့ကိုတွေ့တော့ဝမ်းသာအားရပင်။အရင်လိုပင်။စကားထိုင်ပြောကြရင်းနဲ့ ပိုးပိုးလဲ နေပြည်တော်မှာပဲလို့ပြောသည်။ သူကလေးရပြီလားမေးတော့ သူ့ဘဲနဲ့ ပြသာနာဖြစ်ပြီးမယူဖြစ်ဘူးလို့ပြောသည်။ဘာလို့လဲမေးတော့ ပိုးပိုးရည်းစားက ပိုးပိုးအပြင်နောက်တယောက်နဲ့ရှုပ်နေတာပိုးပိုးကသိသွားတယ်လို့ပြောသည်။အဲ့ထိပိုးပိုးက ခွင့်လွှတ်သေးတယ်တဲ့။ အဲကောင်မလေးကကိုယ်ဝန်ရှိသွားတော့ ပိုးပိုးကိုလာတွေ့ပြီး သူ့ရည်းစားကရှောင်နေလို့ဆိုပြီး ပြသာနာလာရှာတယ်လို့ပြောသည်။အဲ့နောက်ပိုင်း သူတို့ပြတ်သွားတယ်လို့ပြောသည်။သူလဲ ပိုးပိုးဖုန်းနံပါတ်နဲ့ နေရာကိုမေးတော့ ပိုးပိုးက ခု ဌာနတစ်ခုမှာဝင်လုပ်နေတယ်လို့ပြောပြီးနေရာနဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပေးသည်။သူလဲ စိတ်ထဲမှာအရမ်းကိုဝမ်းသာသွားသည်။နှင်းမြတ်မွန်ကလဲ သူ့ကို ပိုးပိုးကို ယူလိုက်ပါလားလို့ပြောတော့ သူကလဲ မူလိုက်သည်။ပြန်ခါနီးကျတော့ သူက နှင်းမြတ်မွန်ကို ကလေးရောမေးတော့ ကလေးက သူ့မိဘတွေနဲ့ထားတယ်လို့ပြောသည်။သူကတော့ တစ်ပတ်တခါ နှစ်ပတ်တခါပြန်သည်တဲ့ရန်ကုန်ကို။သူလဲ နှင်းမြတ်မွန်ကို လိုက်ပို့ပေးလိုက်သည်။နှင်းမြတ်မွန်ကို ပို့ပြီး အပြန်မှာတော့ သူ့စိတ်တွေက ဘယ်လိုမှ ထိန်းမရနိုင်တော့ပေ။ပိုးပိုးနေတဲ့အဆောင်ဖက်ကို ဦးတည်လိုက်သည်။အဆောင်ရှေ့ရောက်တော့ ကားပေါ်ကဆင်းကာ ပိုးပိုးနဲ့တွေ့ချင်ကြောင်းပြောတော့ ခေါ်ပေးလေသည်။သူလဲ စောင့်နေရင်း ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့။ရင်တွေကလဲအရမ်းခုန်နေသည်။နောက်မှာ ခြေသံတွေကြားလိုက်ရသည်။
နှစ်ယောက်သား ရပ်ကာတယောယ်နဲ့တယောက်ကြည့်နေလိုက်ကြသည်။ပိုးပိုးလဲအရမ်းကိုပျော်သွားသည့်ပုံ။ အိမ်နေရင်း ညဝတ်ဂါဝန် အရှည် ပန်းရောင်လေးနဲ့ ကျေါလည်လေါက်ဆံပင်နီညိုရောင်ကပိုကယိုလေးနဲ့ လှနေတဲ့ပိုးပိုးရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ရင်းသူလဲ စကားလုံးတွေဆွံ့အနေရသည်။ရင်ထဲမှာပြောစရာတွေပြည့်ပြီး ပါးစပ်ကထွက်မလာတော့။တော်တော်လေးကြာမှပိုးပိုးဘေးက သူငယ်ချင်းးက
”ဟဲ့ပိုးပိုး ဧည့်သည်ကို ဧည့်ခံဦးလေ”သတိဝင်လာကြသည်နှစ်ယောက်သား။အဲ့ကျမှ ပိုးပိုးလဲ ”ကိုကြီးထိုင်ဦးလေ”
”အင်းအဲ့ဒါဆိုခဏစောင့်ပေးနော်”ပြောပြီး ပိုးပိုးလဲ အခထဲကိုဝင်သွားသည်။
အင်္ကျီအဝါလတ်ပြတ်နဲ့ထမိန်အနီပြောင်လေးဝတ်ကာထွက်လာသည်။မျက်နှာမှာတော့ သနပ်ခါးကို လိမ်းကာပါးနှစ်ဖက်မှာ ပါးကွက်ကွက်ထားသည်။သူ့ကားပေါ်ကို ဝင်ထိုင်လိုက်တော့
”အရမ်းသတိရတာပဲကိုကြီးရယ်။ကိုကြီးကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတော့ အရမ်းပျော်သွားပြီး ဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး”
”ပိုးနေတဲ့နေရာကို ဘယ်သူပြောတာလဲ။မမနှင်းမြတ်လား မမအေးမိစံလား”
”နှင်းမြတ်မွန်။ခုနက သူနဲ့ဂျန်းရှင်းမှာတွေ့တော့စကားစပ်မိရင်း ကိုကြီးကပိုးအကြောင်းမေးတော့ ပြောပြရင်း သိလိုက်ရတာ။တော်သေးတာပေါ့ ပိုးရယ်။ဖူးစာမှန်လို့ ပြန်ဆုံရတာ”
”အမယ် ဘယ်သူကသူ့ဖူးစာလဲ။ဒီတိုင်းမရပါဘူး။ပိုးကိုချစ်ခွင့်အရင်ပန်ရမယ်။ပြီးရင် ပိုဆီးကအဖြေကို စောင့်ရမယ် ဒါပဲ။ဒီတိုင်း ဘယ်သူက လက်ခံမှာလဲကဲ”
”အာ ပိုးကလဲ အဲ့ဒါဆို ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ”
”ဟင် အနည်းဆုံးတော့ နှစ်နှစ်ပေါ့။ချစ်ခွင့်ပန်ပြီးရင် စဉ်းစားဦးမယ်လေ”
”အာ အဲ့လို့ဆို ကိုကြီးအသက်က ကြီးနေပြီမရဘူးမရဘူး။ခုတခါတည်းလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတယ်ကွာ။ပိုးကို ကိုကြီးလက်ထပ်ပါရစေကွာ။လက်ထပ်ခွင့်ပေးပါနော်”
”အာ ဒီတိုင်းကြီးက မမိုက်ပါဘူး။နိုင်ငံခြားပြန်ကြီးကလဲ။ရိုမန်တစ်မဆန်လိုက်တာ။မရဘူး။တဆင့်ချင်းပဲ။ ချစ်ခွင့်အရင်ပန်ဒါပဲ”
”ပိုးကလဲ ရစ်ပြီ။အဲ့လိုဆို ခုတခါတည်းကားတင်ပြေးလိုက်မှာနော်”
”ဟာ အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့နော်။ကိုကြီးနော ငိုလိုက်မှာ။အော်လိုက်မှာ”
”ဒီမှာ သမီးကို ကားတင်ပြေးမလို့တဲ့”တကယ်အော်တာမို့ သူလဲ ကားမှန်ကိုအမြန်တင်လိုက်ပြီး ”ဟာ ဟိတ် တကယ်အော်တယ်ကြည့်စမ်း။ကောင်မလေး တော်တော်ဆိုးနေတယ်”
”ခစ်ခစ်ခစ်”နှစ်ယောက်သား ကြည်နူးစွာရီလိုက်ပြီး ပိုးပိုးပုခုံးကိုဖက်လိုက်တော့ ပိုးပိုးလဲ သူ့အပေါ်အလိုက်သင့်မှီချလိုက်သည်။သူတို့နေ့လည်စာကို စားပြီးစကားပြောနေလိုက်ကြသည်။ပိုးပိုးက ခုဟိုတယ်နဲ့ခရီးမှာအလုပ်ဝင်နေတာပင်။ကုမ္ပဏီမှာလုပ်ရင်း လူကြီးတယောက်နဲ့ဆက်စပ်မိရင်း သူ့ကို အလုပ်သွင်းပေးတာလို့ပြောသည်။သူ့ရည်းစားနဲ့က အပြင်မှာရှုပ်ပွေတာကို သူသိပေမဲ့ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့သည်လို့ပြောသည်။သူသွားပြီးနောက်ပိုင်း သိပ်မတွေ့ဖြစ်ကြတော့လို့ပြောသည်။ သူ့ကောင်လေးက တဖြေးဖြေးနဲ့ ခြေလှမ်းပျက်လာသည်ကိုသူသိပေမယ့် မသိချင်ယောက်ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောပေမယ့် သူခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ကောင်မလေးတယောက်က ကိုယ်ဝန်ရလာပြီး သူ့ကို ပြသနာလာရှာမှ သူအကြီးအကျယ်ပေါက်ကွဲသွားတာလို့ပြောသည်။အဲ့နောက်ပိုင်း သူ့ရည်းစားနဲ့ သူ့ရည်းစားမိဘတွေနဲ့ရော သူ့မိဘတွေရောရှေ့မှာတင် မေးကာ သူတို့စေ့စပ်တာကိုဖျက်လိုက်တာလို့ပြောသည်။
သူ့ရည်းစားကတော့တောင်းပန်ပေမယ့် သူကတော့လက်မခံတော့။ခုတော့ အဲ့ကောင်မလေးနဲ့ယူကာ ကလေးတယောက်ရနေပြီလို့ပြောသည်။သူလဲ အဲ့နောက်ပိုင်းကုမ္ပဏီက ထွက်ကာ ခုဒီမှာစာမေးပွဲဝင်ဖြေရင်း နေပြည်တော်သို့ပြောင်းလာတာဟုပြောသည်။သူတို့နှစ်ယောက်စကားကတော့ ပြောမကုန်နိုင်တော့ပေ။
သူတို့နှစ်ယောက် ရုံးဖွင့်ရက်ဆို ညတိုင်းနီးပါးတွေ့သလို ရုံးပိတ်ရက်ဆိုနှစ်ယောက်သားလျှောက်လည်ကြသည်။ ပိုးပိုးကို ကြိုက်တဲ့ သူတွေကလဲ များလှသည်။ပိုးပိုးကလဲ သူ့ကိုပင်။မတွေ့တဲ့အချိန်ဆိုဖုန်းနဲ့။ လိုင်းပေါ်မှာလဲတွေ့ကြသည်။ခုမှ တကယ့် ချစ်သူဖြစ်ရသည်ကိုး။သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကို နှင်းမြတ်မွန်တို့ အေးမိစံတို့လင်မယားတွေကိုပြောပြတော့ ဝမ်းသာနေကြသည်။သဘောတူကြသည်။သူလဲ ပိုးပိုးနဲ့တိုင်ပင်ကာ အိမ်တွေကိုဖွင့်ပြောရအောင်လို့ပြောတော့ ပိုးပိုးကလဲခေါင်းငြိမ့်တာနဲ့ သူလဲ သူ့မိဘတွေကို ဖွင့်ပြောသလို ပိုးပိုးကလဲပြောသည်။သူ သူ့ဆရာကိုလဲ အသိပေးတော့ သူ့ဆရာကလဲသဘောကျသည်။သူတို့ယူရင် အခန်းပေးမှာလားမေးတော့ ယူရင်ရမယ်လို့ပြောသည်။နှစ်ဖက်မိဘတွေလဲသိသွားပြီမို့
ပိုးပိုးမိဘတွေနဲ့သူအရင်တွေ့တော့ အိုကေသလို ပိုးပိုးကလဲ သူ့မိဘတွေနဲ့အဆင်ပြေသည်။ ဒါကြောင့်နားဖောက်တောင်းရမ်းကာ လက်ထပ်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲကြသည်။သူလဲအ ခန်းရတော့ နှစ်ယောက်သား အခန်းကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ကာ ခန်းဝင်တွေကို စိတ်ကြိုက်ဝယ်ပြီးထည့်သည်။နှစ်ယောက်သားပျော်နေကြသည်။
ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီး တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာတော့ ပိုးပိုးမှာ သူ့ရင်သွေးလေးလွယ်ထားရပြီ။ လက်ထပ်တဲ့အချိန်ကစပြီး ပိုးပိုးက သူ့အကြိုက်လုပ်ပေးတက်သလို သူကလဲ ပိုးပိုးစိတ်ကြိုက် လုပ်ပေးသည်။ နှစ်ယောက်သား အပေးအယူမျှစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အိမ်ထောင်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။သူချစ်ကိုယ်ချစ်မို့လဲ သံယောဇဉ်က ပိုပြီးခိုင်သည်။ပိုးပိုးကိုယ်ဝန်ရတော့ ပိုးပိုးနဲ့ အတူမနေရတော့။ပိုးပိုးကမပေးတော့ပေ။ တိရိစ္ဆာန်တွေတောင် ကိုယ်ဝန်ရရင် အတူမနေဘူးဆိုပြီး တကယ့်ကိုမပေး။သူကလဲ ချစ်တာမို့ ဘာမှမပြောပေ။ ရီလဲရီရသည်။ပိုးပိုးကနေနိုင်သည်။သူလဲ အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းက ဘယ်သူနဲ့မှ မရှုပ်တော့။ ပိုးပိုးကဘာမှမပြောပေမယ့် သူဆင်ခြင်သည်။ချစ်တာကိုး။ဒီလိုနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘဝလေးထဲကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးတစ်ဦးဝင်လာခဲ့သည်။ပိုးပိုးက သမီးရလာမှ ပိုပြီးလှလာသလို့ ကိုယ်ရေလဲ စစ်သွားကာ အရမ်းကို ကြည့်ကောင်းလာသည်။သူ့အပေါ်လဲ အရင်ကထက်ကို ပိုချွဲလာသည်။သူလဲ ရုံးနဲ့ အိမ် သမီးနဲ့မိန်းမကြားထဲမှာပဲ သံသရာလည်နေရတော့သည်။
သူ ဘေးနားမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ မိန်းမနဲ့ သမီးကို ငေးကြည့်နေရင်းအတိတ်ကအကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားရင်းနဲ့ နှင်းမြတ်မွန် အေးမိစံတို့ကိုသတိရသွားသည်။သူတို့နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးကတည်းကမတွေ့ဖြစ်ကြပေမယ့် လိုင်းပေါ်မှာတွေ့တိုင်းတော့ အရိပ်အမြွတ်ပြောတက်ကြသည်။သူ သူမတို့တွေနဲ့ တဒင်္ဂစိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရပေမယ့် ပိုးပိုးနဲ့ကြတော့ တဒင်္ဂ ကနေ ထာဝရဖြစ်သွားကာ သမီးတစ်ယောက်တောင်ရနေပြီ။ဒီသမီးနဲ့ ဒီဇနီးက သူ့ဘဝအတွက် နံပါတ်တစ်အရေးကြီးဆုံးဆိုတာ သူဟာသူပဲ သိသလို ချစ်ဇနီးလေးကလဲ သိတာမို့ ပိုပြီးသာယာကြည်နူးတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးလေးကို အမြဲတည်ဆောက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်း ချစ်ရတဲ့သမီးကို အသာလေးနမ်းပြီး ချစ်ဇနီးပါးလေးကို ငုံကာ နမ်းလိုက်ရင်း စောင်ခြုံပေးလိုက်ကာ နောက် နေ့သစ်တွေအတွက် ကင်ဆိုင်နိုင်ရန် မျက်လုံးကိုမှိတ်ကာ အိပ်စက်လိုက်လေတော့သည်။